ကျွန်မဘ၀ရဲ့ မကောင်းခဲ့တဲ့အတိတ်ကံကြောင့် ကျွန်မချစ်သော မောင့်ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့တာပါမောင်ရယ်...ဖြူစင်လွန်းတဲ့ မောင့်ရဲ့အချစ်တွေကို မသန့်ရှင်းခဲ့တဲ့ ကျွန်မဟာ မခံယူဝံပါဘူးမောင်ရယ်..... ကျွန်မကြောင့် မောင်ဘ၀လေး ညိူးငယ်မှာ မောင်ဂုဏ်ငယ်သွားမှာကို ကျွန်မအရမ်းကြောက်တယ်မောင်ရယ်....မောင့်ကိုကျွန်မချစ်ပါတယ်... ကျွန်မချစ်လွန်းလို့လဲ ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့မောင်ရယ်... မောင်ကျွန်မကို နားလည်းပေးပါမောင်ရယ်... ပါပြင်ကမျက်ရည်တွေက မောင်နဲ့ပတ်သတ်မှ ကျတက်လာတာပါမောင်ရယ်... ကျွန်မကို မိန်းမပျက် ...မကောင်းတဲ့မိန်းမ ဘယ်လိုပဲလူတွေခေါ်ခေါ် ကျွန်မချစ်တဲ့မောင့်ကို မိန်းမပျက်ယောကျာင်္း.. မကောင်းတဲ့ကောင်မလင် ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ လူတွေဝိုင်းပြောမှာကိုမလိုလားဘူး မောင်ရယ်..“နွေ... မောင့်မှာဘာအပြစ်ရှိလို့လဲ” လို့မောင်မေးခဲ့တယ် အပြစ်ရှိတာမောင်မဟုတ်ပါဘူး... အပြစ်ရှိသူက ကျွန်မပါမောင်ရယ် .....“မောင် အားလုံးကိုရင်ဆိုင်ရဲတယ် နွေ” ဒီစကားက တကယ့်ကို ကျွန်မအတွက် အားအင်တစ်ခုဖြစ်စေပေမယ့်... လူဆိုတာ ကိုယ်ချစ်တဲ့လူကိုတော့ ဂုဏ်မြင့်စေချင်တာပဲမောင်ရယ်.. ကျွန်မမောင့်ကို မုန်းတာမဟုတ်ပါဘူး....... မသန့်ရှင်းတဲ့ ကျွန်မကိုယ်နဲ့ဘ၀ကို မုန်းတာပါ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မမုန်းတာပါမောင်းရယ်.........“မိနွေ..မိနွေ.. အပြင်မှာ ထူးသစ်ရောက်နေတယ်” ငါဘယ်လိုပြောလိုက်ရမလဲ...“မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါ မာလာရယ်” ငါသူနဲ့မတွေ့ခြင်ဘူး... သူနဲ့ဘယ်တော့မှ တွေ့ဖို့လည်းစိတ်မကူးတော့ဘူး မရှိဘူးသာပြောလိုက်ပါဟာ.... အေး...အေး..ငါပြောလိုက်မယ်... မာလာအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားတော့မှ ကျွန်မပါပြင်းကမျက်ရည်တွေက ဘယ်လိုမှတားဆီးလို့မရအောင် ကျလာခဲ့တယ်......... မောင်နဲ့ မာလာတို့ပြောနေတဲ့စကားသံတွေကို အခန်းထဲက ကျွန်မကြားနေရတယ်................“ကိုထူးသစ်... နွေ..နွေမရှိဘူး ” သူမနက်ထဲက ထွက်သွားတာ ပြန်မရောက်သေးဘူး..လိမ်ညာသောစကားသည် အဆင်မချောတက် မာလာစကားတွေက လိမ်နေမှန် ကျွန်တော်သိတယ်.....“မလာ ကျွန်တော်ကို မညာပါနဲ့ဗျာ..” နွေအိမ်ထဲမှာ၇ှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်... ကျွန်တော်ကို နွေဘာလို့ရှောင်နေတာလဲ.. ကျွန်တော်မှာဘာအပြစ်တွေရှိလို့လဲ... နွေကျွန်တော်ကိုမချစ်ဘူးဆိုတာ မယုံဘူး နွေကျွန်တော်ကိုချစ်တာ ကျွန်တော်သိတယ်... ကျွန်တော်လဲ နွေးကိုအရမ်းချစ်တယ်ဗျာ မာလာ .. နွေကိုခေါ်ပေးပါဗျာ..“ခက်ပါလား ကိုထူးသစ်ရယ် မာလာတကယ်ပြောတာ နွေမရှိဘူး မနက်တည်းကအပြင်ဆိုပြီး ထွက်သွားတာ ပြန်မလာသေးဘူး” ကဲ ကျွန်မလဲ အလုပ်ရှိလို့နော် ကိုထူးသစ်အားနာပါတယ်... သွားတော့နော်.. ပြောလဲပြော မာလာတံခါးပါပိတ်လိုက်တယ်..... မာလာ.. မာလာ.. နေပါအုံးဗျာ..မာလာ ကျွန်တော်ဘယ်လိုအော်ခေါ်ပေမယ့် မာလာတံခါးလာမဖွင့်တော့ဘူး............. နွေရယ်..ဘာလို့မောင့်ကို ရှောင်နေတာလဲကွာ.. မောင့်ကိုရူးအောင်လုပ်နေတာလား မောင့်ကိုသတ်နေတာလားကွာ... မောင့်အသဲတွေကိုတစ်စစီဖြစ်အောင် လုပ်နေတာလား နွေရယ်............နွေ ကျွန်တော်ဘ၀ထဲကို ၀င်ရောက်လာတဲ့နေ့ကို မှတ်မိသေးတယ်.......... မိုးတွေအရမ်းရွာတဲ့နေ့ပေါ့... ထီးမဆောင်ထားတက်တာလဲ ကျွန်တော်အကျင့်ပါ... မိုးက အစိုးမရပဲ ချက်ခြင်းရွာချလာတော့ ကျွန်တော် မိုးရေထဲကပြေးရင် မိုခိုဖို့နေရာကိုရှာလိုက်မိတယ်.... မိုးကသဲတော့ ဘာကိုမှသိပ်မမြင်ရဘူး ..အွန့်... အင့်...အသံနှစ်ခုပြိုင်တူထွက်ပေါ်လာတယ်... ကျွန်တော်နှင့်တိုက်မိသူက ကျွန်တော်ကိုလှမ်းဖက်လိုက်သလို ကျွန်တော်ကလဲ ဟန်ချက်ပျက်စွာနဲ့ သူ့ကိုပြန်ဖက်ရင် နှစ်ယောက်သားလဲကျသွားတယ်... အထိတွေ့တစ်ခုကြောင့် ကျွန်တော်နဲ့တိုက်တာ မိန်းကလေးဆိုတာကို မျက်နှာကြည့်စရာမလိုပဲ ကျွန်တော်သိခဲ့တယ်... ကျွန်တော်မျက်နှာက သူ့ရဲ့ရင်သားတစ်နေရာကို မိမိရရ ဖိထားမိနေတယ်လေ.. .. သေချာအောင်မျက်နှာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ မိုးရေထဲက သူ့မျက်နှာလေးက ကျွန်တော်ရင်ကို ခုန်စေတယ် သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးကဗျာအရမ်းဆန်တယ် ... ဒီအချိန်ကျွန်တော်ရင်ခုန်နေတာ.. သူမျက်နှာလား .. ကျွန်တော်မျက်နှာနဲ့ထိနေတဲ့ သူ့အထိတွေ့ကြောင့်လား မသေချာခင်မှာပဲ... ဟိတ်.. ထ..ဒီမှာနာနေပြီး.. သူသတိဝင်ပြီးပြောတော့မှာ ကျွန်တော်ထပြီးသူ့ကိုဆွဲထူပေးလိုက်တယ်..ဟီးးးးးးး ဆောရီနော် .. ကျွန်တော်က လန့်တက်လို့ပါ ငယ်ငယ်ထဲက လန့်ရင်တွေ့ရာကိုဖက်တက်တဲ့အကျင့်ရှိလို့ပါ...ကျွန်တော်နောက်လိုက်တာကို တော်တော်သဘောကျသွားပုံရတယ်...ဟားဟား မင်းကအလာကြီးပဲ... တော်တော်နာနေအုံးမယ်.....အိုကေ ငါချမ်းနေပြီး သွားတော့မယ်..ဟုတ်ပါ့ဗျာ သူပြောမှ ကျွန်တော်ကြည့်မိလိုက်တယ်.. သူ့ဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီက ပါးလွန်းလှပါတယ်ဗျာ...အောက်ကဘရာဇယာကိုတောင်မြင်နေရတယ်....ရေစိုလို့ကပ်နေတဲ့ သူ့အကျီရဲ့အောက်မှာ ဖြူဖွေးတဲ့ သူ့အသားရေ... ဟော အောက်ကိုလဲကြည့်ပါအုံး ပျော့အိအိနဲ့ ဘာအသားလဲ တော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး.. ရေတွေစိုလို့ သူ့ပေါင်လုံးအတိုင်းကပ်နေတာ.. တော်တော်လှတဲ့ပန်ချီကားတစ်ချပ်ကို ငေးကြည့်သလို ကျွန်တော်မျက်စီတွေက သူ့စီကခွာလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်... သူ့ရဲ့ဖြောင့်တန်းနေတဲ့ပေါင်သွယ်လေး.. ပြီးတော့ စွင့်ကားလွန်းတဲ့ တင်... မိုမောက်ပြီးလုံးကြွနေတဲ့ရင်.... သေးကျင်တဲ့သူ့ခါးလေးတွေ...အဆိုးဆုံးက ရှည်လျားတဲ့သူ ဆံပင်တွေပဲ.... အရာရာဟာ ကျွန်တော်အတွက်.. လောကကြီးကို မေ့နိုင်စွမ်းရှိတဲ့... ပန်ချီကားလေးပါပဲ....ဟိတ်ကောင်လေး..ဘာကြည့်နေတာလဲ ...ဖယ် တို့သွားတော့မယ်... ပြောပြောဆိုဆို သူကျွန်တော်ဘေးမှ ထွက်သွားတော့မွှေးပျံလွန်းတဲ့ရနံတစ်ခု ကျွန်တော်နားမှာ စွဲကျန်ခဲ့တယ်................နောက်နေ့တွေမှစပြီး အမည်မသိလိုက်ရသော မမ တစ်ယောက်ကို စွဲလမ်းခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်စိတ်တွေက နေရာတစ်ချို့မှာ မသိစိတ်တစ်ချိုတွေနဲ့ ရှာနေမိခဲ့တယ်......... ဒါပေမယ့် တစ်လဆိုသော အချိန်ကာလသာ ကုန်ဆုံးသွားပေမယ့် ကျွန်တော်ချစ်သော မမ ကိုမတွေ့ခဲ့ပါ.................တစ်နေ့သော ညနေခင်မှာ..........ကျွန်တော်ဆီကို ကျော်ကြီးရောက်လာပါသည်......ဟေ့ကောင်ထူးသစ်... လာခဲ့ကွာ..ငါဒီနေ့ခိုင်လာတယ်... မင်းကိုရှယ်ပြုစုမယ်....ခွေးကောင် မင်းကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခိုင်လာတယ်လို့ပြောရအောင် ဘာအလုပ်လုပ်လို့လဲမင်းက... ငါ့ကိုလာကြွားရအောင်ဒီကောင်ဘာအလုပ်မှ လက်ကျောမတင်းတာ ကျွန်တော်သိတာပေါ့... ဘာတဲ့ဒီကောင်ပြောနေကျစကား လက်ကျောတင်းဖို့မလိုဘူး လကျောတင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ... ဒါဒီကောင်လက်သုံးစကား.. သူ့စကားနဲ့အညီ ဒီကောင်မိန်းမ ကိစ္စဆိုတော်တော်လေးဝါသနာပါတဲ့ကောင်...“မဟုတ်ပါဘူးကွာ မင်းကလဲ ငါအလုပ်လုပ်လို့မဟုတ်ပါဘူး..ဟိုတစ်ခါငါ့ဖွားသေတုန်းက အမွေရလိုက်တာလေ..အဲဒါအခုမှ ပို့ပေးလိုက်လို့..ဒါကြောင့်သွားကဲမယ်လို့...” မင်းကိုပြောတာပေါ့.............အော်...တော်တော်တရားရဖို့ကောင်းတဲ့ မြေးတွေပဲ...ငါသာဆိုမင်းကို ထမိန်အစုတ်တောင်မပေးဘူး...ကဲ ကဲ သွားမယ်လုပ်ရေမိုးချိုး.. ပြီးတော့မင်းကိုငါပြောစရာလဲရှိတယ်..လမ်းရောက်မှပြောမယ်ဘာလဲကွာ အခုပြောလဲရတာပဲကို မင်းကလဲဟာ.. မရလို့ပေါ့ကွာ.. သွားသွားရေသွားချိုး ငါမင်းကိုနောက်မှပြောမယ်.....ကျွန်တော်လဲ မေးမရတော့မှန်းသိတာနဲ့ ရေချိုးခန်းထဲဝင် ရေအမြန်ချိုးပြီး.. အ၀တ်အစားလဲကာ မြန်မြန်ထွက်လာလိုက်တယ်...............လမ်းရောက်တော့...ကျွန်တော်မနေနိုင်စွာဖြင့် ကျော်ကြီးလမ်းမှာပြောမယ်ဆိုတာဘာလဲကွ..ငထူး ငါမင်းကိုဒီညဆိုင်မှာ အ၀ကျွေးမယ်ကွာ.. မင်းပြီးရင်ငါ့ကိုတစ်နေရာလိုက်ခဲ့ပေးနော်.. သူငယ်ချင်းဘယ်ကိုလဲ....ဘာလုပ်ဖို့လဲ..ဘယ်အချိန်လဲ..ဟာ ..မင်းမေးခွန်းတွေကလဲကွာ များလိုက်တာ..... ဟီးးးးးးးးးး မာလာတို့အိမ်ကိုသွားမလို့လေ..ဟာကွာ..ငါမလိုက်ချင်ဘူးဟေ့ကောင် အဲဒီအိမ်ဆို ငါဒါမျိုးလဲ ၀ါသနာမပါဘူး.. ရှက်လဲရှက်တယ်... အမှန်ပါ ကျွန်တော်ဒီအသက်အရွယ်ထိ ဒီလိုလိင်ကိစ္စမျိုးကို ငွေကြေးဖြင့်အာသာမဖြေပါ.....ချစ်သူနှင့်အဆင်ပြေမှသာ စိတ်နောက်လိုက်တက်ပါတယ်............ ကျော်ကြီးကတော့ တွေ့မရှောင်လေ...........လုပ်ပါသူငယ်ချင်းရာ.. မင်းမလုပ်ချင်နေ..ငါပဲလုပ်ပါ့မယ်ကွာ..ငါမာလာကို အရမ်းလွမ်းနေလို့ပါကွာ..မာလာက အပေးကောင်းတယ်ကွ ပြီးတော့ပြုစုတာလဲတော်တယ်.. တစ်ခါတစ်လေဆို ငါ့ကို နတ်ပြည်တောင်ခေါ်သွားလား ထင်ရတယ်....တော်စမ်းပါကွာ... မင်းစကားတွေ..ငါလဲဒါမျိုးခံစားဖူးပါတယ်ကွာ... မင်းကလွန်ပါတယ်... မဟုတ်ဘူးကွ သူတို့ပြုစုပေးတာက စီးပွားရေးသဘောတင်မဟုတ်ဘူး..တကယ်ဆန္ဒတစ်ခုကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပေးတာကွဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်...(........)မြို့ရဲ့ထင်ရှားလှတဲ့ (.....) ဆိုင်လေးမှာ ကျွန်တော်နဲ့ကျော်ကြီး.. ဘီယာလေး ဇိမ်ခံစုပ်ရင်းနဲ့..အချိန်တွေငွေတွေကိုဖြုန်းတီးခဲ့တယ်............ပြီးတော့ ကျော်ကြီးဇတ်လမ်းကပြန်စတယ်..မင်းအဖော်ပဲလိုက်ခဲ့ကွာ နော်....ငထူး ငါတကယ်ပါကွာ သူငယ်ချင်းရာ................အော်..သူကျွေးတာတော့စားပြီးမှတော့ လိုက်ရတော့မှာပေါ့ကွာ မင်းကျွေးထားတာတွေက လည်ချောင်မှာပဲရှိသေးတာကို ဗိုက်ထဲမှမရောက်သေးတာ..လိုက်ပါ့မယ်ကွာ လိုက်ပါမယ်.. ကျွန်တော်စလိုက်တော့ ကျော်ကြီးကဟာ.. အဲလိုမဟုတ်ပါဘူးကွာ..ငါတကယ်သွားချင်လို့အကူညီတောင်းပြီးအဖော်ခေါ်တာပါကွာအေးပါကွာ ငါသိပါတယ် ငါကလဲစတာပါကွာ.............စကားတပြောပြောနှင့် မာလာတို့အိမ်ကိုရောက်လာသည်...မာလာ.. မလာ... မာလာ..ကိုကျော်ပါ....ကျော်ကြီးက သူ့မိန်းမကိုခေါ်သလို ဖာသည်မကိုခေါ်နေတာက...မာလာ..မလာ..တံခါးပွင့်လာသည်... မိန်းကလေးတစ်ဦးလာဖွင့်ပေးသည်..ဟာ........ ကျွန်တော်မျက်လုံးများကျယ်သွားပြီး.. မမ... ကျွန်တော်ရှာနေသော မမ.. ကျွန်တော်ရဲ့ပန်ချီကားလေး..ဒါပေမယ့် မမ ကဒီကိုဘယ်လိုရောက်နေတာလဲ... ဒါကမကောင်းတဲ့အိမ် ဒါဆို မမ ကကော..ဘာလဲ..ခဏအတွင်းမှာ ကျွန်တော်မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ ရှုပ်ကုန်သည်.. ဒါကို မမ ကတော့မသိ.. ကျော်ကြီးနှင့်စကားပြောနေသည်..မာလာမရှိဘူးကွ.... သူဟင်းသွားဝယ်တယ်....... လာလေ အထဲကိုပြောရင်း မမ ကရှေ့ကဦးဆောင်ထွက်သွားသည်... အခုမှသေချာကြည့်မိတယ် မမ ရဲ့တင်လုံးတွေက ၀ိုင်းနေတာပဲ..ကဲ..ထိုင်ကြဦးနော်.... မာလာ လာတော့မှာပါ....ဟို..ဟို.. ဒီက ကျွန်တော်ကိုမှတ်မိလားဟင်... ကျွန်တော်မနေနိုင်စွာ မမ ကိုမေးမိလိုက်သည်....မမ က ရယ်ပြီးစိတ်တော့မရှိနဲ့ငါ့မောင့် အစ်မက လူအများနဲ့ဆိုတော့ သိပ်မမှတ်မိဘူးလေ..... ဘယ်နေ့က ဆိုတာပြောရင်တောင် တော်တော်စဉ်းစားရတယ်.......ဟာ..သွားပြီး ကျွန်တော်ချစ်သော မမ က ဒါလား မာလာတို့လိုပဲ မကောင်းတာလုပ်စားတာလား...........မဟုတ်ပါဘူး မမ ကျွန်တော်နဲ့ မိုးရွာတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာတွေ့တာလေ မမနဲ့က မှတ်မိလား လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကလေမမ မှတ်မိလား..........မမ စဉ်စားလိုက်သလိုလုပ်ပြီး အော်........သိပြီးသိပြီးးးးးးးးး ဆောရီးနွေက နွေ့ရဲ့ ဖောက်သည်ထဲက ထင်လို့နော်............ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာ. ဖော်မပြနိုင်လောက်တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရတယ်ဗျာ.. ကျွန်တော်သိလိုက်တာတော့ ကျွန်တော်ချစ်သော မမ ကျွန်တော်တမ်းတစွာ လိုက်ရှာနေသော မမ ကို ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတွေ့မယ်လို့မထင်ခဲ့ပါဘူး............ပြီးတော့ မမ က ကျွန်တော်ကို မမှတ်မိဘူးပြောရင် ကျွန်တော်ကျေနပ်စွာနဲ့နေမိအုံးမှာပါ....အခုတော့ သူ့ဖောက်သည်တွေထဲကထင်လို့တဲ့ဗျာ...........ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြောသမျှကို ဘေးနားကဘာမှဝင်မပြောပဲ ကျော်ကြီးက မာလာပြန်လာမယ့်လမ်းကိုသာ မျှော်နေတယ်..အော်..ဒါနဲ့ မင်းနမည်က ဘယ်သူလဲ...မမ ပြောမှကျွန်တော်သတိရသွားတယ်... ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်က ထူးသစ်ပါ မမအဲ.. မင်းက မမ လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ နွေက မကြိုက်ပါဘူး.. နွေက ကိုယ်တိုင်လဲ နွေလို့ပြောတယ် နွေလို့ခေါ်တာကိုလဲ သဘောကျတယ်..ဟင်း... မမ အဲ..နွေ ဟုတ်လား နွေဆိုတာပူပြင်းတယ် မ ..အဲ ကျွန်တော်အကျင့်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်.... မကောင်းပါဘူးဗျာ..အဲဒီနမည်ကြီးက“ဟုတ်တယ်လေ နွေဆိုတာပူပြင်မှုတစ်ခုပဲလေ.... ပြီးတော့ခြောက်သွေ့မှုတွေပဲသူကပိုင်ဆိုင်တာလေ.... သူ့မှာဆိုပြေမှုတွေမှမရှိတာ”နွေလဲ အဲလိုပဲ နွေဘ၀ကသာယာချမ်းမြေ့မှုဆိုတာကို လူမှန်းသိတက်တဲ့အရွယ်ထဲကမရှိခဲ့တာလေ......ဒါကြောင့် ဒီအမည်လေးကိုကြိုက်တာ..အော်............နွေအကြောင်းတွေကို သိချင်ပါတယ်..ဒီအချိန်မှာမေးလိုက်ရင် လူမှုရေးအရ မကောင်းလို့ ကျွန်တော်အော်တစ်လုံးတည်းနဲ့စကားစကို ဖြတ်လိုက်ရတယ်....... မဖြတ်လို့လဲမရတော့ဘူး ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတုန်း မာလာပြန်လာပြီးဆိုပြီး ကလေးငယ်က မိခင်လာလို့ နို့တောင်းဆို့မယ်ပုံနဲ့ ကျော်ကြီးအားရ၀မ်းသာထပြောလိုက်တော့မှ ကျွန်တော်လမ်းကိုကြည့်မိတယ်...........ဟုတ်ပါတယ် ကျော်ကြီးဆွဲလမ်းတဲ့ မာလာဟာ ယောကျာင်္သားတို့ကို စွဲမက်စေလောက်တဲ့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နဲ့..ကာလာစုံကိုချယ်ထားပြီး.... သူဝတ်လာတဲ့စကတ်လေးက ပေါင်လယ်လောက်ထိ ရှိတယ်.....တော်တော်လေးတော့ကြည့်ကောင်းပါတယ်...“ဟယ်..ကိုကျော်ရောက်နေတာကြာပြီးလား ဆောရီးကွာ မာလာဟင်းသွားဝယ်နေတာ ဟင်းချက်ဖို့ပြင်းလို့” ထမင်းစားသွားပါလား ကိုကျော်ဟင်အင်း မစားတော့ဘူးမာလာ ကိုယ်တို့အခုပဲအပြင်ကစားပြီးပြန်လာတာ..အော်..ဒါမျိုးကျတော့ ကိုကျော်က မာလာကိုသတိမရတော့ဘူးပေါ့... ဟုတ်လား..မဟုတ်ပါဘူး မာလာရယ်....ကိုယ်က မာလာတို့အိမ်ကိုလာမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲရောက်လာလို့ပါ ..ကဲ..မာလာထမင်းစားတော့မှာလား ....ကိုယ်အချိန်သိပ်မရဘူး ဒီကောင့်ကိုပြန်ပို့ရအုန်းမယ်..အော်..အင်းပါ...ကဲအိုကေ ကိုတော်ချော ကြွတော်မှုပါ..စံမြန်းရာ... အော်.. အော်ဒါနဲ့ နှစ်ယောက်လား..ဘယ်သူမှတော့မရှိတော့ဘူး..အမြင်ပဲမာလာနဲ့နွေးပဲရှိတယ်.... ကိုကျော်လူကိုပြောလိုက်အုံး နွေနဲ့ဆိုအဆင်ပြေမလားလို့ နွေကလဲတောင့်တယ်နော်...မာလာစကားကြောင့် ကျွန်တော်မျက်နှာတွေပူထူးသွားတယ်... ကျွန်တော်မျက်နှာတော်တော်လေးကြီးလာတယ်လို့ ခံစားမိလိုက်တယ်...မ.မဟုတ်ပါဘူး.. ကျွန်တော်မပါဘူး..ဒီကောင်ခေါ်လို့လိုက်လာတာပါ....ကျွန်တော့်စကားတွေ အစီစဉ်မကျ ထစ်နေတာကို နွေကရယ်နေတယ်....မာလာက ကိုကျော့်လူကလဲ ဘာဖြစ်တာလဲ စကားထစ်တက်လို့လား..မာလာပြောတော့မှ ကျွန်တော်ပိုရှက်သွားတယ်....ကျော်ကြီးကရယ်နေရင်းက ကဲဒါဆို မင်းနေခဲ့အုံး ငါအထဲသွားအုံးမယ် ဆိုပြီး မာလာနဲ့နှစ်ယောက်အခန်းထဲကို ၀င်သွားကြတယ်..ကျော်ကြီးနဲ့မာလာ အခန်းထဲဝင်သွားတော့ ကျွန်တော်နဲ့ နွေ တို့နှစ်ယောက်တည်းအပြင်မှာကျန်ခဲ့တယ်..... ထွေးရာလေးပါ စကားတွေပြောရင်နဲ့နွေနဲ့ ရင်နှီမှုအတိုင်းတာ တစ်ခုထိရခဲ့တယ်... ဘာမှန်းမသိတဲ့ ကျွန်တော်ရင်မှာ ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုကို နွေနဲ့စကားပြောရင်းခံစားနေရတယ်...“ဟယ်လို..နွေ... ” ကျွန်တော်တို့စကားကောင်းနေတုန်း နောက်မှယောကျာင်္းတစ်ယောက်ရဲ့ ချွဲနွဲ့တဲ့ အသံတစ်ခုကြောင့် စကားစပြတ်သွားတယ်..အော်..ကိုမင်းနိုင်ပါလား လာလေ.... နွေက ဧည့်ခံနေတယ်... ကျွန်တော်ဒီကောင့်အသံကိုကြားထဲက ဒေါသထွက်နေတယ်.. ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ရဲ့ လေသံကိုမရှိဘူး....“မထိုင်တော့ဘူးလေနွေ ကိုယ်နွေကိုလာခေါ်တာ”“ဟုတ်လား ” ခဏလေးနော် ..နွေအ၀တ်စားလဲ လိုက်အုံးမယ်..”မလဲပါနဲ့နွေရယ် နွေက ဒီအတိုင်းလဲလှပြီးသားပါ... ဟဲ ဟဲ ဟဲကိုမင်နိုင်ကတော့ မြှောက်နေပြန်ပြီး ....ခဏထိုင်စောင့်အုံး ထူသစ်နဲ့စကားပြောနှင့်ပေါ့ ပြောလဲပြော အခန်းထဲကို ၀င်သွားတယ်..ဒီလူက ကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံမှာဝင်ထိုင်ရင်းကဘယ်လိုလဲ......အဆင်ပြေလား လူစောင့်နေတာလား....ကိုယ်ကတော့အပြင်ကိုပဲခေါ်သွားတယ်....ဒီမှာဆိုတော့ မကောင်းဘူးပေါ့ကွာ..စကားတွေကိုဆက်တိုက်ပြောနေတယ်.. ကျွန်တော်ဒီလူကိုမျက်နှာကို စိတ်ထဲမှ လက်သီးပေါင်းများစွာထိုးလိုက်မိတယ်..ကျွန်တော်ချစ်သောနွေကို ကျွန်တော်ရှေ့မှာလာခေါ်တယ်.. ပြီးတော့ သူတို့တွေဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ရင်ထဲက သိပြီးသားလဲဖြစ်နေတယ်............. ဒီလူမေးတဲ့မေးခွန်းကို တစ်ခုမှမဖြေပဲ မသိသလိုနေလိုက်တယ်.....ဒီလူကလဲ ဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲ... နွေအလာကိုစောင့်နေတယ်....၁၅ မီနစ်လောက်ကြာတော့ နွေအခန်းထဲက ပြန်ထွက်လာတယ်... ကျွန်တော်နှလုံးခုန်သံတွေက နွေအလှကြောင့်ခေတ္တရပ်တန့်သွားတာလား နွေဝတ်ထားတဲ့ အ၀တ်စားကြောင့်နှလုံးခုန်ဖို့မေ့သွားတာလားမသိဘူး... လှလိုက်တာနွေရယ်... လို့ ရင်ထဲမှတိုးတိုးလေးပြောမိလိုက်တယ် နွေဝတ်ထားတာက အပေါ်ကအကျီးလက်မောင်ထိပြတ်နေတယ်...နွေရဲ့နှုညံ့ပြည်ဖြိုးနေတဲ့ လက်မောင်းသားလေတွေကို ကိုက်စားချင်စိတ်ပေါက် မိတယ်..ပြီးတော့အောက်က၀တ်ထားတာကလဲ ထမိန်အိအိလေးကို ခါးသေးသေးလေးတွေမြင်သာအောင်ကို ညှစ်ဝတ်ထားသလိုပဲ...“ဟာ..အရမ်းလှလိုက်တာနွေ”“ကျေးဇူပါ” ကဲသွားမယ်..အော်..ထူးသစ် မာလာတို့ထွက်လာရင် နွေဧည့်သည်နဲ့ပါသွားတယ်လို့ပြောပေးပါ...ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှပြန်မပြောမိပေမယ့် ခေါင်ညိတ်ပေးလိုက်မိတယ်...ကဲသွားပြီးနော် ထူးသစ်.. ကျွန်တော်ကိုနုတ်ဆက်ပြီး နွေကျွန်တော်မဟုတ်သော တစ်ခြားသူနဲ့လိုက်သွားတာကို အကျဉ်းတန်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုလို ကျွန်တော်ခံစားရတယ်...ကျွန်တော်စိတ်တွေဟာ အရာရာကိုအလိုမကျတွေဖြစ်လာတယ်...တောက်... ရင်ထဲက မွန်းကြပ်မှုတစ်ခုကို ထုတ်ပေးလိုက်မိတယ်...ကျော်ကြီးကိုထိုင်စောင့်ရင်း ပျင်းတာနဲ့ ကျွန်တော်ဆေးလိပ်ထိုင်သောက်နေတုန်း ကျော်ကြီးထွက်လာတယ်...တော်တော်လဲတက်နိုင်တဲ့နှစ်ယောက် တစ်နာရီကျော်တယ် အခန်းထဲဝင်သွားတာ...ဆောရီးကွာ.. ပျင်နေပြီးလား ဟဲ ဟဲကျော်ကြီးမျက်နှချိုသွေးပြောနေတယ်.... မာလာကပါ နောက်ကထွက်လာရင်းဟယ်..တစ်ယောက်တည်းလား နွေကော.....ကျွန်တော်ကိုတိုက်ရိုက်မမေးပေမယ့် ကျွန်တော်ကိုမေးမှန်းသိနေတော့ဧည့်သည်နဲ့ပါသွားတယ်.. လိုပြောပြီး ကျော်ကြီးပြန်မယ်ကွာ.. ကျွန်တော်ထလိုက်တော့..အေးပါကွာ..ပြန်မှာပါ ..ကဲ မာလာကိုယ်ပြန်တော့မယ်... နော်..ဟုတ်....ကိုကျော်ဘယ်တော့လာအုံးမှာလဲ .. မာလာမျှော်နေမယ်နော်...မျှော်နေမှာပေါ့ ဒီကောင်အရူးက ပိုက်ဆံတွေပေးတာကို...ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှ လူတိုင်းကိုဒေါသနဲ့ဖြစ်နေတယ်..အိုကေပါ..ကိုကျော်လဲ မလာရရင် မနေနိုင်ပါဘူး မာလာရယ်.. အရေးထဲ အလွမ်းသည်နေသေးတယ် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ချစ်သူတွေကျနေတာပဲကျွန်တော်စိတ်မရှည်တော့ဘူး အပြင်ကိုထွက်လာလိုက်တယ်.. ကျော်ကြီးနောက်ကလိုက်လာရင်းနေပါအုံးကွ..မင်းကလဲငါ့ကိုစောင့်အုံးလေ..နဲနဲတော့ကြာတာပေါ့ကွာ..ဒါမျိုးကကြာလေကောင်းလေပဲ ဒါမှလဲ တန်လဲတန်တယ် ဟီး ကောင်းလဲကောင်းတယ်... နောက်ပြီး မာလာက တော်တယ်ကွ ဒီကိစ္စတွေဆို သူကဆရာပဲ ငါ့ကိုသူပဲသင်ပေးတာ..ငါကသူ့တပည့်ပေါ့ကွာ သူ့ကိုပိုက်ဆံပေးတာကို ငါကကုသိုလ်ရတယ်....ဘာ.. ကျွန်တော်စိတ်တိုနေတဲ့အချိန်မို့ ဒီကောင့်စကားကို စိတ်လွတ်လက်လွတ်အော်မိတယ်ကျော်ကြီးလန့်သွားပြီး..ဟာ ဖြေးဖြေးပြောပါကွ မင်းကလဲကျော်ကြီးမင်းဦးနှောက်တွေ မှန်ရဲ့လားကွာ.. ..မကောင်းတာလုပ်စားတဲ့ မိန်းမက ဆက်ဆံပြီးတိုင်းပိုက်ဆံပေးတာဟာ ကုသိုလ်ရတယ် လို့ပြောတာ မင်းပဲရှိတယ်... အရူးရဲ့..မင်းကလဲကွာ ဒါကစိတ်ထားပဲလိုတာ ငါကမာလာဆီက ဒီကိစ္စတွေကိုပညာယူနေတာလေ ဒါကြောင့်တပည့်က ဆရာကို ဥာဏ်ပူဇော်ခ ပေးတယ်လို့ သဘောထားလိုက်တယ်လေကွာ... ဟားဟား ဟားဒီကောင်ပြောမှ ကျွန်တော်တောင်ရယ်ချင်သွားတယ် .. တော်တော် ကြံကြံဖန်ဖန်ပြောတက်တဲ့ကောင်...မင်းတို့ကြာလိုက်တာ ဘယ်လောက်တောင်ကြိတ်နေလို့လဲ..နှစ်ကြောင်းတည်းမောင်းတာပါကွာ.. သူပြုစုသမျှ နုရတဲ့ငါ့ဘ၀လေးပါ ဟဲ ဟဲ...မင်းတစ်ခါလောက် မာလာနဲ့ဆွဲကြည့်ပါလား တော်ကြာငါ့ကိုတောင်မင်းဘတ်ပြီး မာလာမာလာ ဖြစ်နေအုံးမယ်..သွားစမ်းပါကွာ.... ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာ နွေကလွဲရင် ဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးလေ.. ဒီအချိန်မှာ နွေကိုသာအတမ်းတဆုံးပဲ..ကျော်ကြီးကိုပြောမယ့်သာပြောရတာပါ မာလာကလဲ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ တော်တော်လေးတောင့်တဲ့အမျိုးသမီးပဲ ကျော်ကြီးလဲ မိန်းမ ကိစ္စတွေမှာ တော်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ကောင် ဒီလိုကောင်က မာလာကိုဆရာတင်တယ်ဆိုတော့ စိတ်ထဲကတော့ စတ်ခါလောက်စမ်းကြည့်ခြင်တယ်...ငထူး မပြောမရှိနဲ့ တစ်ကယ်ပြောတာ.. မင်းနောက်တစ်ခါဆို မင်းဝင်သွား ငါအပြင်မှာပဲနေမယ်...ကျော်ကြီးက ထက်ပြောတော့ ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဘူ တိတ်ဆိတ်ခြင်းဟာ ၀န်ခံခြင်းပေါ့....ကျွန်တော်တို့လမ်းထိပ်ရောက်တော့ ကျော်ကြီးနဲ့ နှစ်ယောက်လမ်းစခွဲလိုက်ပြီး အိမ်ကိုပြန်ကြတယ်...ညကအိမ်ပြန်နောက်ကျပါတယ်ဆိုမှာ စောစောစီးစီး မိလင်းက သူနဲ့မြို့ထဲကိုအဖော်လိုက်ခဲဖို့ကို ဖုန်းဆက်သေးတယ်...မိလင်းဆိုတာ လင်းလင်းမြတ်ပါ.. သူငယ်ချင်းတွေက လင်းလင်း လို့ခေါ်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ငယ်ငယ်ထဲက မိလင်းပဲခေါ်တယ်..မိလင်းက ငယ်သူငယ်ချင်းဆိုတော့ သူနဲ့သွားတာ သိပ်ရှိုးထုတ်စရာမလိုပေမယ့် မြို့ထဲဆိုတဲ့အသိကြောင့် နဲနဲတော့ ရှိုးထုတ်လိုက်တယ်..ပြီးတော့ မိလင်းပြောတဲ့ (******)ဆိုင်လေးကို တန်းသွားခဲ့တယ်.. ........တွေ့ပါပြီး မရွှေချော.. အအေးသောက်ရင်းစောင့်နေပုံရတယ်“ရောက်တာကြာပြီးလား မိလင်း” ကျွန်တော်မိလင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်ရင်းမေးလိုက်တယ်..“မကြာသေးဘူး ၅ မီနစ်လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်” နင်ဘာစားမလဲ တစ်ခုခုစားလေ ...“အေး...ငါဘာမှတော့မစားရသေးဘူး ..ဒါပေမယ့် မစားတော့ဘူး နင့်ကိစ္စအရင်သွားမယ်လေဟာ နည်းနည်းဝေးတယ်”အေးလေ..ဝေးလို့ငါကတစ်ခုခုစားခိုင်းတာပေါ့ဟ..မိလင်းသွားမယ့်နေရာက ကျွန်တော်တို့မြို့နဲ့ မိုင် ၈၀ ကျော်လောက်ဝေးတယ်....ပိုက်ဆံအလိမ်ခံလိုက်ရလို့ လိုက်မလို့တဲ့ပြီးတော့ မိလင်းနဲ့ကျွန်တော်က ငယ်သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ထက် အရင်ကပိုခဲ့ကြတယ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မသိစိတ်ကပေါ့.. သေချာတာက ကျွန်တော်ရင်ထဲ ကို နွေ မရောက်ခင်အချိန်ကပေါ့...အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ မိလင်းကျွန်တော်ကိုအားကိုးတာ မဆန်းပါဘူး........... ဒီလိုနဲ့ ၁၀ နာရီလောက်မှ ကျွန်တော်တို့ စထွက်ဖြစ်တယ်... ကျွန်တော်ရဲ့ Dream ဆိုင်ကယ်အိုးလေက တက်နိုင်သလောက်တော့ရုန်းခဲ့ပေမယ့်.. ဟိုကို ၂ နာရီလောက်မှရောက်သွားတယ် ဟိုရောက်တော့လဲ ပိုက်ဆံလိမ်သွားတဲ့လူကိုလိုက်ရှာတာ မရှိတော့ဘူးပြောင်းသွားပြီးတဲ့ ...........လူတွေကိုမောသွားတာပဲ.. ဒါနဲ့ လေးနာရီလောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်ခဲ့ကြတယ်.......ကျွန်တော်တို့မြို့ကို မရောက်ခင်မိုင်၂၀လောက်အလိုမှာ ကျွန်တ်ာရဲ့ဆိုက်ကယ်အိုကြီးနောက်ဘီပေါက်သွား ပါလေရောဗျာ....... ဆိုးတာက ရှေ့မှာမြို့တစ်မြို့တော့ရှိတယ် ဒါပေမယ် တွန်းရအုံးမယ်.........ဟာ..သွားပြီးဒါဆိုရင်တော့ မိုးချုပ်တော့မယ် ရှေ့မြို့ကိုရောက်ဖို ၄ မိုင်လောက်တော့ တွန်းရအုံးမယ် စိတ်ညစ်လိုက်တာအရေးထဲဆိုဒီဆိုက်ကယ်က ကျွန်တော်စိတ်တိုစွာနဲ့ဆိုင်ကယ်ကို အပြစ်တွေတင်မိတယ်မိလင်းက စိတ်ညစ်လိုက်တာ ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာလုပ်ရမှာလဲဟ ကားကြုံစောင့်ရင်စောင့် မစောင့်ရင် တွန်းပြီးရှေ့မြို့ရောက်မှ ဘီးဖာရတော့မှာပေါ့မိလင်းခေါင်းကုတ်ပြီးကားအသွားလာကိုကြည့်လိုက်တယ် ဘယ်ကားမှလာတာကိုမတွေ့ရလာဟာ မိလင်းတွန်းသွားရင်းနဲ့ ကားကြုံစောင့်ကြည့်မယ် ဟုတ်ပြီးလား..မိလင်းခေါင်ညိတ်ရင်း နင်မောရင်ငါလဲတွန်းပေးပါ့မယ်ဟာ...တစ်နာရီနီးပါလောက် တွန်းလာရတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်မှာ ချွေးတွေက ပြန်လာတယ်.. တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ရွှဲနစ်နေတာပဲ..ဒါကိုမိလင်းကသနားလို့ထင်တယ်...ထူး.. နင်ပင်ပန်းနေပြီ ငါတွန်းပေးမယ်..ပေးငါ့ကို ..ရပါတယ် လင်းရယ်.. ငါဘာသာငါတွန်းနိုင်ပါတယ်......... ပြောမယ့်သာပြောရတယ်ကျွန်တော် မခံနိုင်တော့ဘူး တော်တော်လေး ညောင်းနေပြီး...မိလင်းကိုတွန်းခိုင်းရအောင်လဲ ကျွန်တော်မှာက ငယ်ငယ်ထဲ က မိန်းကလေးတွေကိုသနားတက်တဲ့ အကျင့်ကလဲရှိနေတော့ မတွန်းခိုင်းရက်ဘူးပြီးတော့သူက ကျွန်တော်ကို..ထူး လို့ခေါ်လိုက်တာကို ရင်ထဲက ပိတိတစ်မျိုးနဲ့ မသိစိတ်က သာယာစွာသူကို လင်း လို့ခေါ်လိုက်မိတယ်..ဒါဆိုခဏနားလိုက်ပါလား ထူး တော်တော်ပင်ပန်းနေပြီး.. ပြောရင်ချွေးတွေသူ့လက်ကိုင်ပုဝါဖြူလေးနဲု့သုတ်ပေးတယ်..လင်းငါ့တို့ ဒီအတိုင်းတွန်ရင်တော့ အဆင်မပြေတော့ဘူး .. မိုးချူပ်လိမ့်မယ်.. ...ရှေ့မြို့ရောက်ရင် နင့်အိမ်ကိုဖုန်းဆက်လိုက်ဟာ ဆိုက်ကယ်ဘီပေါက်လို့ မိုးချုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ တော်ကြာစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်..အေးပါ..ငါလဲစိတ်ကူးပြီးသားပါ.. ကဲလာ ဒီမှာပဲ ခဏထိုင်နားလိုက်အုံး ငါလဲညောင်းနေပြီး...ပြောလဲပြော မိလင်းထိုင်ချလိုက်တယ်... ကျွန်တော် သူ့ဘေးနားမှာပဲ ဆိုက်ကယ်ရပ်ပြီး ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်ချလိုက်တယ်.. ပြီးတော့ ကျွန်တော်လက်တွေ အရမ်းနာနေတယ်..ဒါကိုမိလင်းကသိပြီ..ထူး........ နင်တော်တော်ပင်ပန်းနေတယ်နော်..ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး..လင်းရယ်..နင်လဲပင်ပန်းနေတာပဲ ငါတစ်ယောက်တည်းမှမဟုတ်တာ...ကျွန်တော်လက်တွေကို သူက နှိပ်ပေးရင်းနဲ့ ထူး နင်ငါ့ကိုစိတ်မပျက်ဘူးလား........ဘာလို့လဲ.. ကျွန်တော်မေးတော့ငါလိုအပေါင်းသင်းမျိုးက အနားမှာရှိနေတဲ့အချိန်တွေ နင့်ကိုဒုက္ခတွေပဲ ပေးတယ်လေဟာ..ဟင်အင်း ငါကတော့ နင်အနားမှာရှိတဲ့အချိန်တွေပျော်တယ်.. ပြီးတော့ နင့်အနားမှာနေချင်တယ်ဟာ...ထူးရယ်...ကျွန်တော်မိလင်းကိုရင်ခွင်ထဲ ဆွဲထည့်လိုက်တော့ လင်းက အလိုက်သင့်လေးပါလာတယ်လင်းရယ် ငါနင်နဲ့အဝေးကြီးမှာလဲ မနေနိုင်ဘူးဟာ..ငါလဲနင့်ကို ရင်ထဲက ဘယ်လိုလဲမသိဘူး နင်ရှိနေရင်ပျော်တယ်ထူးရယ်...... ကျွန်တော်ကိုပြန်ဖက်ရင်းပြောသော လင်းစကားဟာ မှောင်မိုက်သော လမ်းဘေး တိတ်ဆိတ်သောပတ်ဝန်ကျင်နဲ့ ဒုက္ခနဲ့တွေ့ချိန်က ခံစားမှု တူညီတဲ့သံယောဇဉ်တွေကြောင့် စိတ်ကိုလွတ်ထွက်သွားစေပါတယ်..ကျွန်တော် လင်းရဲ့ ပါးပြင်လေးကို ပထမဦးဆုံး နမ်းလိုက်မိတယ်..အိုး.....ဆိုးပြီး ကျွန်တော်ကို တင်းတင်းလေးပြန်ဖတ်တယ်..ကျွန်တော်စိတ်တွေဟာ မသိစိတ်တစ်ချို့နဲ့ လင်း ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို စုပ်ယူမိတယ် လင်းအောက်နှုတ်ခမ်းလေး ကျွန်တော်ပါးစပ်ထဲရောက်တဲ့အထိ ကျွန်တော်နဲ့လင်းအသိတွေကင်းမဲ့ပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တင်းကြပ်နေအောင်ဖက်ထားရင်းအနမ်းမိုးတွေကို တဖွဲဖွဲနဲ့ ရွာနေတယ်.. ပြီးတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ ညာလက်တစ်ဖက်က လင်း ရဲ့ ရင်သားတွေကို ဘယ်လိုကဘယ်လို ပွတ်နေမိတယ် မသိလိုက်ဘူး.. ကျွန်တော် အသိဝင်ချိန်မှာ .. လင်း ရဲ့ တိုးညှင်းတဲ့ ဖီလ်းတက်နေတဲ့ အသံလေးတွေကြားနေရပြီးအင့်..အင်..အာ.. ထူးရယ် မတိုးမကျယ်သော လင်းရဲ့ အသံလေးက ကျွန်တော်ပြန်ဝင်နေတဲ့ အသိစိတ်တွေကို ဖျောက်ပစ်လိုက်သလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဘာကို မှ သတိမရတော့..လင်းရဲ့နို့တွေကို ကျွန်တော်လက်ထဲမှာ ပွတ်ချေပေးရင်းက လင်းရဲ့ အောက်က မိန်းမပျိုတစ်ဦးရဲ့ ပန်းဦးလေး ပွင့်လာဖို့ မြေတောင်မြှောက်ပေးသလိုမျိုး ကျွန်တော်ဖွဖွလေး ပွတ်ရင်းက လင်းရဲ့အစိလေးကို လက်ညှိုးလေးနဲ့ နဲနဲဆက်ဆက်လေး ဖိရင်း ကစားပေးနေတာကို လင်းအရမ်းဖီလ်းတက်ပုံ၇တယ်..အာ..ထူး..အာ..အအင့်..အင်း..ရွှီး...ထူးရယ်..တော်ပြီးကွာ..လင်းရဲ့စကားသံတွေဟာ နားထဲမှာတောင်းပန်သံလို မထင်ပဲ ကျွန်တော်ကိုစိန်ခေါ်နေတယ်ပဲထင်မိတယ်.......ကျွန်တော် လင်းရဲ့ ပန်းလေးထဲကို လက်ညိုးတစ်ချောင်း မသိမသာ ထိုးထက်လိုက်တော့..အာ..အ နာတယ်ထူး တော်ပြီးကွာ.......... ယောက်ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ ဒီလိုအပြုမှုမျိုးကို မခံစားဖူးတဲ့ ကျွန်မအတွက်တော့ ထူးရဲ့ပြုစုမှုတွေဟာ ရင်ထဲမှာ ဗလောင်ဆူနေပေမယ့် နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုတော့ မခံစားနိုင်အောင်ပါပဲ..ဒါပေမယ့်လဲ ကျွန်မတောင်းတနေမိတယ်..ထူးရဲ့ ပြုစုမှုတွေကိုပေါ့...........ထူးရယ် တော်ပါတော့ လို့ပြောလိုက်ပေမယ့် မသိစိတ်ကတော့ ခံစားမှုတစ်ခုကိုတောင်းတရင်း မိလင်းရဲ့ ဖင်အပေါ်ကိုကော့တက်လာကို ကျွန်တော်သတိထားမိလိုက်တယ်.. ပြီးတော့ မိလင်းရဲ့ ပန်းလေးက အရည်လေးတွေရွှဲနေပြီး.. မိလင်းရဲ့ ညဉ်းညူသံဟာ ကျွန်တော်ကို စိန်ခေါ်မှုပြုနေတယ်လို့ လဲ ထင်မိတယ်... အသိတရားတွေကင်းမဲ့နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အဖို့တော့ အမှောင်ကမ္ဘာတစ်ခုကို ရူးမိုက်စွာ ထိုးဖောက်မိတော့တယ်.................. မိလင်းရဲ့ နို့လေးတွေဟာ အချိုရည်ပုကန်လုံးသာသာလေးပဲရှိတယ်.. အောက်က မိလင်းဖီလ်းဝင်နေပုံရတယ်.. အားးးးး. အင်......... အ..တစ်ချက်တစ်ချက် ထူးရဲ့လက်ညိုးတစ်ချောင်းဟာ ကျွန်မရဲ့ ဟာ ထဲကိုဝင်လာတိုင် ကျွန်မရဲ့ အစေ့လေးကို သူ့လက်မနဲ့ ပါ ဖိဖိနေတယ် ကျွန်မရူးတော့မယ် ထင်တယ် ထူးရယ်.. ထူးရဲ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို ညစ်ထားရင်းက ကျွန်မ ထူးလိုသမျှပေးစွမ်းခြင်တာထက် ကျွန်မကိုယ်တိုင်က တောင်းတမှုရှိနေတယ်.. ဘာကိုလဲဆိုတာကိုမသိပေမယ့် သေချာတာကတော့ ထူးရဲ့-ီးကိုဖြစ်မယ်ထင်တယ်.......ထူးသူ့ရဲ့ဘောင်ဘီက ဇစ်ကိုဖြုတ်နေတာကို သတိထားမိလိုက်တယ် မကြည့်ရဲလို့မျက်စီကိုမှိတ်လိုက်ပေမယ် စိတ်ကိုတော့ ကျွန်မ အထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး ခိုးကြည့်မိလိုက်တယ်...ဟာ. “အကြီးကြီးပဲ” စိတ်ထဲမှလန့်မိသွားရာက ကျွန်မအသံအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်..“မကြီးပါဘူးဟ”“တော်တော့ နော် ထူးရယ်..ငါကြောက်တယ်..”“ဘာကိုကြောက်တာလဲ လင်းကလဲ”“အဲ..ဟာကြီးကို” လက်ညိုးထိုးပြရင်“မကြောက်ပါနဲ့ ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူး” ပြောရင်နဲ့စကားဆက်ရှည်နေရင် သူဖီလ်းပျက်သွားမှာဆိုးလို့ လင်းရဲက နှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်ယူရင် နို့သီလေးတွေကိုပွတ်ချေပေးလိုက်တယ်...အာ..အင်းး နာတယ်..ထူးရယ်.. ကျွန်တော်နို့သီလေးကိုချေပေးတာ ကြမ်းသွားတယ်ထင်တယ် ... နဲနဲပြန်လျှော့ရင်းကျွန်တော်ရဲ့ ဖွားဖက်တော်လေးကို သူ့ရဲ့တစ်ခုတည်းသော ဖောင်းအိနေတဲ့ ပန်းလေးနဲ့ တေ့ပြီး ဖိထည့်လိုက်မိတယ်..အာ.....ကျွန်တော်ကို တွန်ရင် လင်းရဲ့အော်သံ နဲနဲကျယ်သွားတယ်..“နာတယ် ထူးတော်တော့ .. အတင်းတွန်းထုတ်နေတယ်” ကျွန်တော်သိလိုက်တယ် ကျွန်တော် ဖွားဘတ်တော် ထိပ်ပိုင်းဝင်ရုံပဲရှိသေးတယ် ..သူကိုဆက်လုပ်ရင် ပြဿနာတွေပိုရှုပ်သွားလိမ့်မယ်.. ကျွန်တော်သူတွန်းနေတာကို မသိသလိုနဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်ရင်း သူရဲ့ လည်တိုင်လေးတွေကို ပွတ်သတ်ပေးနေရင်းက သူ့ကိုဖီလ်းပြန်ဝင်လာအောင်လုပ်ပေတော့ သူပြန်ငြိမ်ကျသွားတယ်.....အင်..အင်းး အီး..အင့်.. ထူးရဲ့-ီး ကျွန်မရဲ့ပန်းလေထဲကို ၀င်လာဖို့အချိန်ကိုစောင့်နေတဲ့ ကျွန်မအဖို့ တကယ်တမ်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ထင်သလိုမဟုတ်ပဲ.. နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရပေမယ်.. တောင်တမိနေတယ်..ဒီနာကျင်မှုမျိုးကိုပေါ့.. ဒါကြောင့်လဲ ကျွန်မပါးစပ်က ဆက်လုပ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ အသံတစ်ချို့ညဉ်းမတာပေါ့...မထင်မှတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မနဲ့ထူးဟာချစ်သူရည်စားမဟုတ်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ထက်ပိုခဲ့ကြရုံနဲ့ အခုလိုအမှောင်ကမ္ဘာတစ်ခုကိုရောက်ခဲ့တယ်....ကျွန်မရဲ့ ခွင့်ပြုချက်အသံလေးတွေကြောင့် အဲဒီညက ထူးရဲ့တက်ကြွတဲ့ရင်ခုန်သံနဲ့ ထူးခြားတဲ့ အချစ်စွမ်းအားတွေကို ရရှိခဲ့လို့ ကျွန်မပျော်မိခဲ့တယ် ....................ဟေ့ကောင်ငထူး.... ဟာ.ကျော်ကြီးလာလေကွာ.. ငါခုမှအိပ်ယာက နိုးတာဟုတ်လား ညကဘယ်သွားနေတာလဲ..ငါလာသေးတယ် မင်းအိမ်တံခါးပိတ်ထားလို့အေးဟုတ်တယ်ငါ မိလင်းနဲ့ မနေ့ကပါသွားတာ အပြန်ဆိုင်ကယ်ပျက်နေလို့ မိုးလင်းခါနီမှ ပြန်ရောက်တာ..ဟာ..ဒါဆိုညက မင်းတို့ဘယ်မှာအိပ်ကျလဲ ဟီဟီးးးဟိတ်ကောင်..ဘယ်မှာမှ မအိပ်ဘူးငါတို့ ဆိုက်ကယ်တွန်းလာရင် ကားကြုံနဲ့လိုက်ခဲ့တာ ဆိုင်ကယ်ကိုတော့ အိမ်တစ်အိမ်မှာ အပ်ခဲ့တယ်.. ဒီနေ့မှ သွားပြန်ယူရမှာ...ဒါနဲ့ မင်းမနေ့က ငါ့ဆီလာတာ ဘာရှုပ်ဖို့လဲ..ဟာ ရှုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကွာ ညက မာလာတို့ဆီသွားမလို့ ဟီးး အဖော်လာခေါ်တာ မင်းကိုမင်းမရှိတော့ ငါလဲ မသွားခြင်တော့ဘူး.. အဲဒါ ဒီည သွားမလားလို့...ဟဲ ဟဲဒီကောင်မျက်နှာက စပ်ဖြဲစပ်ဖြဲလုပ်ပြနေတယ်...သွားလေ မင်းသွားချင်ရင်.. ကျွန်တော်လဲ နွေနဲ့တွေ့ခြင်နေတာပဲ..သွားခြင်တာပေါ့..ငါသွားတာ ဟုတ်တယ်ကွ ငါ့မှာ ပျက်နေတယ် ဟီးးကျော်ကြီးလက်မနဲ့ လက်ညိုးကို ၀ိုင်းပြပြီး မင်းချေးလေး..အော် လဒ မင်းက ပိုက်ဆံမရှိလို့ ငါ့ဆီကိုလာတာပေါ့ အဖော်ခေါ်တာပေါ့လေ ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးသူငယ်ချင်းရာ မင်းလဲ မမ ကိုတွေ့ချင်မလားလို့ပါ ဟဲ ဟဲခွေကောင်.. ကျွန်တော်ဘာမှမပြောပဲ ဒီကောင့်ကို လက်သီနဲ့ မနာအောင်ထိုးလိုက်တော့ ရုပ်က ရယ်နေတယ်ဒါဆိုညနေမင်းလမ်းထိပ်က ဘုတ်ဆုံ မှာစောင့်နေလေ... ငါလာခဲ့မယ်အိုကေ.. ငါလိပ်ပြီးဒါဆိုကျော်ကြီးပြန်သွားတော့မှ ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာ နွေက ၀င်ရောက်နေတာကိုသတိထားမိတယ် နွေကိုတွေ့ခြင်တယ်..ပြီးတော့ လင်း ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သတ်မှုအတိုင်းတာ တစ်ခုထိပတ်သတ်ခဲ့ပြီးလေ.. ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာ ဘယ်အရာကို ပိုလေးနက်သွားလဲ ဆိုတာ မစဉ်းစားတက်ပေမယ့် လောလောဆယ် နွေကိုတွေ့ချင်နေတာအမှန်ပါပဲဟိတ်မိနွေ... ကိုကျော်နဲ့ပါလာတဲ့ ချာတိတ်က မဆိုးဘူးနော်.. လူအေးလေး သိလား ဟီး မစားတက် မ၀ါးတက်တဲ့ ကလေးငယ်လေးလိုပဲ.. ဒါပေမယ့်နင့်ကိုတော့ ဒီကောင်လေးက နဲနဲတော့ ဟဲ ဟဲ နေတယ် နော်..ဟာ........ မာလာနင်ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲ..သူ့ဟာသူအကျင့်မရှိလိုနေမှာပေါ့ .. ဒါတွေကိုစိတ်မ၀င်စားနိုင်ပါဘူး..ငါက ဧည့်သည်များများလာရင် ပိုက်ဆံများများရမယ် အိမ်ကိုလဲ ပြန်ထောက်နိုင်မယ်.. ရွာက ညီမလေးနဲ့မောင်လေးအတွက် ငါကျောင်းစရိတ်လဲ ပေးနိုင်မယ် ဒါပဲသိတယ်... သူမှမဟုတ်ဘူး ဘယ်သူမဆို ငါ့အလုပ်က ပိုက်ဆံရမယ်ဆို အတူနေပေးရမှာပဲလေ.....ဒီနေ့ညနေ ကိုကျော်လာမယ်လို့ပြောတယ် နင့်ကောင်လေးပါလာမလားမသိဘူးနော်...ကောင်မ ဘယ်က ငါ့ကောင်လေးကမှလဲ သူ့နဲ့ငါကစကားတစ်ခွန်းတစ်လေပဲ ပြောဖူးတာ..ဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် ညည်းပြောသလိုစကားတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းပြောဖူးတာပါ ဒါပေမယ့်ကောင်လေးကတော့ ညည်းဧည်သည်နဲ့ပါသွားတဲ့ နေက ဖြစ်နေတဲ့ ပုံများညည်းကို ပြချင်တယ်..... ညည်းအဲဒီကောင်လေးက ချစ်ခွင့်ပန်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်.. မာလာက မထင်မှတ်သော စကားမို့ အံ့သြမိတယ်.ဘာရယ်...ငါ့လို့လူမျိုးကို ဘယ်သူက ရင်ထဲက နှစ်နှစ်ကာကာထားပြီးချစ်မှာလဲ ယောကျာင်္းလေးတွေက ငါတို့တွေကို မြင်းလိုပဲသဘောထားတာ သူတို့ပျင်းတဲ့အချိန် သူတို့စိတ်အပန်းဖြေတဲ့ အချိန်လောက်ပဲ တက်ခွတာ .. အတည်တစ်ကျဘယ်တော့မှ သွားလေရာ မခေါ်တက်ဘူးဟဲ့အေးနော်.... ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်.. ငါတို့လိုလူတွေကို ဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှ အတည်တစ်ကျမတွဲဘူးး..ငါကိုအမြဲတွဲတဲ့ ကိုကျော်တောင် တစ်ခါမှ ချစ်စကားမပြောဘူး သူ့ဆန္ဒတွေပြည့်သွားရင် ပိုက်ဆံပေးပြီး ပြန်သွားတာပဲ....ဒါပေမယ့်ကိုကျော်က မဆိုးဘူးဟဲ့ သိလား မိန်းမတွေအကြောင်းတော်တော်သိပုံရတယ်... မာလာနဲ့တွေ့တော့ ကိုကျော်လဲ ကိုပျော်ဖြစ်သွားတာပေါ့ ဟား ဟားဟား..ဟိတ်မာလာ ဘာတွေရယ်နေတာလဲ... အဲယ်..ပြောရင်းနဲ့ရောက်လာတယ် အသက်ရှည်အုံးမယ် ကိုကျော်တို့ အကြောင်းပြောနေတာ..ဟုတ်လား ဘာတွေမြန်းပြောနေတာတုန်းဗျ... ကျော်ကြီးက နှာဘူးအသံအပြည့်နဲ့ ပြောရင်မာလာဘေးနားကိုဝင်ထိုင်လိုက်တယ်...ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ကိုကျော်နဲ့ မာလာက တစ်တွဲဖြစ်ပြီးတော့ ဟဲ ဟဲ ပြောရင်းမျက်လုံးက ကျွန်တော်ဘက်ကိုကြည့်လိုက် နွေဘက်ကိုကြည့်လိုက်နဲ့.. သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ ခက်တယ်လို့ပြောနေတာ.. ဟုတ်တယ်နော်နွေ..အို.. မာလာကလဲ ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့...ကဲ ကဲ ဆိုင်တာမဆိုင်တာ အပထား အခုကျွန်တော်ချစ်သူငယ်ချင်း ထူးသစ်က ဒီနေ့မာလာနဲ့ နွေစားဖို့ဆိုပြီး ခေါက်ဆွဲကျော်ဝယ်လာတယ် ..ကြက်သားနဲ့ ကြက်သားတော့စားကြတယ်မဟုတ်လား....လူသားပါစားတယ်.. မာလာတို့ကတော့အော် .... မင်းကလဲကွာ ဒုက္ခရှာလို့ ထူးသစ်ရယ်..မဟုတ်ပါဘူး နွေ ကျွန်တော်က နွေကို စားစေချင့်လို့ပါ ဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူး...အော် ဒါဆို ကိုထူးသစ်က မာလာကိုစားစေချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေ..ဟာ ဟ အဲလိုမဟုတ်ဘူးလေ ကျွန်တော်ပြောတာက ဟီး နှစ်ယောက်လုံးကိုပြောတာပါရပါတယ် ရပါတယ် မလာတို့ကလဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စားရဖို့က အဓိကပဲလေ ဟုတ်ဘူးလာ.. ကိုကျော်..ဟုတ်ပါတယ် မာလာရယ်..ဟုတ်ပါတယ်..ဒါနဲ့ ဒီနေ့ဧည့်သည်တွေမရှိဘူထင်တယ်..ဟုတ်တယ် ဒီရက်ထဲ အလုပ်နဲနဲပါးတယ် အဆင်သိပ်မပြေဘူး.. ကိုကျော်လာတော့ အဆင်ပြေတော့မှာပေါ့နော်.. မာလာက ပြောရင် မိနွေလဲ ဧည့်သည်မရှိဘူး .. ဘာမှတော့မဆိုင် ကျွန်တော်ကို ကြည့်ရင်းပြောလိုက်တယ်..ကျွန်တော်လဲ စိတ်က ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ မသိဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ နွေရဲ့ ဧည့်သည်လုပ်မယ်လေ..အမ်း.. တကယ်လား..ကျော်ကြီးအလန့်တစ်ကြားမေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး ခေါင်ညိတ်ပေးလိုက်မိတယ်ကဲဒါဆိုအဆင်ပြေပြီးပေါ့ မာလာ ခေါက်ဆွဲကျော်ကိုစားတော့လေ အေးကုန်မယ် ပြီးမှ အေးဆေးပေါ့နွေက မင်းက အတိုလား အရှည်လား.. အား ဗျာ ..ကျွန်တော်ရှက်သွားတယ် သူမေးတာက ဘာကိုလဲမသိဘူးကျော်ကြီးက မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်နဲ့ မာလာလို မတိုမရှည်လေးပေါ့ ဟီးးးးးးးးးးးအဲဒီတော့မှ ကျော်ကြီးတို့ အလုပ်မပြီးမချင်ပေါ့ဗျာ...ကဲကဲ ဒါဆိုလဲငါတို့သွားမယ် ငထူး ..အော် မနွေ ငထူးကိုအပ်ခဲ့မယ်နော်.. ဟဲ ဟဲ ကျော်ကြီးက ပြောင်စပ်စပ်နဲ့ပြောရင် မာလာနဲ့ အခန်းထဲကိုဝင်သွားတော့မှ...နွေက မင်းကို လူအေးလေးထင်နေတာ.. မင်းလဲ ယောကျာင်္းလေးပဲလေး... နားလည်ပါတယ် ကဲလာ သွားမယ်..ထ..ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ပဲ နွေခေါ်ရာအခန်းတစ်ခုထဲကိုလိုက်သွားတယ်..အခန်းက အကောင်းစားကြီးမဟုတ်ပေမယ့် သန့်ပြန့်မှုတော့ရှိတယ်..နွေက ကုတင်ပေါ်မှာထိုင်ရင်းက သူ့အကျီကိုချွတ်လိုက်တယ်..နေ..နေ.. မချွတ်နဲ့ နွေ..ဟမ်း ..နွေနားမလည်နိုင်စွာပြန်မေးမိတယ်.. မချွတ်လို့ရမလား အကျီင်္တွေကြေကုန်မှာပေါ့..မဟုတ်ဘူးနွေ.. ကျွန်တော်နွေနဲ့စကားပြောနေချိန်မှာ ဧည့်သည်လာခေါ်ရင် နွေလိုက်သွားမှာ ဆိုးလို့ ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ရတာပါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ တစ်ခြားကိစ္စတွေမပါပါဘူး နွေရယ်...ဟာ.ဟေ့ မင်းမှားနေပြီ နွေတို့က ဒီကိစ္စနဲ့အသက်မွေးနေတယ်ဆိုပေမယ့် သူများပိုက်ဆံကိုအလကားဘယ်တော့မှမယူဘူးကဲအခု မင်းအလုပ်ဖြစ်လား မဖြစ်ဘူးလားပြော မဖြစ်ရင်ပြန်ထွက်မယ် မင်းပိုက်ဆံလဲ မယူဘူး..နေ ..နေပါအုံး နွေရယ် ကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေအုံး...ကျွန်တော်နွေကို ချစ်တယ်ဗျာ.. ကျွန်တော်တစ်ခြားလူတွေနဲ့နွေ..နွေ. ကျွန်တော်ရင်ထဲမှစကားကိုပြောမထွက်ကျွန်တော်မကြည့်ရက်ဘူးဗျာ.. ဒါကြောင့် ကျွန်တော်နွေကို ဒီလိုလုပ်တာပါ...ဘာ... မင်းက နွေကိုချစ်တယ်ဆိုရအောင် နွေက ဘယ်လိုမိန်းကလေးလဲဆိုတာသိတယ်နော်..ပြီးတော့ နွေဘယ်ယောက်ကျားလေဆီကမှ ပိုက်ဆံကိုခြူမယူတက်ဘူး...မဟုတ်ပါဘူး နွေရယ်.. ကျွန်တော်ပြောတာလေးကို ဆုံးအောင်နားထောင်ပေးပါ..တော်ပြီးကွာ ဘာမှလာမပြောနဲ့ မင်းလဲထွက်သွား ငါလဲသွားတော့မယ်..ပြောလဲပြော နွေသူ့အကျီကိုကြယ်သီတွေပြန်တပ်ပြီး အခန်းထဲက ဦးအောင်ထွက်သွားတယ်..နွေ ....နွေ နေပါအုံးကွာ.. ကျွန်တော်စကားပြောခွင့်ကိုမရတော့ပါ.. နွေအပြင်ကိုရောက်သွားပြီးကျွန်တော် အပြင်ကိုပြန်မထွက်ချင်တော့ဘူး... စိတ်ညစ်စွာနဲ့ကုတင်ပေါ်ခဏလှဲနေမိလိုက်တယ်...နဲနဲကြာတော့အပြင်ကကျော်ကြီးတို့အသံကိုကြားတော့မှာ ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့မိတယ်ဟိတ်ကောင်..နွေကော ကြာလှကြီးလား .. ဟမ်း မျက်နှာလဲမကောင်းပါလား..ကျော်ကြီးက စကားတွေကိုအဆက်မပျက်မေးခွန်းထုတ်ပေမယ့် ကျွန်တော် ဘာမှမရှင်းပြချင်တော့ဘူး..ပြန်မယ်ကွာ..ပြောပြီးကျွန်တော် ရှေ့ကထွက်လာခဲ့မိတယ်...++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ဘာရယ်.... မာလာလန့်တကြားထအော်မိတယ်..နင့်ကို သူက ဒီလိုစကားပြောတယ် ဟုတ်လား.. နင်ကဘာပြောလိုက်လဲဘာပြောရမှာလဲ မာလာရယ်.. ငါလိုမိန်းကလေးနဲ့ သူနဲ့က မတန်ပါဘူး ဒီကောင်လေးက ရိုးသားတယ် ကလေးဆန်တယ်..ငါ့ကြောင့် အဖြူရောင်သူ့ဘ၀လေးကို အမဲစက်တစ်ချို့ မထင်စေချင်ဘူးဟာ...ဒါနဲ့ နင်ကော သူ့ကိုရင်မခုန်မိဘူးလား...ဟင်အင်း မသိဘူး သေချာတာတော့ ငါ့ကြောင့်နဲ့သူ့ဘ၀လေး မနစ်မွန်းစေချင်ဘူးဟာဟား...ဟာဟ ဟ မိနွေသေချာပြီး နင်သူကိုချစ်နေတယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဆို မာလာကလဲ ငါက သူ့ကို ဒုက္ခမရောက်စေချင်တာပါ..ငါသာ ဒီအချိန်မှာ မကောင်းတဲ့မိန်းမ မဟုတ်ဘဲ လမ်းဘေးမှာ ဈေးရောင်းနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဆိုသိပ်ကောင်းမှာပဲ မာလာရယ်..ငါလေ ..ငါ့ကိုယ်ငါလဲ မုန်းတယ် လူတွေကိုလဲ မုန်းတယ် လောကကြီးလဲ မုန်းတယ်.. အိုးးးးအားလုံးကိုမုန်းတယ်ဟာ...ထူးနင်ဘာဖြစ်နေတာလဲ မျက်နှာလဲမကောင်းပါလား .. နေမကောင်းလို့လား..ရော့ အိမ်မှာမုန်ဟင်းခါးလုပ်စားလို့ နင့်အတွက်လာပို့ပေးတာ..မိလင်းလက်ထဲက ချိုင့်ကိုယူရင်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟာ.. ကျေးဇူပဲ ..လာထိုင်အုံး ငါချိုင့်သွားလှယ်လိုက်အုံးမယ်..ဟိုတစ်နေ့ညက အဖြစ်တစ်ခုကြောင့် ကျွန်တော်မိလင်းကို စိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးခံစားနေရတယ်..ပြောပြီးတာနဲ့ မီဖိုထဲကို ၀င်သွားပြီး ချိုင့်ကိုလှယ်နေတုန်း ခါးကိုတစ်ယောက်ယောက်ကလာဖက်တာခံစားလိုက်ရတယ်ထူး..ဘာတွေဖြစ်နေလဲငါ့ကိုပြောပြလေ.. နင်မျက်နှာမကောင်းတော့ ငါ့လဲစိတ်ထဲတစ်မျိုးပဲဟာ.. ပြောပြနော်..ဘာမှမဟုတ်ပါဘူ .. ဒီအတိုင်းပါပဲ ဘာမှမဖြစ်ဘူး နင်ထင်လို့ပါ..ငါသိပါတယ်..နင်တစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်..ပြောရင်က မိလင်းကျွန်တော်ပါးကိုနမ်းလိုက်တယ်..ရွှတ်..နင်ငါ့ကိုအထင်သေးလား ထူး..ငါလေနင့်ကိုချစ်တယ် ငယ်ငယ်ထဲကသံယောဇဉ်အရှိဆုံးက နင်ပဲ ငါ့ဘ၀မှာ ရင်နှီးခဲ့ဆုံ ယောကျာင်္းလေးဟာလဲ နင်တစ်ယောက်တည်းပဲ ထူးရယ်..လင်း ရဲ့ စကားကိုကြားတော့ ကျွန်တော်ရင်ထဲ အောင့်သွားတယ်... ကျွန်တော်လဲ အရင်ကသူ့ကိုချစ်တယ်လိုထင်ခဲ့မိတယ်.. ဒါပေမယ် နွေနဲ့တွေ့တော့မှ ကျွန်တော်သူ့ကို သံယောဇဉ်တွယ်တာ ချစ်တာမဟုတ်မှန်းသေချာသိလိုက်တယ်..လင်းရဲ့ ပါးလေးကို နမ်းရင် ပြန်ဖက်ထားမိလိုက်တယ်..လင်းက ကျွန်တော်ရင်ခွင်ထဲကနေ မော့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ နှုတ်ခမ်းလေက ဟတော့မလို မဟတော့ဘူးလိုနဲ့ နှင်းဆီဖူးရောင်လေးကို ကျွန်တော်ကြည့်ရင် စိတ်မထိန်းနိုင်စွာပဲ အနမ်းတစ်ခုချွေယူလိုက်တယ်... ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းတွေကြားထဲကို လင်းရဲ့အပေါ်နှုတ်ခမ်းပါးလေးထည့်ရင်းက လင်းရဲ့ ကျောပြင်ကိုပွတ်ပေးနေမိတယ်..ထူးလုပ်သမျှကို ငြင်းဆန်ချင်းမပြုနိုင်သူက လင်းတစ်ယောက်ပါ..ထူးရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကြားထဲကိုရောက်နေတဲ့ လင်းနှုတ်ခမ်းလေးက ထူးရဲ့တက်ကြွတဲ့ရမက်စိတ်ကြောင့် နာကျင်လို့ ဟလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ ထူးရဲ့လျှာလေးက နှုတ်ခမ်းကြားထဲကနေပါစပ်ထဲရောက်လာပြီး လင်းရဲ့လျှာလေးကို လာတိုဆော့ကစားနေတယ်..အင်းး အွန်း..အင့်..လင်းရဲ့စိတ်တွေ ကောင်ကင်မှာဝဲပျံသလို ပြန့်လွင့်နေတဲ့အချိန်မှာ လက်တစ်ဖက်က လင်းရဲ့ ညာဘက်နို့ကိုလာပွတ်နေတယ်..ဘယ်လိုမှ လွန်ဆန်ခြင်းမတက်နိုင်တဲ့ အချစ်ရဲ့ တက်ကြွတဲ့ရင်ခုန်သံတွေဟာ ဒီအချိန်မှာ အတားဆီးမရှိ ယိုစီးနေတယ်..ထူးလုပ်ပေးသမျှကို မျက်လုံးလေးမှေးပြီခံစားရင်းက လင်းရဲ့ဖွားဖက်တော်လေးမှာ.. အရည်လေးတွေစို့လာခဲ့ပါပြီး..ပါးစပ်မှလဲ တိုးညှင်းသော စိတ်ခေါ်သံတစ်ချို့ဖြင့် ထူးရဲ့အချစ်စိတ်တို့ကို နိုးလိုက်မိတယ်..အင်း..အင့် အာ..အင်းးးးးးးအင်းးလင်းအကျီးချွတ်ကွာ..ဟာ ရှက်စရာကြီး..ပြောမယ်သာပြောတာပါ လင်ရဲ့အကျီကကြယ်သီးတွေပြုတ်နေပါပြီး... နို့လေးကိုနယ်ရင်းက ထူးဖြုတ်တာကို သိတာပေါ့..မရှက်ပါနဲ့ကွာ လင်းနဲ့ထူးက လင်မယားဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီပဲ..ပြောလဲပြော လင်းရဲ့အကျီင်္ကိုချွတ်ပြီး ဘရာဇီယာကိုပါ ချွတ်ဖို့ကြိုးစားမိလိုက်တော့ ဘယ်နေရာကချွတ်ရမှန်းမသိအောက်ကကျွန်တော်ဖွားဖက်တော်ကလဲ လင်းရဲ့ထမိန်ခံထားလို့ပေါ့ မခံရင်ထားရင် ..အိမ်ကွင်းမှာ တစ်ဂိုးအသာရနေပြီး..ကျွန်တော်အခက်ခဲကိုလင်းကပဲဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ်.. နောက်ကျောက ကလစ်တွေကို သူ့ဟာသူဖြုတ်ချလိုက်တယ်..လင်းရဲ့ လှပတဲ့ နို့နှစ်လုံးဟာ အတားဆီးမရှိ ပေါ်ထွက်လာတယ်.. ဟိုတစ်ညက အမှောင်ထဲမှာဆိုတော့ မသိသာဘူးအခုမှ သေချာကြည့်တော့ လင်းရဲ့နို့သီးလေးတွေရဲပြီး အထဲကိုချိုက်ဝင်နေတယ်...လင်းရဲ့နို့တစ်လုံကို လျှာဖျားလေးနဲ့တိုကစားရင်းက ကျွန်တော်အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်တယ်..ပြီးတော့ ကျွန်တော်လုံချည်ကိုချွတ်ရင်က လင်းရဲ့ထမိန်ကိုပါ တစ်ခါတည်းချွတ်ချလိုက်တယ်..အို.. ထူးကလဲ အရမ်းပဲ...ကျွန်တော်အိမ်မှာနေရင်း အောက်ခံဘောင်းဘီမ၀တ်တက်တော့ ကျွန်တော်ရဲ့ငပဲက ငေါထွက်လာတယ်..လင်းရဲ့အောက်ခံဘောင်ဘီကြားထဲကို လက်ထဲရင်း အစေ့လေးကိုပွတ်ပေးနေတော့အင်းးအင်...အားးအာအီး ရွှီးးအင်းးလင်းရဲ့အသံတွေမီးဖိုခန်းထဲမှာ ပျံလွင့်လာတယ်..အသံထွက်နေတဲ့လင်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေတွေကို စုပ်ရင်းက လင်းရဲ့ပိပိထဲကို လက်တစ်ချောင်းစမ်းသွင်းကြည့်တော့အာ..နာတယ် ထူးဖြည်းဖြည်းလုပ်..ကျွန်တောခေါင်းညိတ်ပြရင် လက်ကိုနဲနဲလေးပြန်ထုတ်လိုက်ပြန်သွင်းလိုက် ၁၀ ခါလောက်လုပ်ပေးပြီး နဲနဲတိုးထည့်ကြည့်တော့အားးအာ..အာလင်းမျက်လုံးလေးတွေစင်းပြီး ကာမအရသာကိုခံစားနေတယ်.. ကျွန်တော်ငပဲကလဲ ထိပ်ပိုင်းမှာ စိုထိုင်းထိုင်းအရည်တစ်ချို့ထွက်နေပြီးလင်းဘောင်းဘီးချွတ်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတော့ လင်းကခေါင်းညိတ်ပြီး ဘောင်ဘီကိုချွတ်တယ်..လင်းရဲ့အဖုတ်လေးက လှတယ်နော်..ဟာ..ဘာတွေပြောနေတာလဲ ..တကယ်ပြောတာ...လင်းငါ့ဟာကိုကိုင်ကြည့်ပါလာအားးးမကိုင်ချင်ပါဘူး ..ပြောမယ်သာပြောလိုက်ရတာပါ လင်းထူးရဲ့ဟာကြီးကိုကိုင်ကြည့်ချင်တယ်..ကိုင်ကြည့်ပါဟာ နင်ကလဲငါတောင် နင်အဖုတ်ကိုကိုင်သေးတာပဲပြောလဲပြော ထူးက လင်းရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီး သူ့လီးကို လင်းလက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်တယ်နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး အကြီးကြီးပဲ နင့်ဟာကြီးကနင်ကြိုက်လား..သွား ဘာတွေလာမေးနေတာလဲ..မြန်မြန်လုပ်တော့ ငါလာတာကြာနေပြီး အိမ်ကလိုက်လာအုံးမယ်..ငါကလုပ်ချင်တာကြာပြီးဟနင်စိတ်ပါမှကောင်းတာလေ နင့်ကိုစိတ်ပါအောင်လုပ်ပေးနေတာဘာစိတ်ပါတာလဲမသိဘူးသွားး.လင်းမသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီးပြောလိုက်တာကိုသိတော့ ထူးကနင်ခံချင်လာအောင်ကိုပြောဟဲ့ သိပြီးလားးဟာ..ထူးတော်ပြီးကွာ ..ဘယ်လိုလဲခံချင်ပြီးလားမသိဘူးမသိရင် မလုပ်သေးဘူး ခံချင်အောင်လုပ်အုံးမယ်ထူးနင်နော်. နင်မသိဘူးလား ခံချင်လို့ငါ့ဟာ မှာအရည်တွေရွှဲနေတာ နင်မသိဘူး လား ကဲရပြီးလားဟားဟားဟားငါသိပါတယ်ဟာ နင့်ကိုစတာပါ..ပြောရင်းနဲ့လင်းရဲ့နိုလေးတွေကိုဖွဖွလေးချေပေးရင်း လင်းပေါင်တစ်ခေါင်းကို မတင်လိုက်တော့ဟာ ဘာလုပ်တာလဲ လဲသွားအုံးမယ်မလဲပါဘူးဟာ ငါလုပ်သလိုသာနေလင်းရဲ့ပေါင်ကိုမတင်ပြီး ပေါင်အောက်ကနေ လင်းရဲ့ခါးကိုလှန်းဖက်ပြီး ကျွန်တော်ရဲ့ လီးကို လင်းရဲ့အဖုတ်ရှေ့တေ့ပြီး အဖျားလေးထိဝင်အောင် ဖိသွင်းလိုက်တယ်..အာ..လင်းရဲ့အာမေနိတ်အသံတစ်ခုထွက်လာတယ်နာလို့လား လင်း..အင်းနာတယ်ထူးရယ်ဖြည်းဖြည်းလုပ်နော်..ဟုတ်ပါတယ်..လင်းပြောသလိုပဲ လင်းရဲ့အဖုတ်လေးက အပျိုစစ်စစ်လေးကိုကင်ရတာဆိုတော့ အကြပ်တည်းတော့ရှိတာပေါ့.. ဟိုတစ်ညကဆို မှောင်လို့သာ မသိတာနှစ်ယောက်သားသွေးများက မြင်မကောင်းအောင်ပေးခဲ့ကြတယ်...အင်းပါလင်းရယ်.. ကျွန်တော်ပြောပြောဆိုဆို လင်းအဖုတ်မှရွှဲထွက်နေသော အရည်တစ်ချို့ကို လက်နဲ့ယူလိုက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ လီးကိုသုတ်လိုက်တော့ နည်းနည်းချောတောတောလေးဖြစ်သွားတယ်..လင်းကတော့ ဖီလ်းတက်နေဆဲပဲ.. ကျွန်တော်ရဲ့လက်မောင်းတွေကို ညစ်ထားရင် နောက်ထက်လာမယ် ကျွန်တော်ဟာလေးကိုတောင်းတနေဆဲပေါ့ကျွန်တော် နောက်တစ်ကြိမ် လင်းရဲ့အဖုတ်နားကို တေ့ပြီးဖြေးဖြေးချင်း ထည့်ရင်းက နဲနဲလေးအားနဲ့တစ်ဝက်လောက်ထိ စောင့်သွင်းလိုက်တယ်အင့်..“အ.အာ.”လင်းရဲ့ပါစပ်မှ နာကျင်သံလား ဖီလ်းတက်သံလားတော့မသိဘူး ကျွန်တော်အရမ်းစိတ်တွေ တက်ကြွနေတော့ သူ့ကို ဂရုမစိုက်အားတော့ဘူး ကျွန်တော် မှန်မှန်လေးတစ်ဝက်လောက်ကိုထုတ်သွင်းလုပ်ရင်းကပဲ လင်းရဲ့ နို့သီးတွေကို ပွတ်ပေးနေမိတယ်အား..အာ.၇ွှီးး အင့်..အင့် အ.အ.လင်းရဲ့အသံတစ်ချို့နဲ့ ကျွန်တော်အသံတစ်ချို့ဟာ မီဖိုထဲမှာတိုးတိတ်စွားထွက်နေတယ်.. ပတ်ဝန်ကျင်ကိုမေ့နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့နတ်ပြည်လေးမှာတော့ အလွန်ပျော်နေကြတယ်..အား..အင့် ..လင်းဖီလ်းအရမ်းတက်နေပြီး ကျွန်တော်ရဲ့ ကျောကုန်ကိုလှမ်းဖက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အောက်ကနေ သူ့ဟာကိုေ၇ှ့တိုးပေးသလိုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်စောင့်လိုက်တဲ့ အချိန်နဲ့ကွက်တိဖြစ်သွားတော့ ကျွန်တော်လီးတစ်ဆုံးဝင်သွားတယ်..အင့်..အအား အာ.အ.ရွှီး..အာ အင့် အင့် အင့်ကျွန်တော်ရဲ့စောင့်ချက်တိုင်းကိုအလိုက်သင့်ပြန်ကော့ပေးနေတဲ့ လင်းရဲ့အပေးကောင်းမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ခရီးတစ်ခုရဲ့ ပန်တိုင်းကိုလျှင်မြန်စွာရောက်ခဲ့ပါတယ်.. အား..အာထူးရယ်..အင့် ကောင်းတယ်ကွာ.. လင်းပြီးတော့မယ် ထူးရယ်..ခဏလေး လင်းကိုယ်လဲပြီးတော့မယ်..လင်းပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လဲ မြန်မြန်လေးအချက် ၂၀ လောက် စောင့်ချက်ပြင်းပြင်းနဲ့ လင်းရဲ့ကော့ပေးချိန်မှာစောင့်မိတယ်အာ..အာ .အ ..အအင့် အား ရွှီး အီး..အင့်ဟော.ဟော..ရှုး...လင်းရဲ့ အသက်ရှုသံတွေပြင်လာတာနဲ့အမျှစိတ်တွေဟာ အရာရာကို အမှောင်လိုဖြစ်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်ရဲ့ ၇ှိသမျှအားအင်တွေကိုလင်းထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ရင် လင်းရဲ့တင်းကြပ်စွာဖက်တွယ်ထားတဲ့ကြားက နို့သီးလေးတွေကိုတော့ ပွတ်ကစားပေးနေမိတယ်..လင်း.. ကောင်းလားဟင်.အင်းးး ထူးကောကောင်းတယ်..လင်း ဆေးသောက်နော်..အင်းပါ ဟိုနေ့က မိအေးကို သွားဝယ်ခိုင်းထားတယ် မမ မြအတွက်လို့..ပြောပြီးအိုကေ..ထူးရယ် ငါ့ကိုမထားခဲ့နဲ့နော်..ငါရူးလိမ့်မယ်သိလား..မထားခဲ့ပါဘူးဟာ မိလင်းကလဲစိတ်ချ ပြောမယ်သာ ပြောလိုက်တာပါ..အဲဒီအချိန်မှာ နွေရဲ့မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော်သတိရလိုက်မိတယ်ထူးဒါဆိုငါပြန်တော့မယ် တော်ကြာ ကြာနေလို့စိတ်ပူနေလိမ့်မယ်..အော်..အေး.နှုတ်ဆက်အနမ်းလေး ချစ်သူဇနီးလေအတွက်ပေးလိုက်မိတယ်..ဒီနေ့နွေကိုသတိရတာနဲ့ နွေတို့နေရာလေးကို ရောက်ခဲ့တယ်..တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ နွေအပြင်သွားခါနီးနဲ့တွေ့တယ်“နွေဘယ်သွားမလို့လဲ”မြို့ထဲသွားဖို့ရှိလို့ ကျော်ကြီးကော မပါဘူးလားဟင်းအင်း နွေကိုသတိရတာနဲ့ တစ်ယောက်တည်းထွက်လာခဲ့တာ..“နွေက မြို့ထဲသွားမလို့”အဖော်မပါဘူးလား ဒါဆိုကျွန်တော်လိုက်ပို့မယ်လေ..“လိုက်ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့..မင်းအားလို့လား”ရတယ် အားတယ် ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်ဒီနေကမှ ဆိုင်ကယ်မယူလာဖြစ်ဘူး .. ဘာနဲ့သွားမှာ လဲ တက္ကစီနဲ့လားဟင်အင်းလိုင်းကားနဲ့ပဲသွားမယ်..ဒါလဲကောင်းတာပဲ ..နွေနဲ့ကျွန်တော် ကားမှတ်တိုင်းကို စကားတပြောပြောနဲ့လျှောက်လာရင် ကားမှတ်တိုင်ရောက်မှန်းမသိရောက်ခဲ့တယ်..ကျွန်တော်ဘေးနားက အမျိုးသမီးဟာ မကောင်းတာလုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတဲ့ အသိကျွန်တော်ခေါင်းထဲကို နည်းနည်းမျှဝင်မလာပဲပျော်ရွှင်နေမိတယ် ပြီးတော့ နွေလိုခန္ဒာကိုယ်အချိုးကျကျနဲ့ တောင့်တင်းတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ လမ်းတွဲလျှောက်နေရတဲ့အတွက် ဂုဏ်လဲယူမိတယ်..ဒီလိုနဲ့ ကားလာတော့ကျွန်တော်တို့ မြို့ထဲမှာ နွေလိုအပ်တဲ့အသုံးအဆောင်တွေဝယ်တယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော်ကို အအေးလိုက်တိုက်တယ်မင်းအချိန်ရလား နွေသန်လျင်ဘတ်ကသူငယ်ချင်းအိမ်ကိုသွားချင်လို့...ရပါတယ် နွေရဲ့ စောသေးတာပဲသွားလေ ..အိုကေ ဒါဆိုသွားမယ်..နွေရဲ့အနားမှာ ဒီလိုကပ်နေခွင့်လေး ရရင်ပဲကျေနပ်နေတဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့ နွေရဲ့ကိုယ်သင်းနံလေးတွေကိုရင်ခုန်မိတယ်..တစ်ခါတစ်လေတော့ ညီအငယ်ကောင်က သူ့အစွမ်းပြချင်တယ်ထင်ပါတယ် မာန်ဖီတက်တယ်..ကျွန်တော်တို့သန်လျင်က အပြန်မှာ အစိုးမရတဲ့ မိုးမမက ၇ွာချပါလေကောဗျာ..ဟာ..မိုးကလဲကွာ ဒုက္ခပဲ မိုးတွင်းကုန်တော့မယ်ဆိုပြီးထီးမယူလာမိဘူး..ဟုတ်တယ်နော် မိုးကလဲချက်ခြင်း၇ွာတာပဲ ”မိုးက တော်တော်လေးကြမ်းသည်”ခဏလေးအတွင်းမှာပဲ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် သန်လျင်က ပြန်မယ့်ကားမလာခင် မှတ်တိုင်မှာ မိုးတွေစိုရွှဲကုန်တယ်ဟော..ကာလာပြီးနွေ. ကားလာတာနဲ့နွေလက်ကို ဘာမှမပြောပဲဆွဲတက်ခဲ့တယ်..နွေဘာမှတော့မပြော ကျွန်တော်လဲ မိုးစိုနေတဲ့နွေကိုသနားလို့ကားက အရှိန်လေးနဲ့ မောင်းထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ မိုးကသဲ လေကတိုက်ဆိုတော့ နွေခဏတွင်မှာပဲ ချမ်းနေပုံရတယ် အသားတွေတစ်ဆက်ဆက်တုန်းနေတယ်.. ကျွန်တော်မှာလဲ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ချွတ်ပေးစရာမပါဘူး ကျွန်တော်တောင် ရှပ်အတိုလေးနဲ့ တော်တော်ချမ်းနေပြီး...နွေ..အရမ်းချမ်းလို့လားဟင်..နွေဘာမှမပြောခေါင်းလေးပဲညိတ်ပြတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲနွေ..စိတ်မဆိုးနဲ့နော် အော်လဲမအော်နဲ့ ကျွန်လူကြားထဲ အော်ခံရမှာတော့ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ဖက်ထားပေးမယ်..ပြောပြောဆိုဆိုကားပေါ်မှာတင်ပဲ နွေ့ကိုကျွန်တော်ဖက်ထားလိုက်တယ်နွေတော်တော်ချမ်းရှာတယ်ထင်တယ်.. ဘာမှပြန်မပြောဘူး..ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ရင်ခုန်သံတွေကိုတော့ သူကြားနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်..မကြာပါဘူး နွေကျွန်တော်ရဲ့ ရင်ငွေ့ကို တကယ်လိုအပ်လာတယ်ထင်တယ် ကျွန်တော်ရင်ဘတ်ထဲ ခေါင်းထည့်ပြီးမှီလာတယ်..ပျော်လိုက်တာဗျာ ကျွန်တော်ပျော်တာထက်ကို ကျွန်တော်ရဲ့ ညီလေးကပိုပျော်ပုံရတယ်..သူလဲကုန်းထကြည့်သေးတယ် ဒီကောင်မိုးအေးတာတောင်ကွေးမနေဘူး....ထူး..နွေခေါ်သံကြားတော့မှာ သတိဝင်လာပြီး “ဘာလဲဟင်” မသိရင်ချစ်သူတွေကျနေတာပဲနွေမရတော့ဘူး ထူး အရမ်းချမ်းလာပြီးကားပေါ်က ဆင်မှရမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်အပြင်ကိုချောင်းကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပါတယ် မိုးကလဲ မရပ်ဘူး ရွာကောင်းတုန်း မိုးနှောင်းကောင်းတယ်ထင်ပါတယ်..ခဏလေး နွေ ရှေ့မှတ်တိုင်မှာ ကျွန်တော်အသိအိမ်တစ်အိမ်ရှိတယ် အဲဒီမှာ ဆင်နားလိုက်မယ် နော်အင်း..မြန်မြန်ကွာနော် အရမ်းချမ်းနေလို့နွေ့ရဲ့ဒီစကားဟာ အရမ်းတန်ဖိုးရှိတာပဲ ကျွန်တော်ပိုပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်လိုက်တယ်ရှေ့မှတ်တိုင်ပါတယ်အကို နောက်က စပါယာကို ကျွန်တော်ပြောရင်းနွေရောက်တော့မယ်နော်..ကျွန်တော်ပြောပြီး မကြာပါဘူး ကားဘရိတ်အုန်လိုက်တာကြောင့်နွေ့ပါးလေကို ကျွန်တော်အနမ်းတစ်ခု ရလိုက်တယ်..ဆောရီးနွေ..ကျွန်တော်ပြောပေမယ့် နွေကဘာမှပြန်မပြောဘူးကားပေါ်ကအရင်ဆင်းသွားတယ်..လာနွေ ဒီလမ်းထဲမှာ သူတို့အိမ်က ကားမှတ်တိုင်နဲ့ မဝေးဘူး.........နွေကိုခေါ်ပြီး ကျွန်တော်သူငယ်ချင်း တိုးအောင်တို့အိမ်ထဲကိုဝင်တော့ အိမ်တံခါးပိတ်ထားတယ်.ဟာ..နွေ မရှိဘူးထင်တယ် ဒုက္ခပဲ..ဟာကွာ..အရမ်းချမ်းပါတယ်ဆိုမှနွေက စိတ်ပျက်စွာဖြင့်ညည်းလိုက်တော့ခဏလေး နွေ ဘေးအိမ်က အန်တီမြကိုမေးကြည့်အုံးမယ်ကျွန်တော်အရင်ဒီမှာ တစ်နှစ်နေခဲ့တော့ အန်တီမြနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားပဲ အဆင်ပြေမှာပါ..အန်တီမြ ..အန်တီမြ.. ကျွန်တော်ဘေးအိမ်ကိုလှမ်းခေါ်တော့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်..တီမြ မရှိဘူးရှင့်.. မြို့ထဲကိုသွားတယ်..ဟာ ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတာ ဒါပဲလားမသိဘူးဟုတ်လား ညီမ ..တိုးအောင်တို့ဘယ်သွားကြလဲ အကိုသူ့သူငယ်ချင်းပါ အရင်ကဒီမှာနေတာပါကိုတိုးအောင်တို့က အလုပ်သွားတယ် သူ့မိန်းမက သူ့ရွာပြန်သွားတယ် ..ဘာဖြစ်လို့လဲ....အကိုတို့မိုးမိလာလို့ကွာ အဲဒါသူ့အ၀တ်စားနဲနဲယူဝတ်မလို့..သော့တော့ထားခဲ့တယ် ကိုတိုးအောင်က သူ့မိန်းမလာရင် ပေးလိုက်တဲ့ဟာ..ဟုတ်လား အကို့ကိုခဏပေးပါကွာနော်..ဟာ ဖြူမပေးရဲ့ဘူး..ကိုတိုးအောင်မှာထားတာ အကိုမှမပါတာ..အားခက်ရချည်ရဲက ဒီကလေးဟေ့ ကိုထူး ..မိန်းမခိုးလာတာလားနောက်မှအမည်ခေါ်သံကြားလို့ကြည့်တော့ အန်တီမြအတော်ပဲအန်တီမြရေ..ကျွန်တော်တိုးအောင်အ၀တ်စားနဲနဲယူဝတ်မလို့ မိုးမိလာလို့ အဲဒါသော့ခဏလောက်အော်အေးအေး အိမ်မှာရေနွေလာသောက်အုံးလေဟုတ်ကဲ့နောက်မှလာမယ်..ခုက အ၇မ်းချမ်နေလို့အေးနင့်မိန်းမတော်တော်ချမ်းနေပုံပဲ..နင်ကတော့ အရွေးတော်တယ် တော်တော်လှတယ်နော်ကျွန်တော်ပြုံမိလိုက်တယ် ဘာမှမပြောတော့ဘူးဟဲ့ဖြူ သူ့တို့ကိုသော့ပေးလိုက်လေဟုတ်ကဲ့ တီမြ ဆိုပြီးခဏနေတော့အောက်ဆင်းပြီးသော့လာပေးတယ်ကျေးဇူနော် ညီမသော့ရတော့ နွေကိုကြည်လိုက်တာ အရမ်းကိုချမ်းပြီး နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ပြာနေတယ် ..ဒါပေမယ့် ဖူးငုံနေတဲ့ နွေ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေက လှနေဆဲပဲမိုးရေကြောင့်ဆိုးရွှဲနေတဲ့ နွေ့အကျီပါးပါးလေးကြောင့် အထဲက နွေ့အသားတွေကို မြင်နေရပြီးအတွင်းက ဘရာဇီယာ ထဲက ရှန်ထွက်နေတဲ့ နွေ့ရဲ့ဖြူလုံးလုံးနဲ့ နို့တွေကိုပါတွေ့နေရတယ်.. လုံချည်ကလဲ မိုးကြောင့်အသားနဲ့ကပ်နေတော့ ဖြောင့်စင်းပြီးတောင့်တင်းတဲ့ နေ့ရဲ့ကိုယ်လုံးအလှဟာ ပန်ချီကားတစ်ချက် ဆွဲထားသလိုပဲ..အိမ်ထဲရောက်တော့..ဒီကောင်တွေအခန်းထဲမှာပဲသွားလဲတော့မယ်..လာနွေကျွန်တော်စကားကြောင့်နွေမျက်လုံးလေး ၀ိုင်းစွားနဲ့ ကျွန်တော်ကိုကြည့်တယ်အော်..ကျွန်တော်ပြောတာအဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနွေ..အခန်းထဲကိုလိုက်ပြီး အ၀တ်စားဝင်ရွေးပေးမလို့ပါ ပြီးမှ နွေလဲလေ ကျွန်တော်ပြန်ထွက်မယ်.လာလိုက်ခဲ့.. ကျွန်တော်ရှေ့ကဝြင်သွားတော့ နွေနောက်ကလိုက်လာရင်းမင်းလဲအ၀တ်စားလဲအုံး မင်းလဲတုန်းနေတယ်..ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်လဲအရမ်းချမ်းနေတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ချစ်သောနွေရဲ့ရှေ့မှာတော့ အားကိုးစေချင်တဲ့ ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ရဲ့ မာန်တစ်ချို့နဲ့ပေါ့..ရပါတယ် ..ရော့..ဒါလေးဝတ်ထားလိုက် တန်းပေါ်မှတွေ့သော တိုးအောင်မိန်းမ အကျီးတစ်ထည်ပေးလိုက်ပေမယ့် ဆိုးတာက လုံချည်မတွေ့ခြင်းပါ.. ခဏလေ လုံချည်ရှားအုံးမယ်..နော်..အင်း..ကျွန်တော်လုံချည်ရှာနေတုန်း နွေးက အကျီကိုလဲလိုက်တယ်.. ကျွန်တောမျက်စီက ရှာတဲ့လုံချည်ကိုမတွေ့ စိုရွှဲနေတဲ့ နွေးရဲ့လုံချည်အပေါ်ကိုတက်သွားတာကိုပဲသတိထားမိတယ်...ဟင်.. လုံချည်မတွေ့သေးဘူးလေ.. နေပါစေတော့ နွေဘာသာရှာတော့မယ် မင်းအ၀တ်စားလဲလိုက်တော့.. ပြောလဲပြောတန်းပေါ်ကပုဆိုးတစ်ကွင်းနဲ့အကျီကိုနွေကယူပေးတယ်....ကျွန်တော်အ၀တ်စားလဲရင်နဲ့ နွေကိုကြည့်ရင်း ရင်တွေခုန်လားတယ်..နွေ..တိုးတိုးလေးခေါ်လိုက်တော့ဟင်..ဘာလဲ..စူးရှတဲ့နွေးရဲ့မျက်လုံတွေအောက်မှာ ကျွန်တော်ကျရှုံးသွားပြီး ချမ်းသေးလားဟင်..အင်းချမ်းတော့ချမ်းတယ် နည်းနည်းသက်သာပါတယ် ဒီထဲမှာက အပြင်မှာလေတိုက်တော့ပိုအေးတယ်..ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာလို့ဖက်ထားပေးရအုံးမလား.. ကျွန်တော်ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ပြောတော့ဟွန်းးးးးးးး နွေက တစ်ကယ်ချမ်းလို့အဖက်ခံတာပါနော်..ဒီတိုင်းဆို နာပြီးမှတ်ဟားဟားဟား..နွေကလဲကွာ ကျွန်တော်ကစေတနာနဲ့ပါ...သိပါတယ် ဒါကြောင့်လဲနွေက အဖက်ခံတာပေါ့နွေးဒီကိုစမ်းကြည့်စမ်း..ပြောလဲပြောကျွန်တော်ရင်ဘတ်ပေါ်ကို နွေးလက်ကိုတင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လိုလဲ ဟင်..နွေကဘာမှမသိစွာနဲ့မေးတော့ကျွန်တော်အခုထိရင်ခုန်သံတွေမရက်သေးဘူးနွေရယ်ကျွန်တော် နွေးကိုရင်ခွင်ထဲဆွဲထည့်ပြီး နွေးပါးလေးတွေကိုနမ်းလိုက်တယ်အို..ဘယ်လိုလုပ်တာမင်း နွေအငိုက်မိသွားကာ ကျွန်တော်ရင်ဘတ်ထဲကိုဟန်ချက်မဲ့စွာနဲ့ ခိုခွင်သွားတယ်ချစ်တယ်နွေးရယ်.. ကျွန်တော်နွေးကိုအရမ်းချစ်တယ်..ပါးစပ်ကလဲပော နွေးရဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုလဲ အနမ်းပန်တွေချွေလိုက်တယ်..နွေက ရုန်းကန်ခြင်းတော့ မလုပ်ဘူး ဒါဆိုအိုကေလောက်တယ်..ဆိုတာကျွန်တော်လဲ သိတာပေါ့နွေဘာလို့ ကျွန်တော်ကိုမချစ်တာလဲဟင်..ဟင်အင်းကွာ ဒီမေးခွန်းကိုမမေးနဲ့ နွေမဖြေချင်ဘူးနွေးရယ်..အရမ်းချစ်တယ်ကွာ ..ကျွန်တော်နွေရဲ့ဖူးငုံနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေကို ကျွန်တော်ဖမ်းစုပ်လုက်ပြီး နွေးပါစပ်ထဲကို လျှာလေးထိုးထည့်ရင် ဆော့ကစားလိုက်တယ် ..အွန်းး အူး.အင့်းနွေးရဲ့အသံလေးတစ်ချို့ကြောင့် ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေ တားဆီးမရဖြစ်ခဲ့တယ်..လက်တွေက ကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ နွေးရဲ့ ရင်ဘတ်က နို့တွေကို ပတ်သတ်ပြီး နဲနဲမနာအောင်အပေါ်ကဖိပေးလိုက်တယ်အားးနာတယ် ထူး..နွေက မဟုတ်တာလုပ်စားပေမယ့် နွေနို့တွေကိုဘယ်သူမှပေးကိုင်တာမဟုတ်ဘူးထူးရဲ့နွေပြောတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် နွေရဲ့နို့တွေက ပျော့မနေပဲ မာမာတင်းတင်းလေး ရှိနေဆဲပဲကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေက အပြင်ကနေအားမရတော့ဘူး အကျီထဲကိုလက်ထည့်ပြီး ပွတ်ချေပေးလိုက်တယ်အားး အင့် အီးး နွေးရဲ့ဖီလ်းတက်တဲ့အသံလေးတွေ ထွက်လာတော့..ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်အကျီကိုလှန်တင်ပြီး နွေးရဲ့ နို့သီးလေးကို လျှာလေးနဲ့ တို့ထိကစားပြီး နို့သီခေါင်းလေးတွေကို မနာအောင် ဖွဖွလေးကိုက်ပေးလိုက်တယ်အားး ထူးရယ်..အင်း..အာ..အနွေရင်ထဲက ရမက်သံတွေကြားလေလေ ကျွန်တော်ညီတော်မောင်က မနေနိုင်လေပဲ...ကျွန်တော်နွေရဲ့ စိုနေတဲ့လုံချည်ကိုချွတ်ချလိုက်တော့..အိုးထူးကလဲ ဘာလုပ်မလို့လဲ..နွေကလဲကွာ ဒီအဆင့်ထိရောက်တော့မှာ မောင်ဘာလုပ်မှာလဲမေးနေရသေးလားအချိန်ရတုန်း မောင်လို့ပြောမိလိုက်တယ်အံမယ် မောင်တဲ့ သူ့ကိုဘယ်သူကခေါ်လို့လဲ ရှက်လဲမရှက်ဘူးဘာလို့ရှက်ရမှာလဲ နွေကိုစချစ်မိတည်းက မောင်လို့ခေါ်ခိုင်းမလို့စကားတွေဆက်ပြောနေရင် နွေဖီလ်းပြောက်သွားမှာ ကြောက်တာနဲ့နွေးအဖုတ်လေးကို လက်နဲ့အုပ်ပြီး ဘေးက ပေါင်လေးတွေကိုပွတ်ပေးလိုက်တယ်အားး အီးး ထူး၇ယ် နွေးတစ်ချက်ချစ်ကော့ကော့လာတာကိုသတိထားမိတယ်..ကျွန်တော်စိတ်တွေ မရတော့ဘူးနွေးရယ် ခွင့်လွှတ်နော်..ပြောလဲပြော ကျွန်တော်ပုဆိုးကိုချွတ်ပြီး နွေ့အဖုတ်လေးထဲကို ထည့်ဖိုပြင်လိုက်တော့..မလုပ်နဲ့.. သွား.. နွေဆောင့်တွန်ထုတ်လိုက်တယ်..ဟာ..ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ နွေ ကျွန်တော်ရှက်လဲရှက်ဒေါသလဲထွက်သွားတယ်ဆောရီးကွာ.. မောင်ရယ် နွေကိုတစ်ကယ်ချစ်ရင် မလုပ်နဲ့နော်..ဒါက မောင့်ကိုချစ်လို့ပါ..မောင်တစ်ကယ် ဆန္ဒပြင်းပြနေရင် နွေ မောင့်ဟာလေးကို စုပ်ပေးမယ်နော်..နွေအဖုတ်ထဲကိုတော့ မထည့်ပါနဲ့မောင်ရယ်..နွေဘာဖြစ်လို့လဲကွာ မောင်နားမလည်ဘူးနွေသူများတွေနဲ့တော့..တော်တော့ .. မပြောနဲ့ ငိုသံပါကြီးနဲ့ နွေပြောတော့ ကျွန်တော်တောင်လန့်သွားတယ်နွေဘာလို့ငိုတာလဲ မပြောနဲ့တော့ကွာ တော်ပြီး..နွေ့ရဲ့ ငိုသံနဲ့ အော်သံတွေကြောင် ကျွန်တော်လန့်သွားပြီ ဖီးလ်းတွေပါ ပျောက်သွားတယ်နွေ ဘာ ဖြစ်လဲ မောင့်ကို ပြောပြလေ ...မောင်အခွင့်ရေးယူတာ မဟုတ်ပါဘူး နွေရယ်.. မောင့်စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်တော့လို့ပါ..နွေမောင်တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ.....မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး နွေမောင့်ကို အဲဒီလိုဖြစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးမောင်ရယ်နွေလေ နွေရဲ့ ဒီမသန့်ရှင်းတဲ့ မကောင်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဘ၀နဲ့ မောင့်ရဲ့အချစ်ကို မခံယူရဲတာပါ..ပြီးတော့ နွေလေ မောင့်ကိုအရမ်းချစ်တယ်..မောင့်အနားမှာရှိနေရင်ပျော်တယ် မောင့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုလဲ ဖြည့်ဆီးပေးခြင်ပါတယ်ဒါပေမယ့် နွေချစ်တဲ့သူကို နွေ့ရဲ့ဘ၀ကို ဦးဦးဖျားဖျားပေးရမှာ ခုတော့ နွေ.. နွေ မောင့်ကိုမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးမောင်ရယ် နွေပြောရင်းနဲ့ မောင့်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲ ရှိုက်ငိုရင် မှေးဆက်လိုက်တယ်..နွေ..ရယ် မောင်နွေကိုချစ်တာ ဒါတွေနဲ့မဆိုင်ပါဘူး နွေမောင့်ကိုတစ်ကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပဲ မောင်ပျော်ပါပြီ.. ရတယ်နွေဘယ်လိုဘ၀ပဲရောက်ရောက် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နွေချစ်တယ်ဆိုရင်မောင်ပျော်ပြီ သိလားနွေ.. နွေရဲ့ နံဖူးလေးကို အနမ်းတစ်ခုပေးရင်း တိတ်တော့နော်နွေနွေခေါင်းလေငြိတ်ပြီ မောင့်ရဲကိုမော့ကြည့်ရင်းက မောင်ခုနက နွေ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားလားဟင်မဆိုးပါဘူးနွေရယ်..ဒါပေမယ် စိတ်ကအရမ်းလွတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ နဲနဲတော့ အောင့်တာပေါ့ခစ် ခစ် .. နွေရယ်ရင်က ခုကော မောင့်စိတ်တွေပြေသွားပြီလားမပြေသေးဘူး နည်းနည်းတော့ကျန်သေးတယ်အိုကေ .. ဒါဆိုနွေ့ဘ၀ရဲ့ပထမဦးဆုံးချစ်သူကို နွေတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်လုပ်ပေးမယ်နော်မောင့်ကို နွေစုပ်ပေးမယ်.. ဘယ်လိုလဲအင်းကောင်းသားပဲ နွေ .. ဒါပြီရင်တော့ ဒီအတိုင်းမရတော့ဘူးနော်နွေ..ဘာကိုလဲ မောင်ရဲ့  ရှေ့ဆက်တက်မှာလေ ဟဲ ဟဲ နွေသိပါတယ်သိဘူးကွာ..သိဘူး ပြောရင် မောင့်ရင်ဘတ်ကိုမနာအောင်ထုရင်းက မောင့်နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းစုပ်လိုက်တယ်စိုးမိုးလာတဲ့နွေ့နှုတ်ခမ်းတွေကို မောင့်ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေက မခံခြင်စိတ်အပြည့်နဲ့ ပြန်လည်စိုးမိုးလို့ နှစ်ယောက်သား လျှာဖျားလေးများ အထဲမှာကျီဇယ်နေတယ်... နွေ့ရဲ့လက်တွေက မောင့်ရဲ့ ပုဆုိးအပေါ်ကနေ မောင့်ရဲ့ လီကို ပွတ်သတ်ရင် တစ်ခါတစ် ရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်နဲ့ ဂွင်းတိုက်သလိုလုပ်ပေးတယ်..မောင်က နွေရဲ့ ဖင်(တင်သား)တွေကို လက်နဲ့ပွတ်ရင်းတစ်ခါတစ်လေ နဲနဲလေးညစ်လိုက်သေးတယ်မကောင်းတာလုပ်စားပေမယ့် နွေ့ရဲ့ တင်သားတွေက ကျစ်နေတုန်းပဲ..နွေ့ရက်လက်တွေက မောင့်ပုဆိုးကို ဖျည်းလိုက်ရင်း မောင့်လီအပေါ်ကို ပိုင်းစိုးစွာ လီးထိပ်လေးကို လက်မလေးနဲ့ ပွတ်ပေးရင်းတစ်ခါတစ်လေ လက်ဝါးအလယ်မှာ လီကိုထောက်ပြီး ညီမငါးဖော်က လီးတက်ပေါ်စုလို့ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပေးတယ်မောင့်ရဲ့လီးတွေကိုကိုင်နေရင် နွေတစ်ယောက် ရင်ထဲမှာ ဆာလောင်တောင်းတာပြီး နွေ့ရဲ့ အဖုထ်ထဲမှ အရည်များထွက်လာပြီး ယားသလိုလို တစ်ခုခုပဲထိုးထည့်လိုက်ရတော့မလို ခံဒနာမျိုးကိုခံစားရတယ် ဒီလိုခံစားရလေ လေ မောင့်ရဲ့ လီကို ဂွင်းတိုက်ပေးတာ မြန်လေလေ မောင်တစ်ယောက် နွေ့ရဲ့ပြုစုမှုအောက်မှာ အီးးးအား အီးး .. နည်းနည်းလေးမြန် မြန်လုပ်လိုက်နွေကောင်တယ်..မောင်ကကောင်တယ်လို့ပြောလေ နွေပျော်လေပဲကိုယ်ချစ်တဲ့သူအတွက်ပဲလေ.. ဒီထက်ကောင်းအောင်မောင့်ကိုနွေလုပ်ပေးအုံးမယ်နော်..လိုပြောရင် နွေမောင့်ရဲ့ လီကိုမျက်နှာနားမှာကပ်ပြီး လီထပ်လေးကို နွေ့ရဲ့ ဖူးငုံတဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့တစ်ချက်နမ်းလိုက်ရင်း လျှာနဲ့ လီထိပ်ပိုင်းကို ပတ်ကစားနေလိုက်တယ်..အားးး အာာ..ကောင်တယ်နွေရယ် အားးမောင့်လီးကို အရင်းနားကကိုင်ပြီး ဘေးနားက နေ မောင်လီတစ်လျှောက်အစအဆုံး လျှက်ပေးနေတယ်.. မောင့်လီက ကြီးတယ်လိုပြောရမယ်ထင်တယ် နွေလဲ ယောက်ကျာင်္းပေါင်းများစွားကို ခံခဲ့ဘူးပါတယ် ဒါပေမယ့် မောင့်လီလောက်တော့ မကြီးဘူးထင်တယ်အခုမှ လီကိုသေသေချာချာ အနီးကပ်ကြည့်တာလဲပါမယ်ထင်ပါတယ်.... နွေရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို မောင့်ရဲ့လီးတစ်ချောင်းလုံးက အစကနေ ငုံလိုက်တာ နောက်မှာ လက်တစ်စုပ်စာကျော်ကျော် ကျန်နေသေးတယ် တော်တော်ရှည်တဲ့လီပဲ... နွေ့ရဲ့အဖုတ်လေးက ဒီလီးကိုတောင်တစွာနဲ့အောက်မှာငိုနေတယ်ထင်တယ် မျက်ရည်တွေရွှဲလို့ပေါ့.. အင့်.. နွေလန့်သွာတယ် မောင်နွေ့ရဲ့ပါစပ်ထဲကို သူ့လီကြီးနဲ့ စောင့်ထိုးလိုက်တာအားး အင့် အင့် နွေမောင်လုပ်သမျှကို အလိုက်သင့်လေးနေပေးရင်..နွေမောင်ပြီတော့မယ်ကွာ နွေ.. အားအာ.. မောင့်ရဲ့ ရမက်သံတွေကို နွေပျော်နေမိတယ်.. ပါးစပ်ထဲမှာ မောင့်လီးကို နှမျှောစွာထုပ်ပေးရင်းအပြင်မှာပြီးဖို့ နွေ့ လက်က ကိုင်ထားတုန်း မောင့်ရဲ့ တွန်းလဲခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်... အား အွန်. ကြမ်းပေါ်ကို ကျသွားလို့ နာတာတစ်မျိုး မောင့်ရဲ့ လဲကျချိန်လေးအတွက်စောင့်ချက်က လက်ဖြောင့်တစ်ယောက်လို တိကျတဲ့ ပစ်မှတ်ကိုစိုက်ဝင်သွားတယ်..အင့် အား အာ အား မောင်က ပြန်ထုတ်ပြီး တော့ ဖြည်းဖြည်းခြင်းအရင်းထိထိုးထည့်လိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်လုပ်နေတော့ကျွန်မ ယောကျာင်္းပေါင်းများစွာနဲ့ ဒီလို ဆက်ဆံခဲ့ဖူးပေမယ့် အခုလို့ တစ်ခါမှ ကွန်ဒုံးမပါပဲ ပထမဦးဆုံးခံဘူးတာ ပြီးတော့ ပိုက်ဆံရလို ခံတာမဟုတ်ပဲကျွန်မချစ်သောမောင့်ကို ချစ်ရမ္မက်တွေနဲ့ ပေးဆပ်လိုက်တာဆိုတော့ ကျွန်မ အဖုတ်လေးက အ၇ည်တွေရွဲကျလာပြီး မောင့်ရဲ့ လီကို ပြန်ထုတ်သွားရင်တောင် ရင်ထဲမှာဝမ်းနည်းသလိုခံစာရတယ်.. မောင့်ရဲ့ လီဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျွန်မအဖုတ်လေးနဲ့ ရသလောက်တော့ညှစ်ထားပါသေးတယ် ဒါပေမယ့် ပြန်ထွက်သွားတာပဲ ဒီလိုထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နဲ့ မောင့်ရဲ့ အပြုစုတွေကြောင့် ကျွန်မ ရင်တွေ တလှပ်လှပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး မောင့်ရဲ့ ခါးကို လှမ်းကိုင်ရင် မောင့်လီးနဲ့ ကျွန်မအဖုတ်နီးနိုင်သမျှ နီအောင်ကော့ပေးနေမိတယ် ...အား အား အာ အား ဆောင့်ကွာ မောင်ရယ် ဆောင့် မောင်ကြိုက်သလောက်ဆောင့်ကွာ..အား အင့် အင့် အီး ရွှီးး အင့်... အား ကောင်းတယ်ကွာ မောင်ရယ် ....မောင့်ရဲ့ လက်တစ်ဖက်က ကျွန်မရဲ့ နို့တွေကို လာနယ်ပေးရင်က ဆောင့်ချက်တွေပျော့သွားပြီး ဖြည်းဖြည်းခြင်းအရင်းထိရောက်အောင် ကျွန်မအဖုတ်ထဲကို ထည့်လိုက် ထုတ်လိုက်နဲ့ ဒါကလဲ တစ်မျိုးလေး ဖီလ်း ပဲ .. အားးးး ကောင်းတယ် မောင်ရယ်..အားးမောင်ပွတ်နေတဲ့ ကျွန်မနို့တွေက ဖီလ်းတစ်မျိုး ကျွန်မ အဖုတ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ မောင့်လီးက ဖီးတစ်မျိုးနဲ့ မရိုးနိုင်အောင် အာရုံနှစ်ခုက ကျွန်မ ရဲ့စိတ်ကို ပိုတက်ကြွစေခဲ့တယ်..မောင်ရယ် တော်ပါတော့ကွာ မြန်မြန်ဆောင့်တော့ နွေပြီးခြင်လာပြီးမောင်...မောင်ကျွန်မ ရဲ့စကားကြောင့် ဆောင့်ချက်တွေအရှိန်ယူပြီး ဆောင့်ထည့်လိုက်ပါတယ်..အားးး အာ အားး အီးရွီးးးးး ကောင်းတယ် ဆောင့် ဆောင့်မောင်ဆောင့်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မ အဖုတ်လေးကိုကော့ပေးမိလိုက်တယ်...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မချစ်သောမောင် တစ်ယောက် နဲနဲ သက်သာမလားလို့ပြီးတော့ မောင့်လီးကိုလဲ ကျွန်မ တက်မက်လွန်းလို့ပါမောင်ရယ်.. ကောင်းတယ်ကွာ ..အား အားး အီးးမောင် နွေပြီးတော့မယ် မောင် ဆောင့် ဆောင့် မြန်မြန်လေးဘွတ် ဘွတ် ပြွတ် ပြွတ်.. ဗျီးး ကျွန်မ အဖုတ်က အရည်တွေရွဲနေတော့ မောင့်လီဝင်လာတိုင်း အသံတွေက မရိုးနိုင်အောင်ပဲအား ဘွတ် ပြွတ် အား အားးအီးးးးးးးး အားး အာ အ .. အင့်းးးးးးးးး အားးးးးကျွန်မရဲ့ အဖုတ်ထဲမှ အ၇ည်တွေ ထွက်ကျလာချိန်မှာ မောင့်မျက်နှာလဲ နီရဲပြီးတော့အင်းးးးအီး အင့်းး ကျွန်မ အဖုတ်ထဲကို အရည်တွေနဲ့လာပန်းသလိုပဲအားးးးးး မောင်ပြန်မထုတ်နဲ့အုံးနော်.. ခဏလေးနေပါအုံးမောင်ရယ်နော်..အင်းပါ နွေရယ် မောင်လဲ မထုတ်ခြင်သေးဘူး နွေ့ရဲ့ အိုးထဲကို မောင်ခရမ်းသီးလေး နှပ်ထားခြင်လို့..မောင်ကျွန်မအပေါ်ကို မှောက်ချလိုက်ပြီး ကျွန်မပါးတွေကို နမ်းရင်းက နွေမောင့်တို့ချစ်သူမဟုတ်တော့ဘူးနော်လင်မယားတွေဖြစ်သွားပြီး သိလားး..အင်း..ကျွန်မခေါင်ညိတ်လိုက်တော့ မောင်တော်တော်လေးပျော်သွားပုံရတယ်..ဒါနဲ့ မောင်က နွေ့ကို တစ်ကယ်လက်ထက်မှာလားဟင်..ဘာ..ဘယ်လိုနွေ.. ဘယ်လိုမေးလိုက်တာလဲကွာအော်.. မောင်ရယ် နွေဘ၀က မိန်းမကောင်းတစ်ယောက်မှမဟုတ်တာ မကောင်းတာလုပ်စားတဲ့မိန်းမလေနွေမောင့်ကိုချစ်လို့ မောင်လုပ်တာကိုခံတာနော်..ဒါဆိုနွေက မခံချင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအား ကွာ မောင်ကလဲ နွေလဲခံချင်လို့ပေါ့ ကိုယ်ချစ်သူလုပ်တာကိုနွေပြောတာက မကောင်းတာလုပ်စားလို့ အလွယ်တစ်ကူပေးတယ်မထင်နဲ့လို့မောင့်ကိုချစ်လို့ ပြီးတော့ ကိုယ်ချစ်သူလုပ်တာလဲခံချင်လို့ပေါ့နွေကြိုက်လားဟင်..ဘာကိုလဲ မောင်မောင့် ဟာကိုပေါ့ နွေရဲ့..ဘယ်ဟာကိုလဲ မောင်ကလဲ နွေမသိဘူး ကွာ ရှက်စရာဟာကွာ နွေကလဲသိရဲ့သားနဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်မသိဘူးကွာ ..မသိဘူးမောင်ပြန်မယ်တော်ကြာ မောင့်သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်လာရင် ဒုက္ခဖြစ်မယ်. ထာတော့မောင်ကျွန်မ နဖူးလေးကိုနမ်းတော့ ကျွန်မလဲ မောင့် နဖူးလေးပြန်နမ်းရင် အ၀တ်စားတွေ ပြန်ဝတ်ကြတော့မောင့်က ကျွန်မ ဘရာဇီယာလေးကို လာဝတ်ပေးနေတယ်.၏ဒီအချိန်မှာ ကျွန်မရင်တွေအပျော်ဆုံးပေါ့(သံယောဇဉ်လွင်)
Keep Reading... မက်စရာ အချစ်ကမ္ဘာ
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၁၀)နှစ်ခန့်က ကွဲကွာနေခဲ့ကြသော မျိုးလွင်နှင့်လီလီသန်းတို့သည် မမျှော်လင့်ပဲ စကော့ဈေးတွင်တွေ့ကြရာမှ..“ ဟင် ... ကိုမျိုးမဟုတ်လား”“ဟာ ....လီလီပါလား.. ဟုတ်ပါတယ်.. ကိုမျိုးပါ”တဦးနဲ့တဦးဖက်လှဲတကင်းနှုတ်ဆက်ကြလေသည်။“ကိုမျိုးနဲ့လီလီအခုလို မမျှော်လင့်ပဲတွေ့ကြရတာ လီလီတော့တော်တော်ဝမ်းသာမိတယ် ကိုမျိုးရယ်”“ကိုမျိုးလဲလီလီ့လိုပါပဲ”“အခု ကိုမျိုးဘယ်မှာနေသလဲဟင်”“ကိုမျိုးအိမ်ထောင်ကျသွားပြီလေ.. လီလီရောအိမ်ထောင်ကျပြီလား”“လီလီကတော့ အသက်(၅၀)ကျော်အဖိုးကြီးတယောက်နဲ့ အိမ်ကအတင်းပေးစားတာနဲ့ မကြိုက်ပဲနဲ့ယူလိုက်ရတယ်လေ”အခုလိုကိုမျိုးနဲ့ပြန်တွေ့တော့ လီလီတို့အချစ်ပန်းတွေ ပြန်ပွင့်ပြီပေါ့ကိုမျိုးရယ်”“ဒါဆိုလီလီဘယ်နေ့အားလဲဟင်.. အားတဲ့တနေ့ ဒီစကော့ဈေးထဲက လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ဆုံကြရအောင်”“ကောင်းသားပဲကိုမျိုး လီလီနောက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကိုမျိုးပြောတဲ့နေရာကို မနက်(၉)နာရီလောက် အရောက်လာခဲ့မယ်လေ ကိုမျိုးစောင့်နေနော်”“ကောင်းပါပြီတဲ့ဗျာ စောင့်နေပါ့မယ်”နောက်တပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာတော့ မျိုးလွင်စောင့်နေတဲ့နေရာကို (၉)နာရီကျော်ကျော်လောက်မှာ လီလီသန်းရောက်လာလေသည်။“ကိုမျိုး စောင့်နေရတာကြာပြီလား”“မကြာသေးပါဘူး လီလီဘာစားဦးမလဲ”“တော်ပြီ အိမ်ကစားလာခဲ့တယ်ကိုမျိုး”“ဒါဖြင့်လာ ကိုမျိုးသူငယ်ချင်းအိမ်သွား၇အောင်”ဟုဆိုကာ လီလီသန်းပုခုံးကိုဖက်ပြီးဗတာ့ သူငယ်ချင်းဇော်ဇော်အိမ်ကို ခေါ်သွားလေတော့သည်။ ဇော်ဇော်ကတော့ လူပျိုကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီး အိမ်တွင်တဦးတည်းနေထိုင်သူလည်း ဖြစ်ပေသည်။“ဇော်ဇော် မင်းရှိပါ့မလားလို့စိတ်ပူနေတာကွာ မင်းကိုတွေကလိုက်မှပဲ ဘ၀င်ကျသွားတော့တယ်”“လာ သူငယ်ချင်းတို့ မင်းတို့ဘယ်ကလာကြတာလဲ ငါ့ဆီကိုတမင်သက်သက်လာတာလား”“မင်းဆီကိုပဲ တမင်လာခဲ့တာပေါ့သူငယ်ချင်းရာ”“မေး ဒါဖြင့်အတော်ပဲ အခုအပြင်သွားမလို့ မင်းတို့ကိုပဲထားခဲ့တော့မယ် ရော့ ဒီမှာအိမ်သော့”ဇော်ဇော်ထွက်သွားပြီးနောက်“ခုမှပဲ ကိုမျိုးနဲ့လီလီ လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ကြ ရတော့တယ်”မျိုးလွင်မှာ ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ လီလီသန်းပုခု့းကို တင်းကျပ်စွာဆုတ်ကိုင်ပြီး ကုလားထိုင်မှဆွဲ၍ ထူလိုက်လေသည်။ နှစ်ယောက်သားယှဉ်လျက် မတ်တပ်ရပ်အနေအထားဖြစ်သွားခိုက် မျိုးလွင်က လီလီသန်း၏ခါးကိုဖက်ကာ တဘက်က ကျောပြင်ကိုဖက်ထားပြီး လီလီသန်းပါးပြင်ကို နမ်းရှုံ့လိုက်လေသည်။ ထိုမှတဖန် လီလီသန်း၏ နီထွေးပါးလျသည့် နှုတ်ခမ်းလေးကို အနောက်တိုင်းဆန်သည့် အနမ်းလေးများဖြင့် စုတ်ယူနေလေသည်။ အနောက်တိုင်းဆန်လှသည့် အနမ်းမျိုးကိုကျင်လည်နေသည့် လီလီသန်းမှာ မျိုးလွင်၏အနမ်းကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်၍ ကျင်လည်စွာစုပ်ယူလိုက်သဖြင့် မျိုးလွင်မှာရမက်များ ပိုမိုတက်ကြွလာခဲ့သည်။ လီလီသန်းမှာလည်း ယောက်ျားတယောက်၏ရင်ခွင်ဝယ် ထွေးပိုက်ခံရပြီး ပူနွေးသောအနမ်းများကိုလည်း ရရှိနေသဖြင့် သူမ၏ရမက်ဆန္ဒများလည်း ပိုမိုကျယ်ပြန့် နက်ရှိုင်းလာရပြန်လေသည်။ နှစ်ဦးစလုံးအနမ်းများ၏နောက်ဝယ် နစ်မြောနေကြပြီးမှ မောဟိုက်ပန်းလျစွာဖြင့် လူချင်းခွာလိုက်လေသည်။သို့ရာတွင် မျိုးလွင်ကလီလီသန်း၏ လက်တဖက်ကိုဆွဲ၍ ကုတင်ရှိရာသို့ခေါ်လာပြီး ကုတင်ပေါ်သို့လီလီသန်းကို အသာယာ ညင်သာစွာလှဲတင်လိုက်လေသည်။ မျိုးလွင်၏ကိုယ်ကလည်း လီလီသန်းအနီးတွင် ကိုယ်တဘက်စောင်းကာ ထိုင်လေတော့သည်။ကုတင်ပေါ်သို့အခန့်သားပက်လက်ကလေးကျသွားလေတော့သည်။ လီလီသန်းမှာပရိယာယ်ကြွယ်ဝစွာဖြင့် အပေါ်အကျီင်္ကြယ်သီးများကို ချွတ်လိုက်လေသည်။ အတွင်းခံဘရာစီယာလေးသာကျန်ရစ်တော့သဖြင့် လီလီသန်း၏နို့နှစ်လုံးမှာ မခို့တရို့လေးပေါ်လွင်လျက်ရှိသည်။ မျိုးလွင်ကတော့လီလီသန်းရဲ့ ဘရာစီယာကိုချိတ်တချောင်းချင်းဖြုတ်လိုက်သဖြင့် လီလီသန်း၏ရင်သားအပေါ်ပိုင်းမှာ တံခါးဖွင့်လိုက်သလို ဘရာစီယာလေးကကွာကျသွားသဖြင့် ခုံးခုံးမို့မို့နို့နှစ်လုံးက အတားအဆီးမရှိမြင်ကွင်းကျယ်အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် လီလီသန်းမှာအသားညိုသူဖြစ်၍ ၀င်းဝင်းဝါ၀ါစိုစိုပြေပြေမရှိလှသဖြင့် မျိုးလွင်အဖို့ရာကတော့ ကျေနပ်မှုရှိသင့်သလောက်မရှိပေ။ နို့နှစ်လုံးမှာထွားထွားမို့မို့ကြီး မဟုတ်သော်ငြား ကိုင်တွယ်ကစားရာတွင်မူ မာမာကျစ်ကျစ်နှင့်ခပ်လုံးလုံးလေးရှိနေသည့်အတွက် မျိုးလွင်အဖို့ကတော့ တနည်းအားဖြင့်ကျေနပ်မိသလိုလည်း ရှိလေတော့သည်။ နို့သီးခေါင်းထိပ်ဖျားလေးမှာ မကြီးစေ့ခန့်ရှိပြီးတော့ မဲမဲညိုညိုနှင့်ခေါင်းထောင်ပြီးထလာသည့်အခါတွင်မူ မျိုးလွင်အဖို့တလုံးပြီးတလုံးစို့လိုက် လက်ညိုးနှင့် လက်မညှပ်ကိုင်ကာ ပွတ်ချေလိုက်ဖြင့်ကစားနေလေသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် လီလီသတ်းအပေါ်စိတ်ကြွလာသလို လီလီသန်းမှာလည်းမျိုးလွင်က အပေါ်ပိုင်းကိုနှိုးဆွကလိနေသည်မို့ ထိုးထိုးထွန့်ထွန့်နှင့်စိတ်ထလာလေသည်။မျိုးလွင်တယောက်အပေါ်ပိုင်းကို လက်ကမြင်းပြီးနောက်တွင်တော့ လီလီသန်းခါးဝတ်ထဘီကို ကျင်လည်စွာဖြင့်ဆွဲချွတ်လိုက်လေသည်။ ၀မ်းဗိုက်သားပါးပါးလေးအောက်မှ ပြေပြေကလေးဆင်းသွားသောဆီးစပ်တွင်မူ ထူးထူးကဲကဲမို့မောက်ပြီး ခုံးထနေသည့်စောက်ဖုတ်ကလေးက မျိုးလွင်အာရုံကို လှုပ်ရှားသွားအောင်ဆွဲဆောင်လိုက်လေသည်။ အမွှေးမျှင်ဟူ၍တပင်မျှမရှိ ပြောင်သလင်း ခါနေပြီးတော့ ညိုမဲမဲအကွဲကြောင်း၏ထိပ်ဖျားဝယ် စောက်စိမဲမဲလေးက လက်သန်းလုံး ထိပ်မျှပြူထွက်လျက်ရှိနေလေသည်။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်သေးသေးသွယ်သွယ်ရှိနေသော်ငြား လီလီသန်း၏ စောက်ဖုတ်မှာမူ လူနှင့်မလိုက်အောင် လက်ဝါးကြီးတအုပ်မျှုခုံးခုံးမို့မို့နှင့် ကြွကြွရွရွကြီးဖြစ်နေလေသည်။ မျိုးလွင်မှာမြင်တွေ့ရသောအာရုံများကြောင့် သူ၏လီးကြီးမှာလည်းမာတောင်လျက် ငေါက်တောက်တောက်ကြီး ဖြစ်လာလေသည်။ လီလီသန်း၏စောက်ဖုတ်ကို လက်ဝါးဖြင့်အုပ်၍ဆုပ်ယူလိုက် စောက်ဖုတ် နှုတ်ခမ်းသားလေးများကို ပွတ်သပ်လိုက်လုပ်နေရာမှ ငေါက်တောက်တောက်ပြူးထွက်နေသည့် စောက်စိညိုမဲမဲလေးကိုလည်းပွတ်သပ်ပြီးတော့ ကစားနေပြန်သည်။လီလီသန်းမှာကိုမျိုးနှိုးဆွမှုများကြောင့် အကြောများတဖျင်းဖျင်းနှင့်ဖြစ်လာပြီး တကိုယ်လုံးမှာလည်း ထိုးထိုးထွန့်ထွန့်နှင့် တလှုပ်လှုပ်တရွရွဖြင့် စောက်ပတ်အတွင်းမှ ယားကျိကျိဖြင့် မနေနိုင်အောင်ယားယံလာရသလို ရှေ့ပြေးအရည်ကြည်လေးတွေက စိမ့်ထွက်လာပြီးတော့ရွှဲရွှဲစိုကာ ဖင်ကြားတိုင်အောင်စီးကျလာလေတော့သည်။ လီလီသန်း၏စောက်ဖုတ်ကို ကိုင်တွယ်ကစားနေသော မျိုးလွင်အဖို့သူ့လက်မှာချွဲကျိနေသောအရည်များ ပေကျံလာသည့်အတွက်ကြောင့် မိမိလီလီသန်းကို ကိုင်တွယ်ရန်အချိန်ကျရောက်လာပြီဟု သိရှိသွားလေသည့်အတွက် ခါးမှလုံချည်ကိုချွတ်ပစ်လိုက်လေသည်။ မဲမဲတုတ်တုတ်နှင့်သာမန်လီးများထက် ထွားကြိုင်းကြီးမားပြီးထောင်ထနေသော လီးကြီးကိုတွေ့မြင်ရ သောလီလီသန်းမှာ ရင်ကလေးများဖိုသွားပေမဲ့ အရသာထူးကိုတော့တောင့်တလျက်ရှိပေသည်။မျိုးလွင်တယောက်လီလီသန်းပေါင်နှစ်လုံးကို ဖြဲပြီးတော့ကားလိုက်သည့်အခါတွင်တော့ လီလီသန်း တယောက်အလိုက်သိစွာဖြင့် ဒူးနှစ်ချောင်းကိုထောင်ပစ်လိုက်လေသည်။ မျိုးလွင်သည်ထောင်ထားသော လီလီသန်းကိုယ်ပေါ်သို့တက်ပြီးတော့ ခွလိုက်လေသည်။ ထို့နောက်သူ၏လီးကြီးကို လီလီသန်း စောက်ပတ်အ၀တွင်တေ့ပြီးတော့ အသာလေးဖိသွင်းလိုက်လေသည်။“အမလေး... ကျွတ် ကျွတ် နာလိုက်တာ ကို ကိုမျိုးရယ်”ကွမ်းသီးခေါင်းမြုပ်ရုံမျှ လီးကြီးက၀င်သွားသည့်အခါ လီလီသန်းမှာနာကျင်လှသဖြင့် မျိုးလွင်ရင်ဘတ်ကို အသာဆီးတွန်းလိုက်ရုံမက မျက်နှာလေးလည်းရှုံ့မဲ့ပြီးတော့ ပါးစပ်မှငြီးတွားကာစုတ်ထိုးမိသည်ထိ ဖြစ်သွားရလေသည်။ လီးထိုးသွင်းလိုက်မိသည်နှင့် စောက်ခေါင်းလေးမှာ ၁၅နှစ် ၁၆နှစ်အပျိုလေး များစောက်ခေါင်းကဲ့သို့ ကျဉ်းကျဉ်းလေးရှိနေသည်ကိုထိတွေ့ခံစားလိုက်ရသဖြင့် မျိုးလွင်မှာ အတော်ပင်ကျေနပ်သွားလေသည်။မိမိလင်ဖြစ်သူမှာ သာမန်လူတို့လောက်ပင်ရှိမည်မဟုတ်ပဲ ခပ်လှီလှီဖြင့်သေးသွယ်သောလီးဖြစ်နေသဖြင့် လီလီသန်းတယောက်ကာမအရသာခံစားရာတွင် တင်းတိမ်ကျေနပ်မှုမရှိပဲအားမရအောင်ဖြစ်ခဲ့သဖြင့် အသစ်အဆန်းတွေတွေ့ကြုံလိုသည့် ဆန္ဒများရှိနေခဲ့ရာယောက်ျားတဦးနှစ်ဦးမျှဖြင့် နောက်မီးလင်းခဲ့ဘူး လေသည်။ သို့ရာတွင်သူမအဖို့ တင်းတိမ်ကျေနပ်မှုမရရှိခဲ့ပေ။ ယခုမူမိမိမျှော်မှန်းထားသည်ထက် လွန်ကဲသည့်အဖြစ်မျိုးလာကြုံနေရသဖြင့် စိတ်ထဲတွင်မတော့ကျေနပ်နေလေသည်။မိမိဟာကြးကလီလီသန်းစောက်ဖုတ်အတွင်း နစ်မြုပ်ပြီးတော့သာသာလေးဝင်သွားရုံမျှဖြင့် လီလီသန်းခမျာ ထွန့်ထွန့်လူးပြီး မိမိရင်ဘတ်ကိုဆီးတွန်းလိုက်သဖြင့် မျိုးလွင်မှာအသာငြိမ်လိုက်ရာမှ“နာသလားဟင်” ဟုမေးလိုက်လေသည်။“နာတယ်ကိုမျိုးရယ် ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ”“အစပထမမို့ပါ အသန်းရယ် ကိုမျိုးဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ့မယ်”ပြောရင်းနှင့်သူ၏လီးကို လီလီသန်းစောက်ဖုတ်ထဲသို့ ပြန်ပြီးတော့သွင်းလိုက်လေသည်။ပေါင်နှစ်ချောင်းဖြဲကားထားသဖြင့် နဂိုအနေထားအရလီးလီသန်းစောက်ဖုတ်မှာပြဲသွားသည့်အပြင် တံတွေးများဆွတ်ထားသဖြင့် ချွဲနေသောမျိုးလွင်လီးကြီးမှာ ယခုတကြိမ်တွင်မူ လီလီသန်း စောက်ဖုတ်ထဲသို့ကျပ်ကျပ်ညပ်ညပ်ဖြင့် ၀င်ထွက်နေလေတော့ရာ မျိုးလွင်သည်စိတ်ဇောအဟုန်များ ပြင်းသထက်ပြင်းထန်လာပြီး လီလီသန်းစောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ သူ၏လီးကိုဒလကြမ်းပင်ဆောင့်ကာ ဆောင့်ကာ လိုးသွင်းနေတော့သည်။ စီးစီးပိုင်ပိုင်ဖြင့် လီလီသန်းစောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ မျိုးလွင်လီးချောင်းကြီးဝင်ထွက်လှုပ်ရှားနေရသဖြင့် မကြာခင်အချိန်မှာပင် လီးတံတလျှောက်ထူပူလာကာ လီလီသန်းမှာလည်းစံချိန်မီလီးကြီး၏အလိုးကို ခံစားနေရသဖြင့်အရသာများ ထူးကဲစွာခံစားရင်းအောက်မှနေ၍ ကော့ကာကော့ကာပင့်ပင့်တင်ပေးနေလေသည်။ထို့နောက်တွင်တော့ မျိုးလွင်သည်အရသာများအီဆိမ့်စွာခံစားလာပြီး မနားတမ်းပင်လီလီသန်း၏ စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့လီးကြီးကိုထိုးဆောင့်ကာ သုက်ရည်များကိုပန်းထုတ်လိုက်သလို လီလီသန်းသည်လည်း ကာမစိတ်အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိသွားပြီးတော့ သုက်ရည်များကလည်းဒလဟော ပန်းထွက်လာလေသည်။“ပြွတ် ဘွတ် ပလပ် စွတ်”“အိုး အီး ရှီး အား ဟင်း ဟင်း အီး အား..”နှစ်ယောက်သားမှာ ဖက်လျက်သားကုတင်ပေါ်တွင် ငြိမ်သက်သွားလေတော့သည်။ညနက်ပိုင်းတွင် ဒေါ်လေးမြစိတ်ကျေနပ်သည်အထိ စခန်းသွားရမည့်အရေးကို မျိုးလွင်အဖို့ရင်လေး နေလေသည်။ တစတစနှင့်ညနက်လာသည့်အခါတွင် အိပ်ယာသို့ဝင်လာရလေသည်။ သူ့မိန်းမခင်ခင်မှာ အိပ်ရာထက်တွင်လဲလျောင်းကာ သူ့ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပေသည်။ ခင်ခင်မှာညစဉ်တကြိမ်တခါမျှ စခန်းသွားရသည်ကိုပင်ကျေနပ်နေသည့် မိန်းမဖြစ်ကာမျိုးလွင်မှာအချိန်မဆိုင်းတော့ပဲ စိတ်မပါ့ တပါနှင့်ပြုမူနေကျအတိုင်း ဟိုဟိုဒီဒီကိုင်တွယ်နှိုးဆွမှုများပင် မပြုနုင်တော့ပဲထဘီကိုလှန်ကာ တက်ခွလိုက်လေသည်။ သို့ရာတွင်သူ၏လီးကြီးကခါတိုင်းကဲ့သို့ တောင့်တောင့်တင်းတင်းမရှိတော့ပဲ ပြော့ခွေခွေဖြစ်နေလေသည်။ မျိုးလွင်၏ထူးခြားသောအမူရာနှင့် ပြော့ခွေနေသောလီးကြီးတို့ကြောင့်“ကိုမျိုး ရှင်ကနေ့ညဘာဖြစ်နေလဲဟင် စိတ်မပါဘူးလား” ဟု မေးလိုက်လေသည်။“စိတ်မပါလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာ အလုပ်ကပင်ပန်းတော့ ငြီးစီစီကြီးဖြစ်နေလို့ပါကွာ” ဟု မျိုးလွင်ကပြန်ဖြေ လိုက်လေသည်။
Keep Reading... ပန်း ပန်လျှက်
သည်ကနေ့တော့ ဦးစွမ်းလျှံစိတ်တွေက ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်နေသည်။ မယားကြီးနဲ့ စကားပြောရတာအဆင်မပြေသလို အပေါက်အလမ်းကလည်းသိပ်မတည့်။ ကန်တော်ကြီးတိုက်ခန်းက တတိယမြောက်မယားဆီသွားဖို့ကလည်း သူ့ရက်ပတ်မဟုတ်သေး။ ကလေးဘက်မှာနေနေသော သူ့ညီမ ယောက်ျားဆုံးသွားလို့သွားမည်ဆိုတာတော့ ဖုန်းဆက်ထားသည်။ ဒီကောင်မကတော့ တခါတလေပုံစံတမျိုးချိုးလေ့ရှိသည်။ သူလိုချင်နေသည့်ဆိုင်ကယ်ဝယ်မပေးလို့ ခရီးထွက်မယ်ပြောပြီးတော့ ဘယ်မှမသွားပဲနဲ့တိုက်ခန်းမှာပဲနေတာကိုကြုံဖူးသည်။ ထိုနေ့ကတော်တော်နှင့်အလိုးမခံလို့ ချော့မော့ ပြီးတော့လိုးခဲ့ရသည်။ဦးစွမ်းလျှံကအသက်(၅၀)ကျော်ပေမဲ့ကာမအားကြီးတာကြောင့် ငွေရှာကောင်းသလိုကာမ အားကောင်း နေအောင် အမျိုးမျိုးကြံစည်ထားသည်။ လိုးအားသန်ရန်အတွက် မြွေပွေးသွေးနဲ့စပ်ထားတဲံအရက်များ၊ ဖျံသိုနဲ့ရောထားတဲ့အရက်များကို ယူလာလေ့ရှိသည်။ မညိုရှိန်ရဲ့ဟာကြီးကတော့ အတွင်း ညှစ်ဆွဲအားကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းသည် အိမ်ကမယားကြီးဟာလို ပြဲပြဲအာအာ ရှော်ရွှတ်ရွှတ်ကြီး တော့မဟုတ်ပေ။ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်စီးစီးပိုင်ပိုင်နှင့်အတော်ကြီးကို လုပ်လို့ကောင်းသည်။ သူကတော့ အလိုးသန်တာကလွဲလို့သူ့လီးကလေးလက်မကျော်ရုံလေးပဲရှိပြီး လုံးပတ်ကလည်းလက်ညိုးလက်မတ၀ိုက်စာပဲ ရှိလေသည်။ဒီဟာမျိုးကိုတောင်မှမညိုရှိန်ရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးက စုတ်အားသန်သန်နဲ့ညှစ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ မျှော့ပါ သောအမျိုးစားမဟုတ်ပေမဲ့ အတွင်းကြွက်သားတို့၏ညှစ်အားစုတ်အားကောင်းတာကတော့ အမှန်ပင်။ဒါကြောင့် မညိုရှိန်ကိုမပစ်နိုင်သည့်အပြင် တိုးတိုးပြီးတော့ချစ်နေရလေသည်။ သူ့အဖို့က ငွေသာပ်ါဓာနမဟုတ်ပေကာမစည်းစိမ်ကိုဇိမ်ကျကျခံစားနိုင်ဖို့သာ အရေးကြီးပေသည်။ဒုတိယမယားကလည်းအပြုစုကောင်းသလို ရုပ်ရည်ကလည်းချောမောလှပပေမဲ့ မညိုရှိန်လောက်တော့ လိုးမကောင်းပေ။ အလိုးခံရာတွင်လည်းဦးစွမ်းလျှံကသာဦးဆောင်သွားရသည်။ မညိုရှိန်လိုတက်တက်ကြွကြွ အားမာန်ပါပါ လှုပ်ရှားတတ်သူမျိုးမဟုတ်ချေ။ ထိုဒုတိယမယားဆီလည်းမသွားချင်သေးတော့ ဆိုင်ကယ်ကို မညိုရှိန်ရှိရာ ကန်တော်ကြီးတိုက်ခန်းဘက် ဦးတည်ထွက်ခဲ့သည်။ ရောက်ရောက်ချင်း တတိယထပ်ကိုတန်းတက်ခဲ့ပေမဲ့ သော့ခလောက်ကသာ ဆီးကြိုနေတော့ ဒီတခါ တကယ် ခရီးထွက်ပုံရလေသည်။ ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပြီးတော့ အကျိုးအကြောင်းသိချင်လို့ ဒုတိယထပ်က ၀င်းဝါလတ် ဆိုသော ခင်နေသည့်အမျိုးသမီးကိုမေးရန် အ၀င်တံခါးကိုတွန်းဖွင့်ကြည့်ရာ အတွင်းကပိတ်မထားတော့ အလွယ်ပဲပွင့်သွားတော့သည်။အသံမပေးပဲအတွင်းခန်းထဲဝင်လိုက်စဉ် ဒရင်းဘက်ပေါ်တွင်ပက်လကကားယားကြီးအိပ်နေတဲ့ ၀င်းဝါလတ်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ဖတ်နေသောအပြာကာတွန်းစာအုပ်ကလည်း အောက်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာကျနေလေသည်။ ထဘီကတော့ပေါင်လည်လောက်ကို ရောက်နေပြီးတော့ပေါင်တံဖွေးဖွေးတုတ်တုတ်တွေကလည်း ဦးစွမ်းလျှံရဲ့ကာမစိတ်တွေကို အဟုတ်ပြင်းစွာထကြွစေသည်။ပြီးတော့အပေါ်တပိုင်းလုံးကလည်း ရင်ဘတ်ကြယ်သီးများပြုတ်ထွက်နေတော့ အတွင်းလံဘော်လီဝတ်မထားတဲ့ နို့အုံဖွေးဖွေးတင်းတင်းကြီးက မို့မောက်စူထွက်နေပေသည်။ နို့သီးခေါင်းညိုညိုလေးတ၀ိုက်မှာလည်း ကြက်သီးဖုလေးများက အစီအရီထနေကာစူစူတင်းတင်းလေးဖြစ်နေသည်။ ၀ိုင်းဝန်းမို့မောက်ပြည့်တင်း နေသော နို့အုံဖွေးဖွေးဥဥကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ ဦးစွမ်းလျှံတယောက်ရမက်မီးတွေထပ်မံ တောက်လောင် လာလေသည်။ အခုလိုဝင်းဝါလတ်ရဲ့ပုံစံသာမြင်ရလို့ကတော့ သူလိုလူမပြောနဲ့ဈာန်ပျံရသေ့တောင်မှပဲ ဈာန်လျောနိုင်လေသည်။ ဦးစွမ်းလျှံတယောက်ဘာကိုမှမစဉ်းစားတော့ပဲနဲ့ ၀င်းဝါလတ်ရဲ့ဘေးကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ပြီးတော့ထဘီကိုလှန်လိုက်လေသည်။အမွှေးတမျှင်မှမရှိသော ဖောင်းဖောင်းအိအိအရာကြီးကပြူးကနဲထွက်ပေါ်လာလေသည်။ နှုတ်ခမ်းသား ညိုညိုကြီးကအနည်းငယ် ပြဲဟနေပြီးတော့အရည်ကြည်တို့ဖြင့်စိုစွတ်နေသည်။ အိပ်မက်ထဲတွင်ပါ အဖဲ့ခံနေရသလားမသိ အဖုတ်အုံကြီးတခုလုံးက လှုပ်ခနဲလှုပ်ခနဲဖြစ်နေလေသည်။ ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးက ဘေးသို့ခပ်ကားကားလေးဖြစ်နေတော့ အဖုတ်ကြီးမှာပိညှပ်မနေပဲ ဖောင်းဖောင်းဟဟကြီးဖြစ်နေလေရာ ဦးစွမ်းလျှံကလက်ခလယ်ဖြင့် နှုတ်ခမ်းသားအောက်ခြေကိုပွတ်ဆွဲပေးလိုက်သည်။ နဂိုကပင်ရွအာနေပြီမို့ ယခုလိုခပ်ဖိဖိလေးပွတ်ဆွလိုက်သောအခါ အရည်တွေကဖင်ကြားထဲအထိကိုစီးကျလာလေသည်။ ထိုအခါ မှာတော့လက်ခလယ်ကိုအထဲထိရောက်အောင် ထိုးသွင်းလိုက်သည်။နူးညံ့အိထွေးပူနွေးသောအရသာကို ခံစားလိုက်ရလေသည်။ အမွှေးကင်းစင်နေသောအဖုတ်ကြီးမို့ နှုတ်ခမ်းသား အထက်ပိုင်းအစပ်တွင် အညိုရောင်သမ်းနေသောအစေ့ကြီးကပြူးထွက်နေပေသည်။ ဦးစွမ်းလျှံကတော့ အဆုံးထိမြုပ်ဝင်နေသော လက်ခလယ်ချောင်းလေးဖြင့် စိုက်ကာဝိုက်ကာချဲ့ကာချဲ့ကာမွှေဆွပေးလိုက်ပါသည်။“အင်း အင် အိ အ အင်..”၀င်းဝါလတ်နှုတ်ခမ်းဖျားကအသံတွေထွက်သွားပြီးတော့ ပက်လက်ကြီးအိပ်နေရာကတစောင်းလှည့်လာသည်။ ပေါင်လုံးအိအိတွေကြား ဦးစွမ်းလျှံလက်ကပိနေပြီးတော့ စိတ်တိုင်းကျမနှိုက်သာပဲဖြစ်နေလေသဖြင့် သူ့လက်ကလေးကိုညင်ညင်သာသာလေး ဆွဲထုတ်ယူလိုက်သည်။ မျက်စိတွေက မှိတ်ထားဆဲမို့ နိုးနေပုံမရသေးလို့ အသာလေးဒရင်းဘက်ကိုကွေ့ပတ်သွားပြီးတော့ ၀င်းဝါလတ်နောက်ကျောဘက်သို့ သွားလိုက်သည်။ တင်ပါးဆုံအိအိကြီးနောက်မှာ နေရာယူလိုက်သည်။ ညာဘက်ပေါင်ပေါ်တွင် ဘယ်ဘက်ပေါင်ကတင်နေပြီးတော့ ခပ်ကွေးကွေးလေးဖြစ်နေရာ ပေါင်နှစ်လုံးက စိညှပ်ကပ်သပ် မနေပဲကွာဟနေလေရာ ပေါင်ကြားထဲကအဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးက နောက်ကိုပြူအစ်ထွက်နေလေသည်။ထဘီကခါးထိရောက်နေတော့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းတင်ပဆုံကြီးမှာ ပြောင်ဝင်းနေလေသည်။ ဦးစွမ်းလျှံက ခုမှသတိရတော့ အ၀င်တံခါးပေါက်ကိုအပြေးလွှား ဂျက်ထိုးပိတ်လိုက်ရသည်။ယခုအခြေနေရောက်မှဝင်းဝါလတ်ကို မစားရတော့ဘူးဆိုလျှင် တော်တော်ညံ့ရာရောက်ပေမပေါ့။ ၀င်းဝါလတ် သည်လည်းပဲ သူဌေးတယောက်ရဲ့မယားငယ်ဖြစ်ပေသည်။ မယားငယ်ဟူသည်မယားကြီးလိုမဟုတ် သွေးသားစိတ်ဖြေရုံ ကာမကမြင်းကြောထရုံ အရုပ်သာသာမျှသာရှိပေသည်ဟု ဦးစွမ်းလျှံက မယားငယ်များဘက်ကနေပြီးတော့ ကိုယ်ချင်းစာတွေးပေးတတ်လေသည်။ထိုသုိ့ကိုယ်ချင်းစာသောကြောင့်ပင် ၀င်းဝါလတ်အား လိုအပ်နေသောအခွင့်ရေးကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန် စိုင်းပြင်း နေခြင်းဖြစ်သည်။အ၀င်တံခါးကိုပိတ်ပြီးနောက်မှာတော့ စောစောကနေရာမှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်သည်။ အမွှေးတမျှင်မျှ မရှိသော ၀င်းဝါလတ်ရဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းဟဟကြီးက မက်မောစရာကောင်းလွန်းနေသည်။ ၀င်းဝါလတ် တယောက် အိပ်မက်ထဲတွင်သူ့ယောက်ျားနှင့် ပယ်ပယ်နယ်နယ်ဆော်နေရာမှ ဦးစွမ်းလျှံလက်က မွှေနှောက်ပြီးတော့ ကလိလိုက်တဲ့အတွက်အိပ်မက်ကလန့်နိုးလာခြင်းပါ။အစမှာတော့သူ့ယောက်ျားကိုမြင့်သန်းထင်နေလို့ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်လျက်က မျက်လုံးအသာလေး ဖွင့်ကြည့်တော့မှပဲ မညိုရှိန်ယောက်ျားဦးစွမ်းလျှံကြီးဖြစ်နေလေသည်။ ဗမာလီးနဲ့အလိုးခံရတာရိုးနေပြီဆိုတော့ တရုတ်လီးကိုထူးထူးဆန်းဆန်းကြီး ခံကြည့်ချင်နေသည်မို့ဆက်ပြီးတော့ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်လိုက်မိသည်။ မညိုရှိန်ကိုမတွေ့လို့ဒီအခန်းထဲကို ၀င်လာခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်။သူမယောက်ျားလိုးကြောရှည်ကြောင်းကိုတော့ မညိုရှိန်မကြာမကြာပြေပြနေ၍သိထားပြီးဖြစ်လို့ အခုတော့ ဗဟုသုတအနေနဲ့ တချီတပွဲတော့နွှဲလိုက်ပေဦးမည်။ ဒီအချိန်မှာတော့သူ့ယောကျာ်းကိုမြင့်သန်းလဲ လာဦးမှာမဟုတ်သေးတော့ ဦးစွမ်းလျှံနဲ့ပဲအားရအောင် ခံပြီးတော့ကာမအရသာယူပေတော့မည်။ ဦးစွမ်းလျှံကဘောင်းဘီထဲထည့်ယူလာတဲ့ မြွေပွေးသွေးနဲ့ရောထားတဲ့ အကောင်းစား ဂျင်အရက်ပုလင်းကိုထုတ်ယူလိုက်သည်။ခပ်ကြာကြာဆော်နိုင်ရန်အတွက်လည်း ဒစ်ကြီးရဲ့အရင်းတ၀ိုက်ပတ်လည်ကို လိမ်းဆေးဖြင့်စိမ့်ဝင်သည်အထိကို ပွတ်လိမ်းလိုက်သည်။ ဒီဆေးကလိမ်းပြီးမိနစ်(၂၀)လောက်ထိစောင့်ရသလို တနာရီနီးပါးဇိမ်နဲ့ နှပ်ပြီးတော့လုပ်နိုင်သည်။ ဆေးလိမ်းပြီးတော့ ဘောင်းဘီချွတ်လိုက်ချိန်မှာ အတွင်းခံဘောင်းဘီ တိုတိုပါးပါးလေးသာကျန်တော့သည်။ အပေါ်အင်္ကျီလည်းချွတ်ပြီးသားဆိုတော့ စွပ်ကျယ်နဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီပဲကျန်တော့သည်။ ရေသန့်ဗူးလျှောက်ရှာရာဗီရိုပေါ်တွင်တွေ့သဖြင့် ယူထားလိုက်ပြီးတော့ ရေသောက်လိုက် အရက်သောက်လိုက် စောက်ဖုတ်ကြီးနှိုက်လိုက်နဲ့ဇိမ်ကျနေလေတော့သည်။ နဂိုထဲက ကာမစိတ်အားကြီးရတဲ့ကြား အရက်သွေးတို့ကပါပျံ့နေလေတော့ ဦးစွမ်းလျှံစိတ်တွေက အဟုန်ပြင်းပြင်းထကြွနေလေတော့သည်။၀င်းဝါလတ်ရဲ့တင်ဆုံထွားထွားမို့မို့ကြီးကို ညာဘက်လက်နဲ့ဖက်ပြီး ဘယ်လက်ကိုဒရင်းဘက်ပေါ်တင် ဒူးထောက်လျက် ခေါင်းကိုအနဲငယ်ငုံ့ကာ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းဟဟကြီးကို ပါးစပ်ဖြင့်စုတ်ပြီးတော့ လျှာနဲ့ယက်ပေးတော့သည်။“ပြစ် ... ပြတ် ပလပ်..”“ပြစ် ပြတ် ပလပ် ပလပ်..”အဖုတ်လေးကသန့်စင်အောင်ဆေးကြောထားတော့ အနံ့အသက်ကင်းစင်ကာယက်လို့အတော်ပင် အရသာကိုရှိနေလေသည်။ ပြူးအစ်နေသောအကွဲကြောင်းလေးတလျှောက်သို့ အတွင်းအထိသူ့လျှာနွေးနွေးကြီးကိုထိုးလိပ်သွင်းကာ ဆန့်လိုက်ကြုံ့လိုက် ကားလိုက်ထိုးလိုက်နဲ့ အမျိုးမျိုးကလိပေးနေတော့သည်။မအိပ်ခင်ကပဲအပြာကာတွန်းဖတ်ပြီးတော့ ရာဂစိတ်တွေကထ အိမ်မက်ထဲမှာလည်း ယောက်ျားနဲ့ ချစ်ပွဲဝင်နေတာကိုမက်ထား ဦးစွမ်းလျှံကလည်းနှိုက်ပြီးတော့ဆွထားနဲ့ဆိုတော့ စောက်ဖုတ်ကြီးတခုလုံးယားကြွပွထလာတာကတော့ ပွင့်ထွက်သွားမလားကို အောက်မေ့ရလေသည်။ ၀င်းဝါလတ်တကိုယ်လုံးဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲတုန်နေတာကတော့ ဒရင်းဘက်တခုလုံးကို လှုပ်ရမ်းနေလေသည်။“အား အင်း အီး ရှီး အ အမေ့ အီး ရှီ ကျွတ် ကျွတ်...”ကြာတော့ ၀င်းဝါလတ်တယောက်ဦးစွမ်းလျှံရဲ့ လျှာကြမ်းကြီးဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့ပဲ တအီးအီးတအင်းအင်းညည်းကာ ပက်လက်လှန်ချလိုက်ရတော့သည်။ အရှိန်ပါပါလှန်ချလိုက်တာဆိုတော့ ဘယ်ဘက်ပေါင်ကငုံ့ပြီးတော့ အဖုတ်ကြီးကိုအားရပါးရ ယက်ပေးနေသောဦးစွမ်းလျှံခေါင်းကြီးကို ဖိမိလျက်သားဖြစ်သွားလေသည်။ဒရင်းဘက်ပေါ်မို့သာ ကြမ်းမာပေါ်သာဆိုရင်တော့ ခေါင်းတခုလုံးအီစိမ့်သွားနိုင်ပေသည်။ ပေါင်နှင့်အဖိခံထားရသောခေါင်းကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့အရက်အရှိန်ကြောင့်လည်း ကာမစိတ်တွေကထကြွကာ ပျော်ရွှ့င်တက်ကြွလာလေသည်။၀င်းဝါလတ်ကမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်ရင်း..“ဟင် လေးလေးလျှံ ဘယ် ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ ရောက် ရောက်လာတာလဲ ကျ ကျမက ဟို ဟို ကျမယောက်ျားမှတ် မှတ်လို့..”အမှန်ကတော့သိပြီးသားပေမဲ့ ရာဂစိတ်တွေကအဟုန်နဲ့ထကြွနေတော့ စကားလုံးတွေကထစ်အနေခြင်းပါ။ ဦးစွမ်းလျှံကတော့ ဘာစကားမှပြောမနေတော့ပဲနဲ့ ထဘီကိုအောက်သို့ဆွဲချွတ်ပြီးတော့ ကြယ်သီးပြုတ်နေသော အပေါ်အင်္ကျီကိုပါဆွဲချွတ်လေရာ ၀င်းဝါလတ်ကအလိုက်သင့်ပြုပြင်ပေးရလေသည်။အခုတော့ အ၀တ်စားလုံးဝမရှိတော့တဲ့ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးေ၇ဆေးငါးကြီးလို ဖုထစ်မို့မောက်နေသော အသားအုံအသားဆိုင်တို့နဲ့ တစ်တုံးတစ်ခဲကြီးကိုလှပနေသော ၀င်းဝါလတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ရမက်မီးကိုအရှိန်ကြီးစွာဖြင့် ပိုမိုတောက်လောင်စေတော့သည်။ ဒရင်းဘက်ပေါ်မှာဆိုတော့ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့မရပဲဖြစ်နေသဖြင့် ဦးစွမ်းလျှံကလည်ကုတ်နှင့်ဒူးကောက်ကွေးအောက်ကို လက်ရှိုသွင်းပြီးတော့မလိုက်ရာ ၀င်းဝါလတ်ကဦးစွမ်းလျှံလည်ဂုတ်ကို လက်နှစ်ဖက်နှင့်သိုင်းဖက်ပြီးတော့ အလိုက်သင့်ပါသွားသည်။ ပွေ့ချီပြီးတော့ဝင်းဝါလတ်ကို ကုတင်ပေါ်မှာကန်လန့်ဖြတ်တင်ထားလိုက်သည်။ ၀င်းဝါလတ်က ဒူးထောင်ပေါင်ကားအနေထားဖြင့် ဦးစွမ်းလျှံကိုကြည့်နေလေရာ ဦးစွမ်းလျှံကအ၀တ်စားအကုန်ကို အမြန်ချွတ်ချလိုက်သည်။၀င်းဝါလတ်ရဲ့ဖောင်းဖောင်းအိအိအဖုတ်ကြီးမှာလည်း ခံချင်စိတ်ကြောင့်ကိုတရွရွတကြွကြွနဲ့ ဟစိဟစိကြီးဖြစ်နေလေသည်။၀င်းဝါလတ်၏ပေါင်ကြားကို ကုတင်အစွန်းထိရောက်အောင် ဦးစွမ်းလျှံကဆွဲယူလိုက်လေရာ ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲကုတင်က မတ်တပ်ရပ်ပြီးတော့လိုးရန် အံကျဖြစ်နေတော့သည်။ဦးစွမ်းလျှံကဒူးနှစ်ချောင်းကိုမလိုက်ပြီးတော့ ပေါင်ရင်းကိုဖိကပ်ထားလိုက်ပြီး လီးကြီးကိုလက်နှင့်ကိုင်ကာ ဖောင်းအာဟပြဲနေသော ၀င်းဝါလတ်ရဲ့အသားနီလန်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်နွေးနွေးအိအိကြီးထဲသို့ ဇွပ်ကနဲကိုထိုးထည့်လိုက်လေသည်။ အတုတ်ကလည်း အလွန်အမင်းမကြီးပဲအရှည်ကလည်း လေးလက်မကျော်ကျော်လေးပဲရှိလို့လားတော့မသိ ရွှပ်ကနဲအဆုံးထိကိုဝင်သွားလေသည်။တိုသည်ရှည်သည်ကြီးသည်ငယ်သည် ကြေးများမနေနိုင်တော့ပဲ ခံချင်စိတ်ကြောင့်အဖုတ်ကြီးတခုလုံး ယားကြွပွထနေတာဆိုတော့ လီးကြီးကစောက်ဖုတ်ထဲကိုအရှိန်နဲ့ဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့ ၀င်းဝါလတ်တယောက်ကျေနပ်အားရသွားတော့သည်။ပေါင်နှစ်လုံးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အကျအနဖိကာ ဖင်ကြီးနှစ်လုံးကိုရှုံ့၍ရှုံ့၍ပွတ်ခါ ဆောင့်ဆောင့်လိုးပါတော့သည်။ လီးတိုအမျိုးစားမို့ ဒီလိုဆောင့်ဆောင့်ပွတ်ထိုးလိုးနည်းက ပိုသဘာဝကျပေသည်။ လမွှေးထူထူမဲမဲအုပ်အုပ်ကြီးတွေက အမွှေးတမျှင်မှမရှိတဲ့ ၀င်းဝါလတ်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကို ပွတ်ကာပွတ်ကပေးနေပြန်ရာ စောက်စိပြူးပြူးလေးကိုမကြာမကြာ ပွတ်ထိကလိသလိုဖြစ်နေရာ ၀င်းဝါလတ်ရဲ့တကိုယ်လုံးမှာရှိနေတဲ့ ကာမကြောမှန်သမျှကို ဖျင်းကနဲဖျင်းကနဲ ကျင်တက်ရှိန်းဖိန်းနေစေတော့သည်။“ဖွတ် ဖွစ် ဖွစ် ပြွတ် ပြွတ် ”“ဖွပ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖွစ် ဖွစ် ရွှစ် ရွှစ် ရွှတ်..”“အ အ ဟင့် အ အင့် အီး အ အမေ့ ရှီး ကျွတ် ကျွတ် ...”တိုသယောင်ရှိနေပေမဲ့လည်း ပွတ်ပြီးတော့ကပ်ကပ်ဆောင့်နေတဲ့အပြင် လမွှေးထူထူတို့ကလည်း အစေ့ပြူးပြူးကြီးကို ဗျိကနဲဗျိကနဲပွတ်သပ်ပေးနေလေတော့ ၀င်းဝါလတ်ခမျာမှာတော့ အကောင်းဆုံးအထိဆုံးသောကာမအရသာကို ခံစားနေရပါသည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးတခုလုံးလည်း တရှိန်ရှိန်းနဲ့ဖြစ်နေပြီးတော့ တကိုယ်လုံးမှာလည်းတသိမ့်သိမ့်တုန်ခါလာကာ အရည်များပန်းပြီး တစ်ချီပြီးသွားတော့သည်။ တကိုယ်လုံးမှာရှိနေတဲ့ အကြောမှန်သမျှတုန့်ခါဆန့်ထွက်ပြီးတော့ ဖျင်းကနဲဖျင်းကနဲ ရှိန်းဖိန်းအီဆိမ့်သွားလေသည်။ ဦးစွမ်းလျှံကမူ ဘာမှမဖြစ်သေးဆောင့်ကောင်းတုန်းပဲရှိသေးသည်။ မြွေပွေးသွေးနဲ့စပ်ထားတဲ့ ဂျင်အရက်အရှိန် ဒစ်ကြီးနားဝိုက်မှာသုတ်လိမ်းထားတဲ့ လိမ်းဆေးအရှိန်တွေနဲ့ ဆောင့်လို့ညှောင့်လို့ကတော့ အလွန်ကြီးကိုကောင်းနေဆဲပဲဖြစ်သည်။ ၀င်းဝါလတ်တယောက်တဆတ်ဆတ်တုန်ခါပြီးတော့ ပြီးကောင်းကောင်းနေဆဲမှာပင် ဦးစွမ်းလျှံရဲ့ ပွတ်၍ပွတ်၍ဆောင့်ချက်တွေက အရှိန်လုံးဝမပြတ်လေတော့ တကိုယ်လုံးလေထဲကိုမြောက်တက်နေသလား အောက်မေ့နေရအောင်ကိုကောင်းလှပေသည်။“ဖွတ် ဖွတ် ဖွတ် ရွှတ် ”အချက်(၃၀)ကျော်လောက်မှာတော့ ၀င်းဝါလတ်တယောက်ကာမအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ပြီးတော့ နောက်ထပ်တချီပြီးပြန်လေ၏။ ထိုအချိန်ထိတိုင် ဦးစွမ်းလျှံကမပြီးသေး စေးပြစ်ကျိချွဲနေသောစောက်ရည်များ ရွသထက်ရွကြွသထက်ကြွလာနေသည့် စောက်ပတ်အတွင်းသားများကြောင့် စီးစီးပိုင်ပိုင်ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ရှိကာ ကြာလေလေဆောင့်၍ကောင်းလေလေဖြစ်နေလေသည်။၀င်းဝါလတ်ကလည်းကာမဇောတွေမွှန်တက်လာပြီးတော့ ဖင်ကြောကြီးတွေရှုံ့၍ရှုံ့၍ ကော့ပြီးတော့ခံလာတော့သည်။ အဆောင့်ကလည်းကြမ်း အခံကလည်းကြမ်းဆိုတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဆော်နေကြပုံများမှာ အသည်းငယ်သူတယောက်ဆိုက ကြည့်နေရင်းနဲ့နှလုံးသွေးရပ်လုမတတ် ကြောက်ခမန်းလိလိဖြစ်နေလေသည်။ ဦးစွမ်းလျှံကလည်း ဒူးနှစ်ချောင်းပေါ်ကို ဖိထောက်ထားတဲ့သူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုရုပ်လိုက်ပြီးတော့ နို့အုံတင်းတင်းအိအိကြီးပေါ်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ ကိုယ်ကိုအနဲငယ်ကုန်းကာ အားရပါးရပင့်ဆွဲပြီးတော့အသားကုန်ဆောင့်ပြန်လေသည်။ ၀င်းဝါလတ်ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကလဲ ခါးကိုတင်းနေအောင်ချိတ်ထားလိုက်တော့ စောက်ဖုတ်ကြီးကအနဲငယ်စေ့သွားပြီးတော့ ဆောင့်လို့ညှောင့်လို့ကလဲ ပိုပြီးတော့ကိုကောင်းလာလေသည်။ဦးစွမ်းလျှံကလက်ဖ၀ါးထဲမှာပြည့်အံလျှံထွက်နေတဲ့ နို့အုံဖွေးဖွေးတင်းတင်းအိအိကြီးကို ဆုတ်ပြီးတော့ချေပေးနေရင်း လက်မထိပ်ကလေးနဲ့နို့သီးခေါင်းတောင့်တောင့်လေးကို ဖိ၍ဖိ၍လှိမ့်လှိမ့်ပေးနေရာ စောက်စိထဲမှအတွေ့ နို့သီးဖျားအတွေ့တို့နဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးတခုလုံးမှာလည်း ပွင့်ကန်လုမတတ်ကိုအရသာရှိလာလေသည်။“ အဟင့် ဟပ် ဟပ်ချိုး အဟင့် ဟပ် ဟပ်ချိူး..”၀င်းဝါလတ်တကိုယ်လုံးသိမ့်ကနဲသိမ့်ကနဲတုန်လျက် ဦးစွမ်းလျှံ၏ပစ္စည်းကြီးကိုဆွဲညှစ်သလိုဖြစ်သွားရာ အီဆိမ့်တက်သွားသည်ထိ ကောင်းလှသည့်အတွက် ယားပြီးတော့တက်လာပြီးတော့ လရည်ပူတွေကိုစောက်ခေါင်းထဲကို ဗျစ်ကနဲကိုပန်းထည့်လိုက်မိသည်။ ၀င်းဝါလတ်တကိုယ်လုံးလည်းကုတ်ကွေးကော့တက်ကာ စောက်ရည်များပန်းထွက်ပြီးတော့ ပြီးဆုံးသွားလေသည်။နှစ်ဦးသားအတော်ပင်မောဟိုက်သွားသည်မို့ တယောက်ကိုတယောက်ဖက်ထားကာ အသာလေးမှိန်းနေကြလေသည်။ အတော်လေးကြာပြီးမှ ဦးစွမ်းလျှံကကိုယ်ပေါ်မှခွာလိုက်ပြီးတော့ လီးကြီးကိုဆွဲချွတ်လိုက်လေရာ ပျော့ခွေပြီးတော့ ထွက်လာခဲ့သည်။ အရက်တငုံကိုယူသောက်လိုက်ပြီးတော့ ရေသန့်ဗူးကိုမော့သောက်လိုက်လေရာ တကိုယ်လုံးနွေးထွေးပြီးတော့ ရှိန်းဖိန်းသွားလေသည်။“ ကဲ မ၀ါလေး ထ ဒါလေးသောက်လိုက် ရော့..”၀င်းဝါလတ်ကိုပွေ့ထူပြီးတော့ အရက်တငုံသောက်ခိုင်းပြီးတော့ ရေသန့်ဗူးကမ်းပေးလိုက်သည်။ ထဘီအင်္ကျီတွေကိုပြန်ဝတ်ကြပြီး ကုတင်ပေါ်မှာအတူယှဉ်တွဲကာထိုင်နေကြလေသည်။ ၀င်းဝါလတ်ပုခုံးလေးကိုဖက်ထားရင်းနဲ့“ဘယ့်နှယ့်လဲ လေးလေးလုပ်ပေးတာကောင်းရဲ့လား.”၀င်းဝါလတ်ကပြုံးရင်းနဲ့ပဲခေါင်းညိတ်ပြလေရာ“ပါးစပ်ကပြောဦးလေ..”၀င်းဝါလတ်မေးဖျားလေးကိုကိုင်ကာ ရမက်ခိုးဝေနေသောအပြုံးနဲ့မေးလေရာ“ကောင်းပါ့ရှင် ကောင်းပ ကောင်းပ မမညိုမကြာမကြာပြောဖူးတဲ့ တိုသည်ရှည်သည်ထိုနှစ်လီမညိုမသိ ကြာကြာစိမ်လိုးထိုလီးမရိုး အဖိုးထိုက်တန်၏ ဆိုသလိုပါပဲ ကြာကြာစိမ်လိုးနိုင်လွန်းတဲ့လေးလေးရဲ့လီးကြီးကို သဘောကျကျေနပ်မိပါသတဲ့ရှင်...”၀င်းဝါလတ်အပြောကြောင့်သဘောကျကျေနပ်မိကာ ပွေ့ဖက်နမ်းရှုံ့လိုက်မိသည်။ ပြီးတော့ဘောင်းဘီအိတ်ထဲလက်နှိုက်ကာ ထောင်တန်တအုပ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ အရက်(၅၀)ရေတွက်ကာ ၀င်းဝါလတ်ကိုပေးလိုက်လေသည်။“ကဲ လေးလေးပြန်ပြီနော် အလွန်လှပပြီးတော့ စွဲမက်စရာကောင်းလှတဲ့ မ၀ါလေးရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ငွေငါးသောင်းပေးခဲ့မယ် ကျေနပ်တယ်မဟုတ်လား..”၀င်းဝါလတ်တယောက်ချစ်စဖွယ်ပြုံးပြပြီးတော့ ခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်လေသည်။ ဦးစွမ်းလျှံထွက်သွားပြီးနောက် တံခါးကိုပြန်ပိတ်ပြီး ငွေ(၅)သောင်းဖြင့် စောက်ဖုတ်ကြီးကိုပုတ်ကာပုတ်ကာ ပီတီတွေဖြာနေတော့သည်။တပတ်မှတခါလာလိုးသောသူ့ယောက်ျားသည်ပင်လျှင် တပတ်မှတသောင်းသာပေးပြီးတော့ ဦးစွမ်းလျှံကတော့ကျေနပ်အောင်ကို လိုးပေးသည့်အပြင် ငွေ(၅)သောင်းလည်းပေးသွားတော့ ကျေနပ်လွန်းတာပေါ့။ ဦးစွမ်းလျှံရဲ့မယားငယ်ပင်လျှင် လုပ်လိုက်ချင်သေးတော့........နောက်တနေ့နံနက်(၁၀)နာရီလောက်တွင်တော့ တတိုက်ထဲနေသူချိုချိုသင်းတယောက်ပြန်ရောက်လာလေသည်။“ဟယ် မချိုပြန်ရောက်လာပြီ ဘယ့်နဲ့လဲ အခြေနေကောင်းရဲ့လား”“ကောင်းပါတယ် မမရဲ့ ဆရာမကြီးကတော့နက်ဖြန်မမလာခေါ်မယ်လို့တော့ ပြောသားပါပဲ ဒါပေမဲ့နေကောင်းတာနဲ့ပဲ ပြန်လာခဲ့တာလေ”“ကျန်းမာရေးတော့ဂရုစိုက်နော် ဒီလိုမဖြစ်အောင်နောင်တော့သတိထား ”“ဒါနဲ့ မမကြီးလဲပြန်မလာသေးဘူးနော်..”ချိုချိုသင်းက မညိုရှိန်ကိုမမကြီးလို့ခေါ်ပြီးတော့ ၀င်းဝါလတ်ကိုတော့ မမ ဟုခေါ်လေသည်။“အင်း ၄ ရက်လောက်တော့ရှိနေပြီ ဒီနေ့များပြန်ရောက်မလားတော့မသိဘူး ခဏနေဦး မမ ကော်ဖီသွားဖျော်လိုက်ဦးမယ်..”ချိုချိုသင်းကတော့ကော်ဖီအလွန်ကြိုက်ပေသည် အခုမှပြန်ရောက်သည်မို့ရေနွေးအဆင်သင့်ရှိမှာတော့မဟုတ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အဆင်သင့်ရှိနေသော ၀င်းဝါလတ်ကအလိုက်သိဖျော်ပေးခြင်းဖြစ်ပေသည်။“ကဲ ကြိုက်သလောက်သောက် ကြိုက်သလောက်သာစားပေတော့”နှစ်ယောက်သားကော်ဖီသောက်မုန့်စားရင်း စကားပြောနေကြစဉ် ၀င်းဝါလတ်ညီမရဲ့ယောက်ျားရောက်လာလေသည်။“မမ နှင်းနှင်း ကလေးမမွေးနိုင်သေးလို့ မန္တလေးဆေးရုံကြီးမှာရောက်နေတယ် ခုမနက်စောစောကပဲတင်လိုက်ရတာ ဗိုက်ခွဲမွေးမယ်လို့တော့ပြောတာပဲ မမ လိုက်ခဲ့ပါဦး..”နှင်းနှင်းမှာ ၀င်းဝါလတ်ရဲ့ညီမအငယ်ဆုံးဖြစ်ကာ အောင်တော်မူဘက်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်လေသည်။“အေး အေး ခဏလေးစောင့် အ၀တ်စားလဲလိုက်ဦးမယ် အဟင်းဟင်း အဲဒါပဲမချိုေ၇ ဒုက္ခတွေကမသေးလှဘူးနော်..”၀င်းဝါလတ်အ၀တ်စားလဲပြီးတော့ ပြန်ထွက်လာလေသည်။“ကဲ မချိုရေ အေးအေးဆေးဆေးသာသောက်နေရစ်ပေတော့ ပြီးရင် အခန်းသော့ခတ်ပြီးသာသော့ယူထားလိုက်တော့ မမသွားပြီနော်”“ဟုတ်ကဲ့ မမ ”၀င်းဝါလတ်တို့ဆိုင်ကယ်နှင့်ထွက်သွားပြီးမကြာမီမှာပင် ချိုချိုသင်းလည်းကော်ဖီသောက်ခြင်းကို လက်စသတ်သိမ်းဆည်းလိုက်ပြီး အခန်းတံခါးသော့ခတ်ကာ သူမအခန်းဘက်သို့ကူးလာခဲ့လေသည်။ လူနှင့်ကင်းကွာနေသည်မို့ဖုံတွေနှင့်ညစ်ပတ်နေသည်ကို တနာရီနီးပါးလောက်အမှိုက်လှည်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့ ရေမိုးချိုးသနပ်ခါးလိမ်းကာ ဆရာမကြီးပေးလိုက်လေသောဆေးကို သောက်လိုက်သည်။ စောင်ပါးလေးတထည်ကိုခြေဖ၀ါးထိလုံအောင်ခြုံပြီးတော့ မဂ္ဂဇင်းတအုပ်ကိုကောက်ဖတ်လိုက်သည်။ ဆေးအရှိန်ကြောင့်ချိုချိုသင်းမျက်လုံးများက စာဖတ်မရအောင်မှေးစင်းလာပြီးတော့ စာအုပ်ဘေးချပြီးမျက်စိမှိတ်ထားတော့ သိပ်မကြာခင်မှာပင်အိပ်ပျော်သွားတော့လေသည်။(၃)မညိုရှိန်စီးလာသောကားက အမရပူရထဲကိုဝင်လာတော့ ည(၆)နာရီခွဲကျော်လို့(၇)နာရီတောင်မှပဲထိုးနေချေပြီဆိုတော့ အတော်လေးကိုမှောင်နေချေပြီ။ ရွှေတချောင်းထိပ်တွင်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့ ချောင်းကူးတံတားလေးကိုဖြတ်ကျော်ကာ သူမတိုက်ခန်းဆီသို့လာခဲ့ကြသည်။ ကားပေါ်တွင်ခင်လာခဲ့သူဖြိုးဝေစိုးကတော့ သူ့လက်ဆွဲအိတ်ကိုပုခုံးစလွယ်သိုင်းပြီးတော့ မညိုရှိန်ရဲ့ပလတ်စတစ်ခြင်းကြီးကိုလက်တဖက်ကဆွဲလာခဲ့သည်။ ဘာတွေမှန်းတော့မသိ ခြင်းကြီးကတော့အတော်ကြီးပြီး လေးနင့်နေတော့သည်။ မညိုရှိန်တိုက်အောက်ကနေပြီးတော့ အပေါ်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့ ချိုချိုသင်းအခန်းကမီးလင်းပြီး ၀င်းဝါလတ်အခန်းကတော့အမှောင်ကျနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ တက်လာခဲ့ရင်းဒုတိယထပ်ရောက်လာတော့“ကဲ မောင်လေး အပေါ်ကစောင့်နေ ” ဟုပြောကာဖြိုးဝေစိုးကိုသော့ပေးပြီး အခန်းနံပါတ်ပြောကာ လွှတ်လိုက်လေသည်။ ပြီးနောက်တော့ ချိုချိုသင်းအခန်းတံခါးကိုခေါက်ပြီးတော့“မချိုရေ ညီမလေး မမပြန်လာပြီဟေ့..”တံခါးခေါက်သံနှင့်အတူ မညိုရှိန်အသံကိုပါကြားလိုက်ရတော့ ချိုချိုသင်းအခန်းတံခါးနားကိုရောက်လာလေသည်။“လာပြီ လာပြီ မမကြီးရေ..”ချိုချိုသင်းကအခန်းတံခါးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ အခန်းဝတွင်ရပ်နေသောမညိုရှိန်ကိုပွေ့ဖက်ကာ နမ်းပစ်လိုက်သည်။“ဟွန်း ဘာတွေမဟုတ်တာလုပ်ထားလဲမသိဘူး လူကိုလာချော့နေတယ်”“အဟင်းဟင်း ဘာမှမလုပ်ပါဘူးမမကြီးရဲ့ မမကြီးကိုသတိရလို့လွမ်းလို့ ချိုချိုလဲနေ့လည်ကမှ တောင်မြို့ကပြန်ရောက်တာ”မညိုရှိန်ကချိုချိုသင်းအနားကပ်လိုက်ပြီးတော့ လေသံတိုးတိုးလေးဖြင့်“ပြီးရင် အခန်းတံခါးသော့ခတ်ပြီးတော့ မမကြီးအခန်းကိုတက်ခဲ့နော် ကစားဖို့အချဉ်တကောင် မမ မှာပါလာတယ်ကွ.”ပြောပြီးတာနဲ့အပေါ်ထပ်ကိုတက်သွားလေသည်။ စကားလုံးလေးတွေကတော့ အသည်းယားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှသည်။ အပေါ်တက်သွားတာတော့မမတယောက်တည်း ကစားဖို့အချဉ်ကောင်က လီးပါတဲ့အချဉ်ကောင်လေးများဖြစ်နေလားမသိ။ ချိုချိုသင်းကလည်းလီးနှင့်ပြတ်နေတော့ လီးဆာနေပြီလေ။ ချိုချိုသင်းလည်းအခန်းတံခါးပိတ်ပြီးတော့ အပေါ်ထပ်တက်ခဲ့သည်။စေ့ထားသောတံခါးကိုတွန်းပြီးဝင်လိုက်တော့ ရုပ်ရည်ချောမောသန့်ပြန့်တောင့်တင်းသော ကောင်လေးတယောက်ကိုတွေ့ရပြီး အောက်ပိုင်းကစတိုင်ဘောင်းဘီနဲ့ အပေါ်ကတော့တီရှပ်ဝတ်ထားပြီးတော့ ဆက်တီမှာထိုင်ပြီးတော့ ဂျာနယ်ဖတ်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရပေသည်။ ချိုချိုသင်းကသူ့ကိုမြင်တော့ ရှေ့မတိုးသေးပဲတုံ့ခနဲရပ်လိုက်လေသည်။“လာလေ မမ ထိုင် မမကြီးကတော့ ရေချိုးခန်းဝင်နေတယ်..”တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင်သူခေါ်သလို မမညိုကိုမမကြီးတဲ့။ ချိုချိုသင်းကမျက်နှာချင်းဆိုင်က အစွန်ဆုံးဆက်တီခုံလေးမှာ ၀င်ထိုင်လိုက်သည်။“မောင်လေးက မမကြီးနဲ့ပါလာတာလား”“ဟုတ်ကဲ့မမ ကျွန်တော်ကကန်တော်ကြီးအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာနေပါတယ်”ဖြိုးဝေစိုးကတော့သွက်လက်စွာဖြေလိုက်သည်။ စောစောကမညိုရှိန်ပြောသွားတဲ့ ကစားဖို့အချဉ်တကောင်ဆိုတာ ဒီကောင်လေးလားမသိလို့ ချိုချိုသင်းစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိသည်။ပုံစံလေးကတော့ခပ်မိုက်မိုက်လေးပင် ချောချောတောင့်တောင့်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာလေး။ ချိုချိုသင်းဆုတောင်းတော့ပြည့်ပေပြီ လီးပါသောအချဉ်ကောင်လေးလေ။ ထိုစဉ် မညိုရှိန်တယောက်ရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာပြီးတော့ ချိုချိုသင်းကိုပြုံးပြပြီး သူမအိပ်ခန်းထဲသို့ဝင်သွားလေတော့သည်။“မောင်လေးနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲ”“ကျနော့်နာမည်ကတော့ဖြိုးဝေစိုးပါ မမနံမယ်ကရော။။”“မမနာမည်ကတော့ ချိုချိုသင်းတဲ့”ထိုအချိန်မှာ အနီရင့်ရောင်ဘောင်းဘီတိုနဲ့ မိန်းမ၀တ်စွပ်ကျယ်လက်ပြတ်အစိမ်းပုတ်ရောင်ကိုဝတ်ပြီး မညိုရှိန်ထွက်လာခဲ့သည်။ စွင့်ကားသောတင်သားကြီးမျာနှင့် မို့မောက်သောရင်သားထွားထွားတို့က ပေါ်လွင်နေတော့သည်။ ပါးလွှာနူးညံ့သောစွပ်ကျယ် လက်ပြတ်အင်္ကျီအောက်မှနေပြီးတော့ ၀ိုင်းဝန်းမို့မောက်သောနို့အုံတင်းတင်းအိအိကြီးက ရင်ဖိုရမက်ကြွစရာကောင်းလွန်းလှသည်။ ကားပေါ်တွင်တညလုံးနီးပါးစောက်ဖုတ်နှိုက် နို့နှိုက်လာခဲ့ရသော်လည်းလိုးခွင့်မသာပဲဖြစ်ခဲ့ရသည်။ မညိုရှိန်ဂွင်းတိုက်ပေးသော အရသာနှင့်ပင်လရည်ထွက်ကာကျေနပ်ခဲ့ရလေသည်။မမကြီးက “တိုက်ခန်းရောက်တော့မှ သဘောရှိစိတ်ကြိုက်လုပ်ပါမောင်လေးရယ် ” လို့ပြောထားသဖြင့် ရင်မောစွာစောင့်ခဲ့ရသည်။ ယခုတော့နောက်ထပ်စော်ကြီးတပွေပါရောက်ရှိနေပြန်သည်။ ဒီစော်ကြီးကတော့တမျိုးလှပေသည် မျက်နှာကတင့်တင့်ထွန်းနှင့် တော်တော်လေးဆင်ပြီးတော့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကတော့ မေသဉ္စာဦးကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်မျိုး။ဒီစော်ကြီးနှစ်ပွေလောက်တော့ ဖြိုးဝေစိုးတို့ကအပျော့ အပြတ်ဖိုက်ပစ်လိုက်မည်ဟုပင် စိတ်ထဲကကြိမ်းဝါးလိုက်မိသည်။“မမ ကျနော်လဲေ၇ချိုးလိုက်ဦးမယ်”ဖြိုးဝေစိုးရေချိုးခန်းဝင်ပြီးတော့ရေစိမ်ချိုးနေစဉ် မညိုရှိန်နှင့်ချိုချိုသင်းတို့စကားကောင်းနေကြပြီးတော့ မညိုရှိန်ကကားပေါ်မှ အတွေ့ကြုံများကိုမချွင်းမချန်ဖောက်သည်ချနေသည်။“ကဲ ဘယ့်နှယ်လဲငါ့ညီမ အချဉ်ကောင်လေးကမိုက်ရဲ့လား အဟင်း ဟင်း..”“သိပ်မိုက်တယ် မမကြီးရေ့..”“ဒါနဲ့ ၀င်းဝါရော ဘယ်အချိန်ကအပြင်ထွက်သွားတာလဲ”“အပြင်မဟုတ်ဘူး မမကြီး သူ့ညီမဆေးရုံတက်ပြီးတော့ ဗိုက်ခွဲမွေးရမှာမို့လို့ဆိုပြီးတော့ နေ့လည်ထဲကလာခေါ်လို့ ဆေးရုံကိုလိုက်သွားတာ ညအိပ်စောင့်ရမှာလို့ပြောသွားသေးတယ် အခန်းသော့တောင်ညီမဆီမှာထားခဲ့တာ”“အော် အင်း အင်း မိဝင်းဝါတို့ပွဲကြီးပွဲကောင်းလွတ်သွားတာပေါ့လေ”မညိုရှိန်ကပြောနေဆဲစကားကိုရပ်လိုက်ပြီးတော့ လက်ဆွဲအိတ်ထဲမှပုလင်းပြားလေးတပြားကို သွားယူလိုက်လေသည်။ ချိုချိုသင်းကပုလင်းပြားလေးကိုကိုင်ကြည့်ရင်း“မမကြီး ဒါကဘာလဲဟင် ပုလင်းလေးကချစ်စရာလေးနော်”“အဲဒါဆေးလိမ္မော်အရက်လေ ပျော်ရွှင်မြူးထူးပြီးတော့အချစ်သွေးကိုဆူဝေစေတယ် သောကတွေကိုမေ့ပျောက်ပြီးတော့ အားပြည့်လန်းဆန်းစေတယ် သူကအဆီအမျိုးအစား တဖုံးလောက်သောက်ရင်ကိုလုံလောက်တယ် ရေသောက်လေအရှိန်တက်လေပဲညီမရဲ့”သူတို့တွေကားအရက်နှင့်စိမ်းသူများမဟုတ်ကြ ထို့ကြောင့်ချိုချိုသင်းလည်းစိတ်ဝင်စားသွားသည်။“ရော့ ညီမ တဖုံးသောက်ထားနှင့်”မညိုရှိန်ကတဖုံးထည့်ပေး၍ မချိုလက်ထဲကမ်းပေးလိုက်တော့ တခါတည်းမော့ချလိုက်ပြီးရေသန့်ဗူးထဲကရေကို ပါးစပ်ထဲတဆက်တည်းမော့သောက်လိုက်လေသည်။ မညိုရှိန်ကလည်းနောက်တဖုံးထပ်သောက်လေသည်။ခဏကြာသော်တကိုယ်လုံးအကြောတွေပြေလျော့ပြီးတော့ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းကာရွှင်မြူးတက်ကြွလာတော့သည်။ ဖြိုးဝေစိုးရေချိုးပြီးချိန်မှာတော့ထွက်လာခဲ့ရာ ကိုယ်ပေါ်တွင်ဂျင်းဘောင်းဘီတိုတထည်နှင့် မွှေးပွတဘက်တထည်သာရှိလေ၏။တဘက်နှင့်ခေါင်းမှရေစက်များကိုပြောင်အောင်သုတ်ပြီးတော့ သူတို့နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်လာထိုင်နေရင်း ဆေးလိမ္မော်အရက်ကိုတဖုံးမျှသောက်လိုက်လေသည်။ ပြီးတော့ဘီယာသုံးဗူးနှင့် အာလူးကြော်ထုတ်များကိုယူလာသလို မညိုကလည်းညောင်ပင်ဝင်းကားဂိတ်မှဝယ်လာသော ကြက်ကြော်များကိုပန်းကန်ပြားတချပ်ထဲထည့်ပြီး စားပွဲပေါ်သို့တင်လိုက်လေသည်။သုံးယောက်သားဘီယာသောက် အမြည်းစားပြီးတော့စကားလက်ဆုံကျနေလေသည်။“ကဲ မောင်လေး ဒီညဟာမမတို့အတွက်တော့ အထူးရင်ခုန်ပျော်ရွှင်စေတဲ့အမှတ်တရညလေး ဖြစ်စေချင်တယ်ကွာ ဒီအမှုတော်ကိုတော့ မင်းကျေပွန်အောင်ထမ်းပေးရမယ်နော်”မညိုရှိန်ကရီဝေသောညို့မျက်ဝန်း မျက်လုံးရွဲကြီးများနှင့်ဇာတ်သံနှောပြီးတော့ ပြောလိုက်လေတော့သည်။“ဟာ သိပ်ရတာပေါ့ မမရယ် သည်မမတို့နှစ်ယောက်လောက်တော့ ကျနော်ကအပြော့ပါဗျာ ”“ဟုတ်မှလဲပြောနော် မမကပြတ်နေတာကြာပြီ..”ချိုချိုသင်းကလည်းပျော်ရွှင်တက်ကြွလာပြီးတော့ ခပ်ရဲရဲပင်ပြောချလိုက်လေသည်။တသက်နှင့်တကိုယ်အပြာကားတွေထဲကလို မိန်းမနှစ်ယောက်ကိုတပြိုင်တည်းလိုးပေးရသော အတွေ့ကြုံမရှိသေးပါချေ။ တယောက်ကညိုချော တယောက်ကဖြူချော နှစ်ယောက်စလုံးမှာစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော အမို့ အမောက် အရှိုက် အ၀ိုက် အဖု အထစ် အစွင့် အကားတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေသောချောမောလှသည့် အပျံစားများဖြစ်နေလေသည်။ အဓိကကိုင်ရမှာကတော့ မညိုရှိန် သူ့ကိုပစ်မှတ်ထားပြီးတော့ အချစ်ဇာတ်ကရပေမည်။ဖြိုးဝေစိုးကဘီယာဘူးယူလာစဉ်ကပင် လီးကြောသန်တာရှည်ခံလိမ်းဆေးညှစ်ဗူးလေးကို ဘောင်းဘီဘေးအိတ်ထဲထည့်ယူခဲ့သည်။ နဂိုထဲကအရှည်(၆)လက်မခွဲ အတုတ်ကရုပ်ပျိုဗူးခွံပမာဏခန့်ရှိနေလို့ ဒီဆေးကြီးသာလိမ်းလိုက်ပါကတော့ ယခုလိုမျိုး လုံးကြီးပေါက်လှအမျိုးအစားမချောကြီးနှစ်ယောက်မပြောနှင့် (၂၀)လောက်လိုးရသည့်တိုင်အောင်ဖြုံမည်မဟုတ်ကြောင်းကို ဖြိုးဝေစိုးကသိပြီးသားပါ။ပေါ်တင်ပင်ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ ဒစ်ခေါင်းတ၀ိုက်နှင့်တန်ဆာတခုလုံးကိုလိမ်းလိုက်လေရာ မချောနှစ်ယောက်သားကတော့ လီးတုတ်တုတ်ရှည်ရှည်ညိုညိုကြီးကိုကြည့်ကာ အသဲတွေအူတွေသာမက စောက်ဖုတ်တွေဖင်တွေကပါ ယားကြွလာကြပြီတည်း။မညိုရှိန်က ပလတ်စတစ်အခင်းတခုကိုဖြန့်ချကာ ခေါင်းအုံးတလုံးဖြန့်ခင်းလိုက်ပြီးတော့ အ၀တ်စားအကုန်ချွတ်ပေးလိုက်ကာ လေးဘက်ထောက်ဖင်ကုန်းပေးလိုက်သည်။ ညိုဝင်းပြောင်တင်းစွင့်ကားနေသော တင်ဆုံထွားထွားကြီးကအထက်သို့ အနဲငယ်မြောက်ကြွပြီးတော့ ဖြိုးဝေစိုးကိုဖိတ်ခေါ်နေပေသည်။ မညိုရှိန်စောက်ဖုတ်ကြီးနှင့်တည့်တည့်တွင်ဒူးထောက်ထိုင်ချပြီး လီးကြီးကိုမကိုင်ကာစောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးထဲသို့ တရစ်ချင်းသွင်းလိုက်လေသည်။တဆုံးထိဝင်သွားသောအခါ မညိုရှိန်၏ခါးဆစ်ကိုအကျအနဆောင့်ကိုင်ပြီးတော့ လေးငါးချက်ခန့်အထုတ်အသွင်းလုပ်ပြီး ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ဆောင့်လိုးပါတော့သည်။ တစတစနှင့်အရှိန်တွေကပြင်းထန်မြန်ဆန်လာ၏“ပွတ် ပွတ် ပြွတ် ဗျစ် ” ဟူသော စောက်ဖုတ်နှင့်လီးတို့တွေ့ထိသံတွေက တခန်းလုံးဆူညံလာလေသည်။ သူတို့နှစ်ဦးကိုကြည့်နေသော ချိုချိုသင်းတယောက်မှာလည်း ကြာတော့စိတ်တေါမထိန်းနိုင်တော့ပဲ အ၀တ်စားတွေချွတ်ပြီးတော့ လက်တဖက်ကစောက်ဖုတ်နှိုက်ရင်း ကျန်လက်တဖက်က၀ိုင်းစက်မို့မောက်ချွန်ကော့နေသော သူမ၏နို့အုံကြီးကိုပင့်ကာပင့်ကာ ဆုတ်ချေပွတ်ဆွနေတော့သည်။မညိုရှိန်တယောက်မှာလည်း တဟင်းဟင်းညည်းနေရင်းနဲ့ စောက်ဖုတ်တခုလုံးပြည့်ကျပ်သိပ်နေသော ဖြိုးဝေစိုးလီးကြီး၏ အ၀င်အထွက်အပွတ်အထိုးအရသာကို မျက်စိစုံမှိတ်ကာဖင်ကြီးနောက်ပစ်ပြီးတော့ ခံနေတော့သည်။ချိုချိုသင်းတယောက်ဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့ပဲ မညိုရှိန်ခေါင်းရင်းဘက်တွင် ပက်လက်ကားယားကြီးအိပ်ကာ ဒူးနှစ်ချောင်းကိုထောင် ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဖြဲကားပြီးတော့ သူ့ဖင်ဆုံကြီးကိုတွန်းရွှေ့လျက်မညိုရှိန်ခေါင်းကိုမကာ သူ့စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးပေါ် မျက်နှာအပ်ပေးလိုက်ရပါတော့သည်။မညိုရှိန်ကလည်းအလိုက်တသိပင် ချိုချိုသင်းစောက်ဖုတ်ကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖြဲပြီး နီရဲနေသောအတွင်းသားများကို သူမလျှာဖြားဖြင့်ဖင်ဝမှနေပြီးတော့ အထက်သို့ပင့်ကာပင့်ကာလျက်လျက်ပေးပါတော့သည်။ ချိုချိုသင်းတကိုယ်လုံး မြောက်ကြွကော့လန်ပြီးတော့ တဆတ်ဆတ်တုန်ခါနေလေတော့သည်။ သူမလက်တွေကလည်းသူ့နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆုတ်ကာဆုတ်ကာပွတ်ချေနေမိသည်။ ဖြိုးဝေစိုးလက်တွေက မညိုရှိန်ခါးနှစ်ဖက်ကိုပြုတ်တူနှင့်ညှပ်ထားသလို ခိုင်ခိုင်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့ တင်ပါးခွက်များကိုရှုံ့ပြီးတော့ပစ်ကာပစ်ကာဆောင့်ပစ်လိုက်သည်။စောက်ဖုတ်ကြီးတခုလုံးယားကြွပွတက်လာပြီးတော့ မညိုရှိန်တယောက်စောက်ရည်များပန်းထွက်ကာ တချီပြီးသွားတော့သည်။ မညိုရှိန်တယောက်ချိုချိုသင်းစောက်ဖုတ်ကြီးကိုပါ ယက်မပေးနိုင်တော့ပဲ မျက်နှာမှောက်ကာ ကာမအရသာကိုခံစားနေမိသည်။ဖြိုးဝေစိုးကမညိုရှိန်ကိုအနားပေးပြီးရန် သူမစောက်ခေါင်းထဲမှလီးကြီးကိုနှုတ်ပြီးတော့ မညိုရှိန်ကိုပလတ်စတစ်အခင်းပေါ်တွင် ပက်လက်ကလေးသိပ်ထားလိုက်သည်။ ဖြိုးဝေစိုးလီးဒဏ်ကြောင့် မညိုရှိန်စောက်ဖုတ်ကြီးတခုလုံးထူပူစပ်ကောင်းနေသော အရသာထူးကြီးကိုမူးမူးမေ့မေ့ခံစားနေရပေသည်။ဖြိုးဝေစိုးကဒူးထောင်ပေါင်ကားပက်လက်ကြီးဖြစ်နေသော ချိုချိုသင်းနဘေးယှဉ်အိပ်လိုက်ပြီးတော့ နို့အုံကြီးတွေကိုပွတ်သပ်ပြီး ဆုတ်ချေပေးနေလေသည်။ ချိုချိုသင်း၏ညာဘက်ပေါင်ကိုပင့်ထောင်လိုက်ပြီးတော့ စောက်ဖုတ်ဝနဲ့လီးကြီးကိုတေ့ချိန်ကာ နောက်မှပင့်ပြီးတော့တရစ်ချင်းကိုသွင်းလိုက်လေသည်။ အဆုံးထိဝင်သွားသောအခါအသာလေးငြိမ်နေလိုက်ရာ မညိုရှိန်ယက်ပေးကတည်းက ပြီးလုပြီးခင်ဖြစ်နေသောချိုချိုသင်းတယောက်မှာ အထစ်ထစ်နှင့်တစ်ရစ်နေသောလီးတုတ်တုတ်ကြီး သူ့စောက်ခေါင်းထဲသို့ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီးကိုပွတ်ထိုးတိုးဝင်သွားသောအခါ အကြောပေါင်းတထောင်မျှ ကျင်တုံတက်ခါပြီး စောက်ရည်များပန်းထွက်လာကာ ကာမအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ရှိပြီးဆုံးသွားလေတော့သည်။ မချောကြီးနှစ်ယောက်မှာတချီပြီးလို့ ဖလက်ပြအနားယူနေပေမဲ့ ဖြိုးဝေစိုးမှာတော့ ပန်းပန်လျက်ပဲရှိနေလေပြီးတော့ နောက်အချီများစွာအတွက်ပြင်ဆင်လျက်ပင် ရှိပါတော့သတည်း။
Keep Reading... တီးကွက်တပင်တိုင်နှင့်ကကြိုးမှာမြိုင်ထ
“နုဖြူ” “ရှင်”တစိမ့်စိမ့်တိုက်ခတ်နေသော လေနုစိမ်းလေးကဗြုန်းကနဲအတင်းတိုးဝှေ့ကာ တိုက်ခတ်လိုက်သဖြင့် တလှုပ်လှုပ် ဖြစ်နေသောသစ်ရွက်သစ်ခက်လေးများက ရုတ်ရက်ယိမ်းနွဲ့ယမ်းခါကာ တရှဲရှဲမြည်သံနှင့်အတူ လှုပ်ရှားသွားကြပြီး သူတို့နှစ်ဦး၏ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခု တို့သည်လည်းရင်ထဲအထိအေးစိမ့်စွာခံစားလိုက်ရသည်။“ပြောလေ မောင်” “နုဖြူဘာလို့မောင့်ကိုချစ်တာလဲဟင်”“မောင့်ကိုမုန်းတဲ့နေ့ဟာ နုဖြူသေတဲ့နေ့ဆိုတာ နုဖြူပြောရဲတယ် မောင်”၀င်းကိုသက်ပြင်းတခုကိုလေးလေးပင်ပင်ချလိုက်သည်။မုိးတဖွဲဖွဲကျနေသော ကန်ရေပြင်မှုန်ဝါးဝါးလေးကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့ငေးကြည့်နေမိသည်။ နုဖြူက ထီးလေးအား ၀င်းကိုဘက်သို့တိုး၍ဆောင်းပေးသည်။ ၀င်းကို၏လက်တဖက်ကနုဖြူ၏ခါးသေးသေးကိုဖက်ထားပြီးကျန်လက်တဖက်ကနုဖြူ၏မျက်နှာလေးကို ဆွဲလှည့်လိုက်ကာမေးဖျားလေးကိုမော့လိုက်ပြီး သူမ၏နှုတ်ခမ်းလေးကိုဖိကပ်ကာစုပ်နမ်းပေးလိုက်သည်။ ထိုမှတဖန်နုဖြူ၏ကိုယ်လုံးလေးကိုဖက်လိုက်ကာပါးချင်းအပ်ထားမိပြန်သည်။“နူဖြူမောင့်ပေါင်ပေါ်ထိုင်ပါလား” “ဟာ မောင်ကလဲလူမြင်ကွင်းကြီး”“ထမီလေးအသာလှန်ပြီးထိုင်လိုက်ပါလား လုပ်ပါနုဖြူရယ်”နုဖြူဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်တော့လဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည်။ နုဖြူထဘီလေးကိုအသာမကာလှန်လိုက်ပြီးဝင်းကို၏ပေါင်ပေါ်သို့ထိုင်သည်။ ၀င်းကိုကပုဆိုးကိုလျှောချပေးလိုက်ရာမတ်တောင်နေသော ၀င်းကို၏ပစ္စည်းကြီးက နုဖြူ၏မအင်္ဂါစပ်လေးထဲသို့ စွပ်ခနဲဝင်သွားသည်။“ရှက်စရာကြီးကွယ် သူများတွေတွေ့ကုန်ရင်” “အိနြေ္ဒမပျက်ထိုင်နေပေါ့ မောင်ဒီလိုပဲဖက်ထားမယ်နော် ချစ်လိုက်တာနုဖြူရယ်”ငြိမ်ငြိမ်လေးနေနော်ဆိုသောဝင်းကိုကိုယ်တိုင်ကရွစိရွစိဖြင့်လှုပ်နေသည်။ နုဖြူလဲအငြိမ်မနေနိုင်ပါမသိမသာလေး လှုပ်ရမ်းနေမိသည်။ နုဖြူ၏နှုတ်ခမ်းကိုဖိစုပ်ထားသော ၀င်းကို၏ လျှာကြီးကသူမ၏ပါးစပ်ထဲ၌မျှော့ကြီးတကောင်လို လျှောက်သွားနေသည်။ တဖိန်းဖိန်းတရှိန်းရှိန်းဖြင့်ခံစားရင်း နုဖြုကလဲဝင်းကို၏လည်ပင်းကိုဖက်ထားမိသည်။ နုဖြူ၏စောက်ဖုတ်ထဲအရင်းထိစိုက်ဝင်နေသော ၀င်းကို၏ လီးကြီးက ဒိတ်ခနဲဒိတ်ခနဲသွေးခုန်နေသည်ကိုနုဖြူခံစားရပါသည်။ သူမ၏စောက်ဖုတ်ထဲတွင် တဆုံး ၀င်နေသော လီးတံကြီးကတင်းခနဲတင်းခနဲမားကျစ်သွားလေ နုဖြူတယောက် မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်လေခံစားနေရသည်။ နုဖြူနှင့်ဝင်းကို နှစ်ယောက်ထိုင်နေသောကန်ရေပြင်တွင် မိုးစက်မိုးပေါက်လေး များကဖြိုးဖြိုးဖျောက်ဖျောက်လေး ကျနေသကဲ့သို့မြကျွန်းသာတ၀ိုက်ရှိသစ်ပင်ကြီးများကလဲ အလင်းရောင်ကို ကာကွယ်ကာရှိနေလေသည်။“နုဖြူမနေတတ်တော့ဘူးကွယ် မောင်ရယ်” “ပြီးအောင်လုပ်ရအောင်လား နုဖြူရယ်”“အာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအောင်လုပ်မှာလဲလို့” “အဲဒီခြုံထဲမှာ နုဖြူလေးဘက်ထောက်လိုက်ပါလား”“ဖြစ်ပါ့မလားမောင်ရယ် လူတွေကသွားလာနေကြတာ” “အပြင်မှာမိုးတွေရွာနေတာပဲ ဘယ်သူမှမလာပါဘူး”“ဒုက္ခပါပဲကွာ မဟုတ်တာ” ”လုပ်ပါကွာ နုဖြူကလဲနော်”မောင့်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာနုဖြူပြလိုက်ချင်ပါသည်။ခြုံတွေကလဲလေးဘက်လေးတန်ပြည့်နေသဖြင့် မိုးရွာစဉ် တယောက်မျှမရှိနိုင်ဟုတွေးလိုက်မိသည်။“မြန်မြန်လုပ်နော် သူများရှက်တယ်” “အင်းပါ ကုန်းလေ ကုန်း မိုးရွာတုန်းလေး လုပ်ရအောင်”နုဖြူခြုံထဲဝင်ပြီးလေးဘက်ထောက်ကာဖင်ကြီးကိုလှန်ပေးလိုက်သည်။ ကြီးမားဖွေးအိနေသော ဖင်ကြီးက မိုးရေပေါက်လေးများ ထိမှန်ခြင်းကိုခံလိုက်ရသည်။၀င်းကိုကနုဖြူ၏နောက်ဘက်မှနေ၍ ကုန်းကုန်းကွကွဖြင့် နုဖြူ၏ဖင်ကြီးကိုအောက်မှပင့်ကော်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲသို့လိုးသွင်းသည်။ မိုးရေများနှင့်စောက်ရည်များ ရောထွေးလျက်ရှိသည့် တဘွပ်ဘွပ်မြည်သံကကျယ်ကျယ်လောင်လောင်လေး အသံထွက်လာလေသည်။ ၀င်းကိုကခပ်နာနာဆောင့်၍လိုးလေရာနုဖြူမှာခေါင်းလေးထောင်လာလိုက် ပြန်ငုံ့သွားလိုက်ဖြင့် အတော်လေး ပင် ခံစားရခက်နေပုံရလေသည်။“ပြွတ် ပြွတ် ဖွတ် စွပ် ပြွတ်”အသံတွေကအတော်လေးကျယ်သည်။တခါတရံ “အား”ခနဲလန့်အော်လိုက်သောအသံလေးများပင် ထွက် ထွက်လာသည်။“တော်တော့မယ်ကွယ် အင့် အင့် အင့်” “ပြီးတော့မယ် ခဏလေး ခဏလေး”“ပြွတ် စွပ် ပြွတ် ဖွတ် စွပ်” “အ တော်ပြီဆို သူများတွေတွေ့ကုန်လိမ့်မယ်ကွယ်..” “ခဏလေး အိ အ အင့် အင်း..”အလောသုံးဆယ်ဆောင့်၍လိုးနေရင်းမှမိုးရေစိုသောဆံပင်များကို အထက်သို့လှန်တင်လိုက်ကာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်သို့အကဲခတ်သလိုကြည့်နေလိုက်သေးသည်။ မိုးကခပ်ပါးပါးရွာနေသည့် ခြုံထဲသို့ ခေါင်းရောက်နေသောနုဖြူက ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘာမှမမြင်နိုင်ပေ။ မိုးကပါးပါးလေးဖြစ်ကာ ခုနလောက် မသဲသော်လည်းသစ်ရွက်တို့မှလက်ကျန်မိုးပေါက်ကြီးများက တောအုပ်လေးတ၀ိုက်ကို ဆူဆူညံညံလွှမ်းခြုံ နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ခဏအကြာတွင်နုဖြူကအတင်းရုန်းထွက်ပြီးထဘီကိုဆွဲအုပ်ကာ ကျောက်ပြားလေးပေါ်ပြန်၍ထိုင်သည်။၀င်းကိုကလဲလုံခြည်ကိုပြင်ဝတ်ကာ မတ်တပ်ရပ်ပြီးဝဲယာသို့ ထပ်မံ အကဲခတ် သည်။မှုန်ဝါးသောကန်ရေပြင် အလင်းရောင်နဲပါးသော တောတန်းတိတ်ဆိတ်သော ပတ်ဝန်းကျင်တို့ကို ကျေနပ်စွာကြည့်ပြီးမှထိုင်သည်။“မောင်ကအရမ်းကြာတာပဲသွား” ”နုဖြူပြီးလားဟင်..” ”အို ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှာလဲလူမြင်မှာကြောက်တာနဲ့ သွားပါ မောင်အရမ်းကဲတာပဲ”မူလကအတိုင်းထီးလေးကိုပြင်ဆောင်းကာခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုပြန်၍ပူးကပ်သွားသောအချိန်တွင် နုဖြူ၏လက်လေးတဖက်က၀င်းကို၏ပေါင်ကြားထဲသို့ထိုးနှိုက်ရင်းလီးကြီးကိုကိုင်ကာဂွင်းတိုက်ပေးနေလေသည်။ နုဖြူကမောင့်မျက်နှာကိုမကြည့်ရှက်ပြုံးလေးပြုံးကာငုံ၍နေသည်။၀င်းကိုကနုဖြူ၏ပါးပြင်မို့မို့လေးကိုနမ်းရင်း အရသာ ခံ၍နေသည်။“နုဖြူချစ်လို့လုပ်ပေးတာနော် အထင်မသေးနဲ့””မသေးပါဘူးနုဖြူရယ် နုဖြူမောင့်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကို မောင်သိပါတယ်ကွယ်”“ယုံပါတယ်မောင်ရယ် နောက်တော့မှသာမိဘစိတ်တိုင်းကျဆိုပြီး နုဖြူကျန်ရစ်မဖြစ်ပါရစေနဲ့နော်”“နုဖြူသဘောတူမယ်ဆိုရင် ခုပဲရုံးသွားပြီးလက်ထပ်ရအောင်လေ”“အမလေး စိတ်ကလဲမြန်လိုက်တာနော် တကယ်ပါပဲ”“စိတ်မြန်တာမဟုတ်ရပါဘူး နုဖြူထက်မောင်ကပိုပြီးချစ်ရတာပါဗျာ”“ဘာဖြစ်လို့”“အပေးကောင်းလို့လေ..”“အယ် သွား မကောင်းဘူး ဘာတွေပြောနေမှန်းလဲမသိဘူး”နုဖြူလှမ်းထုလိုက်သောလက်သီးဆုပ်ကလေးကိုဖမ်းယူပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကိုဝင်းကိုကစုပ်ယူလိုက်သည်။ နုဖြူ မျက်တောင်လေးများ မှေးစင်းကျသွားပြီး သူမလက်ကလေးများက ၀င်းကိုကိုယ်လုံးကြီးကိုအတင်းကြုံးပြီး ဖက်ထားလိုက်တော့သည်။“ပြန်ကြစို့ကွယ် နုဖြူမောပြီ”ဗေဒါရောင်ထဘီလေးတွင် ရွှံ့ကွက်လေးတွေပေကျံနေလေရာ ၀င်းကိုကတယုတယဆေးကြောပေးလေ တော့သည်။ နုဖြူသည် စလင်းဘက်အပြာရောင်လေးကိုပြင်ပြီးလွယ်လိုက်ရင်း မတ်တပ်ရပ်လိုက်ကာ အင်္ကျီခရမ်းနုရောင်လေးကိုခါးဆွဲချလိုက်သည်။ ပြီးတော့ထီးတလက်တည်းအတူဆောင်းကာ ၀င်းကိုနှင့် ထွက်လာခဲ့လိုက်သည်။“အို ဒီမှာလဲတတွဲကြည့်စမ်းမောင်”“သူတို့ကလဲမောင်တို့ကို သတိမထားအားပါဘူး ဟဲ ဟဲ..”မှန်ပေသည်ထိုအတွဲသည်သူတို့ရှိရာဘက်ကျောပေးပြီး မိန်းမဆောင်းခေါက်ထီးလေးကို အတူပူးကပ်ဆောင်းရင်းထိုင်နေပေသည်။ သို့ပေမဲ့သေချာဂရုစိုက်ကြည့်ပါက နှစ်ယောက်စလုံး၏လုံခြည်များသည်ပုဆိုးများဖြစ်နေကြပြီး သူတို့အတွဲအားခုနက စိမ်ပြေနပြေ ချောင်းနေ ကြသည့်သူများသာဖြစ်သည်ကို ၀င်းကိုရောနုဖြူရောမသိတော့ပါချေ။(၂)တဧက၏သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကျယ်ဝန်းသောမြေကွက်ကြီးတွင် တခြမ်း၌တထပ်တိုက်ကျယ်ကျယ်ထွားထွားလေး တစ်လုံးရှိပြီး အခြားဘက်ခြမ်းတွင်တော့ တခန်းလျှင်(၁၀)ပေပတ်လည်ခန့်ကျယ်ဝန်းသော အခန်း လေးများအပေါ်(၁၀)ခန်း အောက်(၁၀)ခန်း ပါဝင်သောနှစ်ထပ်အုတ်ညှပ်အဆောက်ဦးလေးရှိပေသည်။ ထိုအဆောက်ဦးနှင့်ကပ်လျက် နှစ်ထပ်တိုက်ကိုတော့သံဇကာဖြင့် ကာရံထားပြီး ခြံစည်းရိုး တံခါးတခုကလဲရှိပေသည်။ ခြံစည်းရိုးအားလက်ခုပ်တဖောင်ကာရံထားပြီးခြံထဲတွင်လည်း သစ်ပင်ပန်းပင်တို့ စိမ်းလန်းဝေဆာနေပေသည်။ ပိုင်ရှင်တို့ကတော့ ဦးမျိုးလှိုင်နှင့်ဒေါ်မြမေဖြစ်ပြီး ဦးမျိုးလှိုင်မှာ အသက်(၄၅)ခန့်ရှိကာ အသားညိုညို ဒေါင်ကောင်းကောင်း ရုပ်ခပ်သန့်သန့်ရှိကာ ဗီဒီယိုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်ပေသည်။ ဒေါ်မြမေကတော့ ယောက်ျားထက်(၁၀)နှစ်ခန့် ပိုကြီးပြီးတော့ မိုးလင်းမှမိုးချုပ် ဘုရားသွားကာ ပုတီးစိပ်နေတတ်သူတဦးဖြစ်ပေတော့သည်။ သူတို့တွင်အသက်(၂၄)နှစ်ခန့်ရှိ စုလှိုင်ဆိုသော ချောမောလှပသည့်သမီးတယောက်ရှိကာ သူတို့တိုက်နှင့်တခြမ်းစီရှိသည့်တိုက်သည်မိန်းကလေးဆောင်ဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်ကတော့စုလှိုင်ပင်ဖြစ်ပေသည်။ အဆောင်တွင်ရှိကြသောမိန်းကလေး (၄၀)ခန့်တို့သည် စုလှိုင်ကိုချစ်ခင်ကြပေသည်။ စုလှိုင်ကတော့ထိုအထဲကမှ တလောဆီက“မယ်”ဘွဲ့ရထားသော သင်္ချာတတိယနှစ်ကျောင်းသူလေး နုဖြူကိုပိုပြီးတော့ချစ်ခင်ကာ အရေးပေးဆက်ဆံပြီး နုဖြူသည်သာစုလှိုင်တို့နေထိုင်ရာနှစ်ထပ်တိုက်ကလေးသို့ ၀င်ထွက်သွားလာခွင့်ရထားပေသည်။ “မယ်”ဘွဲ့ ရထားပြီးနောက်နုဖြူသည် အနုပညာလောကထဲသို့ဝင်ရောက်လိုသဖြင့် ထိုလောကထဲနှင့်ရင်းနှီးသော ဦးမျိုးလှိုင်နှင့်ဆက်သွယ်ရန် နုဖြူကအကူညီတောင်းရာ စုလှိုင်ကဘွဲ့ရပြီးမှလုပ်ကိုင်ရန်ပြောပြီး ငြင်းဆိုခဲ့သည်။စုလှိုင်ကနုဖြူကိုအစစအရာရာကူညီပြီးမှ ဒီဟာလေးကိုမကူညီသဖြင့်နုဖြူအံ့သြခဲ့ရသည်။ နုဖြူ ပြောတိုင်းစုလှိုင်ကတော့ငြင်းမြဲငြင်းနေခဲ့သည်။တနေ့မနက်ပိုင်းစုလှိုင်ဈေးသွားနေချိန်ဦးမျိုးလှိုင်တယောက် ခြံထဲလမ်းလျှောက်နေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့် နုဖြူ အရဲစွန့်ပြီးတော့ ခြံထဲသို့ကူးလာခဲ့သည်။ နုဖြူသူမကိုသူမမိတ်ဆက်ပြီးတော့ “မယ်” ဘွဲ့ရထားကြောင်း အနုပညာလောကထဲဝင်လိုကြောင်းကို ပြောပြလိုက်တော့ ဦးမျိုးလှိုင်ကခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်ပြီးတော့ ခေါင်းညိတ်သည်။ စုလှိုင်ကိုပြောခိုင်းသော်လည်းငြင်းခဲ့ကြောင်းကို ဆက်လက်ပြောပြလေရာ ဦးမျိုးလှိုင်ကမျက်မှောင်ကုတ်ပြီးမှ ပြုံးလိုက်ကာစုလှိုင်ကဒီလုပ်ငန်းကိုမနှစ်သက်သူဖြစ်ကာ သူမပင် သရုပ်ဆောင်မလုပ်ချင်ကြောင်းကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောနေကြောင်းလည်း ပြောပြလေသည်။ နောက်လ လောက်တော့သရုပ်ဆောင် အသစ်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ရာ နုဖြူကိုဦးစားပေးရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို လေရာနုဖြူတယောက်အပျော်ကြီးပျော်သွားမိသည်။ ထိုနေ့မှစ၍ လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်ယူပြီးတော့ သူမကိုယ်သူမ သ ၍နေတော့သည်။ သူမ၏ချစ်သူဝင်းကိုကိုပင်လူတွေကြားထဲမှာပင် တွေ့ခွင့်ပေးပြီးတော့ တခါတော့ချစ်သူကိုသနားသဖြင့် မိုးရေထဲမှာမြကျွန်းသာသို့လိုက်ပေးခဲ့သည် ဒီရက်ထဲမှာဒီတခါထဲသာ ဖြစ်ပေတော့သည်။ နုဖြူကတော့အဲလောက်ထိ ပြင်ဆင်နေပေတော့သည်။ တနေ့စုလှိုင်မရှိခိုက် ဦးမျိုးလှိုင်နှင့် အိမ်ရှေ့တွင်တွေ့ရာ ဦးမျိုးလှိုင်က မနက်ဖြန်နေ့လည်(၁၂)နာရီလောက် သူနှင့်လာတွေ့ရန်နှင့် လာရောက်တွေ့ဆုံရမည့်နေရာလိပ်စာကိုပါ တခါထဲပေးလိုက်သည်။ နောင် ဦးမျိုးလှိုင်ကဒီကိစ္စတွေကိုစုလှိုင်သိသွားပြီး ကန့်ကွက်နေပါက ကူညီနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း စုလှိုင်ကိုမပြောပြရန် နှုတ်ပိတ်လိုက်လေသည်။ဦးမျိုးလှိုင်ချိန်းထားတဲ့နေရာကတော့ တိုက်ခန်းလေးတခုမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခန်းတံခါးရှေ့ကိုရောက်ပြီးတော့ လူခေါ်ဘဲ(လ်)ကိုနှိပ်တာနဲ့ မရှေးမနှောင်းမှာပဲ ဦးမျိုးလှိုင်ကိုယ်တိုင်တံခါးလာဖွင့်ပေးတော့ နုဖြူလဲအံ့အားသင့်သွားမိသည်။ အထဲလှမ်းဝင်လိုက်တော့ဦးမျိုးလှိုင်က ထိုင်လေ ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ကုလားထိုင်တွေဘက်ကိုညွှန်ပြတော့ ထိုင်လိုက်မိသည်။ ဦးမျိုးလှိုင်လဲတံခါးကိုအသေချာပိတ်ပြီးတော့ နုဖြူရှေ့မှာဝင်ထိုက်လိုက်သည်။“နာမည်အရင်းကနုဖြူပဲလား”“ဟုတ်ကဲ့ရှင့်”“သရုပ်ဆောင်တာကိုဝါသနာပါလို့လား ငွေကြေးကြောင့်လား”ရှက်ပြုံးလေးနဲ့ခေါင်းငြိမ့်လိုက်ရင်း..“၀ါသနာလဲပါပါတယ်..” ဟုနုဖြူကပြောလိုက်သည်။ဦးမျိုးလှိုင်ရဲ့အမူရာတွေက တစုံတခုကိုဖုံးကွယ်ထားသယောင် နုဖြူခံစားနေမိသည်။“ဒီလုပ်ငန်းကတော့ သမီးကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်အကျိုးးရှိမှာပါကွာ ဦးလဲကူညီမှာပေါ့ဟုတ်လား.. ကဲ လာ ကိုယ်လုံးအတိုင်းတာလေး နဲနဲကြည့်ရအောင်နော်”အခန်းထဲမှာက သူနဲ့နုဖြူပဲရှိနေလေသည်။ နုဖြူအခန်းတ၀ိုက်ကိုမသိမသာနဲ့အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့ လုံခြုံစိတ်ချတဲ့အခန်းပါပဲ ဦးမျိူးလှိုင်ကိုအကဲခတ်လိုက်မိတော့လည်း အသက်နဲ့မလိုက်အရွယ်တင်ပြီးတော့ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ပုံပါပဲ။ နုဖြူအရပ်နဲ့ဆို နုဖြူကသူ့ရဲ့မေးသာသာလေးပဲမြင့်ပေသည်။ ဒါတောင်မှနုဖြူက ၅ ပေ ၆ လက်မနီးပါးမြင့်တဲ့သူပါ။ ဦးမျိုးလှိုင်က အရပ်မြင့်သလောက် ကိုယ်ကာယကလည်း ထွားကျိုင်းလွန်းလှသည်။“သမီးအရင်ကအားကစားဘာလုပ်ဖူးလဲ”“ဟင့်အင်း အားကစားရယ်လို့တော့မလုပ်ဖူးပါဘူး ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလောက်ပဲ နဲနဲပါးပါးလုပ်ဖူးတာပါ”“ရင်သားတွေကအရမ်းလှတယ်ကွယ့်..”သာမန်အလုပ်သဘောနဲ့ပြောတာလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်ပေမဲ့ နုဖြူရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ ဒိန်းကနဲဖြစ်သွားမိသည်။ ဖအေနဲ့သမီးအရွယ်ပေမဲ့ ခံဖူးနေတော့နုဖြူတယောက်က ယောက်ျားတွေအကြောင်းကို ကောင်းကောင်း သိနေပေပြီ။“ဒီဘက်လှည့် လက်မြောက်ထား အေး ဟုတ်ပြီ”ပေကြိုးကိုနို့သီးထိပ်ပေါ်ကနေပြီးပတ်ပြီးတော့ ရင်အလှကိုတိုင်းတော့ နုဖြူမပြောသေး။ လက်တွေက နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုခလုတ်တိုက် အဲဒီအထိငါအပျိုစစ်မှမဟုတ်တာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပဲ နုဖြူတင်းခံထားသည်။ ဆက်ပြီးတော့ ဦးမျိုးလှိုင်ကကြမ်းပြင်မှာဒူးထောက်ပြီး ခါးနဲ့တင်သားတွေကိုပေကြိုးနဲ့တိုင်းတော့ နုဖြူကြက်သီးဖြန်းဖြန်းထအောင်ကို ခံစားလိုက်ရသည်။ သူ့မျက်နှာကတော့ နုဖြူပေါင်ကြားနားမှာကပ်နေပြီး လက်နှစ်ဘက်နဲ့ဝိုက်ပြီးတော့ ပေကြိုးလှမ်းဆွဲနေတော့လက်တွေနဲ့ တင်ပါးကိုကိုင်မိတဲ့အပြင် တင်ပါးကို သိသိသာသာကြီးပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်လာတော့“အို ရှင် ဘာလုပ်တာတာလဲ လွှတ်နော်”လက်နှစ်ဘက်ကိုရုန်းကန်တွန်းဖယ်ပြီးတော့ အခန်းပြင်ပြေးထွက်ဖို့နုဖြူကြိုးစားတော့သည်။“မင်းနဲ့မင်းရည်းစားလိုးနေကြတဲ့ဓါတ်ပုံတွေ ငါ့မှာရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို “...မယ် ရဲ့အချစ်ရေး” ဆိုပြီးတော့လက်သိပ်ထိုးပြီးတော့ ဖြန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ မင်း ဘာဖြစ်သွားမလဲ ခု ဦးက မင်းသရုပ်ဆောင်ဖြစ်အောင်ကူညီသလို မင်းကိုဘယ်သူက ကူညီတော့မှာလဲ မမိုက်ချင်စမ်းပါနဲ့သမီးရယ် ကဲ ရော့ မင်းဓါတ်ပုံတွေ”သူကအထက်စီးရထားတဲ့လေသံနဲ့ နုဖြူကိုခပ်တည်တည်ပြောဆိုခြိမ်းခြောက်လိုက်ပါတော့တယ်။ ဓါတ်ပုံကို ကြည့်ပြီးချိန်မှာတော့ နုဖြူမျက်လုံးထဲပြာဝေသွားမိသည်။ အကောင်းစားကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားမှန်းသိသာလှတဲ့ ရောင်စုံဓါတ်ပုံတွေပါလား နုဖြူကထဘီလေးကိုဖင်လေးဖွေးဖွေးနဲ့မပြီးတော့ မောင့်လီးကြီးပေါ်တက်ထိုင်နေပုံ ခြုံထဲမှာဖင်ကုန်းပေးထားပြီး မောင့်ကိုလှည့်စကားပြောပုံ ဖင်ကုန်ထားတဲ့နုဖြူရဲ့နောက်ကပြူနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကိုလီးတန်ကြီးတေ့ထားပုံ လီးကြီးဆောင့်သွင်းလိုက်လို့ နုဖြူရဲ့ခေါင်းလေးလန်သွားပြီးတော့ ပါးစပ်လေးပြဲသွားတဲ့ပုံ အို စုံနေတာပါပဲလား မိုးေ၇ထဲမှာဖင်ကုန်းပြီးအလိုးခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ရင်း နုဖြူအသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်လာတော့သည်။“ရှင် ရှင် ရှင်တို့လူယုတ်မာတွေ လူယုတ်မာတွေ”နုဖြူတအားအော်ပေမဲ့ အသံကတစ်ဆို့ပြီးတော့တိမ်ဝင်သွားရာက မျက်ရည်များစီးကျလာတော့သည်။ ဦးမျိုးလှိုင်ကတော့ ပုခုံးလေးကိုအသာလေးကိုင်လိုက်ပြီးတော့“မငိုပါနဲ့ကလေးရယ် ဦးရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးရင် မင်းအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းလဲမဖြစ်တော့ဘူး ပြီးတော့ငွေလဲထောက်ပံ့မယ် မင်းကို သရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ် သမီးရဲ့အပျိုရည်ကို ဦးကတောင်းတာ မဟုတ်ဘူးနော်”“အို ရှင် ”“ဟုတ်တယ်လေ မင်းစောက်ဖုတ်လေးက ခံဖူးထားတဲ့စောက်ဖုတ်လေးပဲ ဘာများတိုးပြီးတော့နစ်နာသွားမှာလဲ နောက်ပြီးတော့ မင်းရမဲ့အခွင့်ရေးတွေက နဲတာမဟုတ်ဘူးနော် စဉ်းစားပါကွာ သေချာစဉ်းစားပါ”“ဖယ် လွှတ် လာမကိုင်နဲ့”“ဦးက သိပ်ပြီးတော့ အချိန်ကုန်ခံတတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးနော် ပြန်ချင်သပဆိုလဲပြန်ပေတော့”နုဖြူအနားကထအသွားမှာတော့ နုဖြူတယောက်အသည်းအသန်စဉ်းစားပြီးတော့ တခဏအကြာမှာသူ့မျက်နှာကိုမ၀ံ့မရဲကြည့်ပြီး“ကျမဦးကိုတခုပြောပရစေ”“ပြောလေ ပြောပါ”“အခု ဦးဆန္ဒကိုလိုက်လျောပြီးပြီဆိုပါတော့ ဓါတ်ပုံနဲ့ဖလင်ကိုကျမယူသွားရမှာလား”“ဟာဒါပေါ့ ယူသွားတော့ပေါ့ကွာ ဒါမှလဲတရားမျှတမှာပေါ့ နောက်ပြီးမင်းကိုသရုပ်ဆောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ့်အပြင် ငွေကြေးလဲထောက်ပံ့ဦးမှာလေ အသေချာပဲပေါ့ကွာ ဟဲ ဟဲ..”နုဖြူအသက်ကိုတ၀ကြီးရှုလိုက်ပြီးတော့ အားမွေးလိုက်ပါတော့တယ်။ ပုဆိုးချွတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ဦးမျိုးလှိုင်ရဲ့လီးကြီးဟာ မြင်းတကောင်ရဲ့ဟာလောက်နီးနီးကြီးမားလှတာကို နုဖြူတွေ့လိုက်မိသည်။ ရုတ်တရက်တော့တွန့်သွားပြီး နုဖြူလန့်သွားသည်။လီးဆိုလို့မောင့်လီးပဲမြင်ဘူးခဲ့ပြီး ခုထပ်တွေ့ရတာလဲ ဧရာမလီးကြီးဆိုတော့“ဟင် ဦးဟာကြီးဒကလဲနဲတာကြီးမှမဟုတ်တာပဲ ဖြစ်ပါ့မလားရှင်””မတော်ဘူးဆိုတာက ဘယ်မှာမှမရှိပါဘူး သမီးရယ် လီးနဲ့စောက်ပတ်ဟာ ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်တန်ရင်တော့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သွားကြတာချည်းပါပဲကွယ် ဟဲ ဟဲ”ကာမဘီလူးစစ်စစ်ကြီးကို နုဖြူတွေ့နေပါပြီ အလိုးခံဘူးတယ်ဆိုတာကလဲ မောင်နဲ့ကစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ အချစ်ဆိုတာကပါ ပါလာခြင်းဖြစ်ပြီး ခုဟာကတော့လူစိမ်းတဦး ပြီးတော့အသက်ကလဲအဖေအရွယ်လောက်ဆိုတော့ မလွှဲသာမရှောင်သာလို့သာ အလိုးခံရမှာမို့ရှက်သလိုလို မျက်နှာပူသလိုလိုနုဖြူခံစားနေရသည်။“မင်း ထဘီမချွတ်ဘူးလား”“ဟာ ဒီအတိုင်းပဲလုပ်ပါ”နုဖြူရှက်နေမိသည် တစိမ်းတယောက်ရှေ့မှာ ထဘီကွင်းလုံးချွတ်ရမှာက လွယ်တာမှမဟုတ်ပဲလေ။“လာလေ ဒီကုလားထိုင်ပေါ်တက် လက်ကနံရံကိုကိုင်ထား ခြေတချောင်းကဒီပေါ်တင် ဟုတ်ပီ ထဘီကိုခါးထိဆွဲလှန်ပြီးတော့ ပေါင်တချောင်းမြောက် စားပွဲစွန်းတဖက်မှာခြေထောက်တင်ပေး ပြီးတော့တချောင်းရပ် ”စောက်ပတ်လေးကတဖက်ကို ဆွဲဖြဲထားပေးသလို ခပ်ပြဲပြဲလေးဖြစ်သွားတော့သည်။ ကုလားထိုင်ကနိမ့်သလို စားပွဲကလဲနိမ့်သည်။ ကုလားထိုင်အောက်ကနေပြီးတော့ မတ်တပ်ရပ်လျက်နုဖြူစောက်ပတ်လေးကို လီးအရှည်ကြီးနဲ့ထိုးဆွပွတ်သပ်နေမိသည်။ နုဖြူအင်္ကျီတွေကိုလဲအကုန်ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ အထိတွေ့တွေကပူနွေးပျစ်ချွဲနေပြီးတော့ လိုးကြရတော့မယ်ဆိုတာနဲ့တင် နုဖြူတယောက်တုန်ခါနေမိသည်။ ပြီးမှငါအလိုးခံဖူးတာပဲ ဘာကြောက်စရာရှိလဲလို့ အားပေးနေရင်းနဲ့ ဒီလောက်ကြီးတဲ့လီးကြီး ဗိုက်ထဲများကျွံဝင်သွားလေမလားလို့လည်း စိုးရိမ်နေမိသည်။“ကြောက်နေလား သမီး”“အင်း အင်း ရှီး ကျွတ်..”သူ့မျက်နှာကနုဖြူနို့ကြီးတွေကို ပွတ်သပ်ချော့မြူရင်း ပြဲအာနေတဲ့စောက်ပတ်ထဲကို ဧရာမလီးကြီးထိုးသွင်းဖို့ နှိုးဆွနေဆဲပါ။ တချီတချီလီးကြီးက စောက်စေ့ထိပ်လေးကိုကော်ထိုးမိရင် တကိုယ်ခုံဗျင်းခနဲဖြစ်ကာနုဖြူတယောက် တုန်ရီသွားမိသည်။“သမီး ဦးကိုချစ်ရဲ့လား ဟင်”အို ဒီလူကြီးရူးနေလားလို့နုဖြူတွေးလိုက်မိသည်။ သူအကျပ်ကိုင်လို့သာအလိုးခံရတာ ပြီးတော့ဒီအသက်ရွယ်ကြီးကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ချစ်လို့ရမှာလဲ ဒါပေမဲ့ နုဖြူတို့ကတော့ ပါးနေနပ်နေပြီ...“မချစ်ပဲနဲ့ အလိုးခံပါ့မလား ဦးရဲ့ ဟင်း..”“ဟဲ ဟဲ အညာမလေး ညာတယ် ဟဲ ဟဲ ”ညာနေမှန်းလဲဒင်းကသိသားပဲ မချစ်တော့မချစ်ဘူး ဒါပေမဲ့လဲ စောက်ဖုတ်ထဲကိုလီးဝင်သွားရင် လက်တွေကအလိုလိုပြန်ဖက်မိပြီး ပေါင်တွေကလဲကားပေးမိတတ်တော့ မခက်ပါလား။ အသွေးသားနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နုဖြူတို့မိန်းမသားတွေမှာလဲ ခံစားမှုတွေရှိနေတာကတော့ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ “ဗြစ်”ကနဲဆိုတဲ့အသံထွက်လာတော့ နုဖြူအသက်ရှုရပ်သွားမိသည်။ စိတ်တွေကလှုပ်ရှားပြီးတော့ ကြောက်လန့်ကာအရေတွေကမထွက်တော့ လီးကြီးနဲ့ထိုးသွင်းလိုက်တော့ စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းကို ဆွဲဖြဲလိုက်သလိုဖြစ်သွားတော့ နုဖြူလန့်သွားတာပေါ့လေ။ လီးဒစ်ကြီးကသိပ်ကြီးတော့ စောက်ပတ်အ၀င်ဝကို ဗူးဆို့ကြီးလိုကြီး ပိတ်နေတာပေါ့ မ၀င်ပဲနဲ့တစ်ခံနေတာလေ။“အား မ၀င်ဘူး ဦးရဲ့..””ခဏနေဦး”စားပွဲပေါ်ကခေါင်းလိမ်းဆီပုလင်းကိုယူပြီးတော့ စောက်ပတ်အ၀လေးနဲ့လီးကြီးထိပ်မှာသုတ်လိမ်းပြီးချိန်မှာ မွှေးလှတဲ့ခေါင်းလိမ်းဆီနံ့ ညှီစို့စို့လီးရေအနံ့တွေကရောပြီးတော့ နုဖြူနှာခေါင်းထဲဝင်လာသည်။ နောက်တကြိမ်စောက်ပတ်ဝအတေ့မှာ နုဖြူငုံ့ကြည့်လိုက်စဉ် လီးထိပ်ဖူးနီနီကြီးကတော့ စောက်ပတ်အ၀မှာတေ့သွားမိပါပြီ။ နုဖြူခါးလေးကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီးတော့ လီးကြီးကိုဖြေးဖြေးချင်း ဖိပြီးတော့အသွင်းမှာ“ဗြွတ် အမေ့... အ”မျက်စေ့ထဲမီးဝင်းဝင်းတောက်သွားပြီးတော့ ပါးလေးတွေလဲကျင်တက်သွားပါတော့တယ်။“အား အီး နာတယ် နာတယ်”အဆက်မပြတ်ညည်းတွားရင်းက ဦးမျိုးလှိုင်ရင်ဘတ်ကို နုဖြူတယောက်တွန်းထားပြီးတော့ ခေါင်းကိုလဲ နောက်လှန်ချလိုက်တော့သည်။ “ဗြွတ် ဗြစ် ပတစ် အ အ အီး”ဆတ်ဆတ်လေးဆောင့်ပြီးတော့ ခါးကိုလဲကိုင်ညောင့်လိုက်ရော လီးကြီးဟာအဆမတန်တင်းကျပ်ပြီးတော့ နုဖြူစောက်ဖုတ်ထဲကို အဆုံးထိဝင်သွားလေသည်။“အ ကွဲပြဲကုန်ပြီလားမသိဘူး နာတယ် အ အား....”အသက်ကိုအောင့်ပြီးတော့ရင်ဘတ်ကိုကိုင်တွန်းလေ နုဖြူခါးကိုဖက်ပြီးတော့အတင်းဆောင့်လေဆိုတော့ စောက်ခေါင်းထဲမှာ လီးကြီးက ပယ်ပယ်နယ်နယ်မွှေနှောက်နေတာပေါ့။“ပြွတ် ပြွတ် စွပ် စွပ် ပြွတ်.. ”“အိ အ ဟင့် အင့် အိုး အိုး အား အား..”နုဖြူဝဋ်လည်ပါပြီ မောင်နဲ့တုန်းကမနာပဲနဲ့ အော်ဟစ်ညည်းတွားခဲ့မိသမျှခုတော့ ဒီလီးကြီးဒဏ်ကို အသံမထွက်ပဲ အံကြိတ်ခံလို့ကို မရနိုင်အောင်ဖြစ်နေတော့သည်။“ကြပ်တယ် အို အိုး နာတယ်ရှင့် အ..”“ပြွတ် စွပ် စွပ် ပြွတ် ပြွတ်.. ”သူ့ကိုတွေ့စကတော့ ဒီလောက်နှာထန်လိမ့်မယ်လို့ နုဖြူမထင်ခဲ့မိပေ ခုတော့သူ့ ဆောင့်ချက်တွေက အသက်ပါလွန်းလို့ သူ့ကိုတောင်ပြန်ဖက်ထားရသည်။ အလိုးခံခဲ့ဖူးပေမဲ့ ဒီလောက်ကြီးတဲ့လီးနဲ့မဆုံဖူးခဲ့သလို ဖုထစ်အကြောပြိုင်းပြိုင်းထိုးထောင်နေပြီး စောက်ခေါင်းထဲကိုအပြည့်အကျပ် လိုးဝင်သွားတိုင်း အရသာတွေတင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်ခံစားရလို့ နုဖြူအတွက်ကတော့ ခံလို့အကောင်းဆုံးအရသာအရှိဆုံးပါပဲ။“ကြမ်းပြင်မှာလုပ်ရအောင်ဦးရယ် ညောင်းလို့ပါ”နုဖြုပြောသလိုကြမ်းပြင်ပေါ်ကိုပွေ့ချပေမဲ့ လီးကြီးကိုတော့လုံးဝမချွတ်ပေ။ နုဖြူခြေထောက်တွေကတော့ ကြမ်းပြင်နဲ့လွတ်ပြီးတော့ သူပွေ့လာတဲ့အတိုင်းလီးကြီးတပ်ရက်နဲ့ပါလာပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ပက်လက်လေးချပေးသည်။“ဖြေးဖြေးလိုးပါ ဦးရယ် အရမ်းနာလို့ပါ..”နုဖြူကမျက်နှာလွှဲရင်းသူ့ကိုတောင်းပန်သလို စောက်ဖုတ်ထဲမှာတစ်လစ်ကြီးစိုက်ဝင်နေတဲ့လီးကြီးကလဲ စောက်ပတ်ထဲကိုငုတ်ကြီး တချောင်းစိုက်သွင်းထားသလို အောင့်သက်သက်ကြီးခံစားနေရသည်။“ပေါင်တွေဖြဲထားပေးလေ သမီးရဲ့..”“ဖြဲပေးထားတာဘဲ အမလေး လေး နာလိုက်တာရှင်”နုဖြူရဲ့ညည်းညူသံတွေက သူ့အတွက်သာယာနာပျော်ဖွယ်လားတော့မသိဘူး ပိုပြီးတော့ဆောင့်တဲ့နေရာက သွက်လာပါတယ်။“ဟ အ အ ဟ အမလေး အား...”မရတော့ပါဘူး နုဖြူရဲ့ခံနိုင်ရည်စွမ်းအင်တွေက သူ့လီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ အရှုံးပေးလိုက်ရပါပြီ။ နာကျင်လွန်းလို့ မျက်ရည်များစီးကျလာပေမဲ့ သူကတော့စောက်ဖုတ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲကို အားရပါးရလိုးထည့်နေတော့သည်။ မကြာခင်မှာတော့ နာကျင်မှုတွေကအတော်ကြီးသက်သာသွားပြီး အရသာကတစိမ့်စိမ့်တက်လာတော့သည်။ သူလိုးတဲ့အရသာကတော့ မောင်လိုးတာထက်ကိုပိုပြီးတော့ နုဖြူကိုအရသာရှိစေလေသည်။ နုဖြူလဲသူ့ကိုသိမ်းကြုံးဖက်ထားပြီးတော့ တဟင်းဟင်းနဲ့ ဖြစ်နေလေတော့သည်။ အဲ သိပ်မကြာတော့သောအချိန်မှာတော့ နှစ်ယောက်စလုံး တဟင်းဟင်း တအင်းအင်းနဲ့ဖြစ်လာပြီး သုက်ရည်တွေပြိုင်တူထွက်လာကာ ပြီးသွားတော့သည်။နုဖြူတယောက် ဦးမျိုးလှိုင်ကိုစွဲလန်းသွားချေပြီ နောက်တကြိမ်တော့သူလိုးတာကိုခံဖို့ ၀န်မလေးတော့ချေ။ တချီပြီးသွားချိန်မှာတော့ သူ့ကတိအတိုင်းပဲ ဓါတ်ပုံနဲ့ဖလင်အပြင်လိုရာသုံးဖို့ ငွေသုံးသောင်းထုတ်ပေးသည်။ ဗီဒီယိုအစမ်းရိုက်ရန် နောက်နှစ်ပတ်လောက်အကြာကိုချိန်းလိုက်ပြီးတော့ နုဖြူကိုနောက်ထပ်တချီထပ်လိုးလို့ နုဖြူလဲစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ အားပါးတရကြီး အလိုးခံလိုက်တော့သည်။စုလှိုင်ကနုဖြူကိုအတော်ပင်ခင်ရှာသည့်အပြင် နုဖြူပ၏အပေါ်တွင်လည်းကျေးဇူးကအများကြီးရှိပေသည်။ နုဖြူဆီကအဆောင်လခကို မယူသည့်အပြင်အချိန်မရွေးလည်းထမင်းလာစားခိုင်းသည်။ အင်္ကျီအ၀တ်စား များလည်းဝယ်ပေးတတ်ပြီးတော့ ညီမလေးတယောက်လိုနုဖြူကိုချစ်သလို နုဖြူကလည်းကိုယ့်အမ တယောက်လိုပါပဲ ချစ်ခင်မိသည်။နုဖြူသည်ဦးမျိုးလှိုင်နှင့်တွေ့ပြီးတော့ (၂)ရက်ခန့်အခန်းအောင်းနေခဲ့မိသည်။ (၃)ရက်မြောက်တွင်တော့ စုလှိုင်နှင့်မတွေ့တာကြာသဖြင့် နေ့လည်(၁၂)နာရီလောက်တွင် စုလှိုင်ဆီသို့ထွက်လာခဲ့သည်။အိမ်ရှေ့တံခါးကပိတ်ထားသဖြင့် ဘေးမှပတ်ပြီးမီးဖိုချောင်တံခါးမှဝင်လာခဲ့သည်။ မီးဖိုချောင်တံခါးကတော့စေ့ရုံသာစေ့ထားလေသည်။ မီးဖိုဆောငထဲရောက်တော့ စုလှိုင်ကိုမတွေ့ရသဖြင့် အိပ်ခန်းထဲတွင်ရှိမည်ဟုတွက်ဆပြီး အိပ်ခန်းဘက်သို့ထွက်လာခဲ့သည်။“အို ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း မလုပ်ပါနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်..”နုဖြူ၏ခြေလှမ်းများကတန့်ကနဲရပ်၍သွားသည်။ ထွက်ပေါ်လာသောအသံလေးမှာ မမစုလှိုင်၏အသံဖြစ်မှန်း နုဖြူသိလိုက်သည်။ ကြည့်လိုက်တော့အခန်းတံခါးကပိတ်မထားချေ နုဖြူက တံခါးပေါက်ဘေးသို့အသာတိုး ကပ်လိုက်သည်။ နုဖြူမျက်လုံးထဲတွင် ပြာကနဲထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားလေသည်။ အံ့အားသင့်သလို အကြည့်မှားနေတာများလားလို့လည်း တွေးလိုက်မိသည်။မမှားပါ ဦးမျိုးလှိုင်နှင့်မမစုလှိုင်.. အဖေနှင့်သမီးဟုသိထားရသူများ..ဦးမျိုးလှိုင်တကိုယ်လုံးတွင်အ၀တ်စားမရှိ မမစုလှိုင်ကလည်းရေချိုးပြီးအလှပြင်ပြီးခါစပုံစံမျိုးဖြစ်နေကာ ခါးထိရောက်နေသောထဘီလေးကို လက်တဖက်ဖြင့်စုကိုင်ကာရင်ဘတ်တွင်ကပ်ထားသည်။ အဲဒါကိုပဲ ဦးမျိုးလှိုင်က သူ့လက်နှင့် အတင်းဆွဲချွတ်နေသည်။“ကျ ကျမကို မနှိပ်စက်ပါနဲ့တော့ .. ဟင့် ဟင့်”နုဖြူ၏၇င်တွေကတော့ တဒိန်းဒိန်းခုန်နေချေပြီ မျက်တောင်ပင်မခတ်ရဲ။“ကဲဟာ ဒီလောက်တောင်ဖြစ်နေတာ ကဲ ကဲ ကဲကွာ..”အတင်းဆွဲချွတ်လိုက်တော့ ကျွတ်သွားလေတော့သည်။ “အို လှလိုက်တဲ့မမစုလှိုင်ရယ်...”ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွားသော စုလှိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့နုဖြူမျက်လုံးလေးများဝိုင်းသွားတော့သည်။ “မယ်”ဘွဲ့ရထား သော နုဖြူထက်ပင်စုလှိုင်အလှကသာနေသေးသည်။ ရင်ထဲမကျေမနပ်ပဲ မနာလိုဖြစ်သွားတော့သည်။“စုလှိုင် အသာတကြည်နဲ့ငါတောင်းတာကိုပေးစမ်း...နင်အသားမနာချင်နဲ့..”ဦးမျိုးလှိုင်က ငေါက်တော့မှ စုလှိုင်နဲနဲငြိမ်သွားသည်။ ၀င်းဝါသောအသားရေနှင့် အ၀တ်မဲ့ကိုယ်လုံးကြီးသည် ရေဆေးငါးကြီးသဖွယ် လှပနေတော့သည်။ လုံးဝန်ပြီးလှပသောရင်နှစ်မွှာကို ဦးမျိုးလှိုင်ကလက်ကြမ်းကြီးဖြင့် ဆုတ်ကိုင်ချေမွပွတ်သပ်ပေးနေသလို ကိုယ်လုံးကြီးကိုဖက်ရင်း ပါးပြင်မို့မို့လေးကိုလဲနမ်းရှုံ့နေပြန်တော့သည်။ စုလှိုင်တယောက်ငြိမ်သက်နေသလို အပြင်မှချောင်းကြည့်နေသောနုဖြူမှာလဲ အသက်ပင်ရဲရဲမရှုရဲပဲ တုန်တုန်ယင်ယင်ဖြစ်နေပေသည်။စုလှိုင်နုိ့တွေကိုပွတ်သတ်နေရာမှ ၀မ်းပြင်းသားဝင်းဝင်းလေးတွေဆီရောက်သွားပြီးတော့ အဲဒီက တဆင့် ခုံးမောက်နေပြီးတော့ ဖောင်းဖောင်းမို့မို့ရှိနေတဲ့အဖုတ်ကြီးကို လက်ဝါးကြီးဖြင့်ဆုပ်ပြီး ပွတ်သတ်ကစားနေ သည်။စုလှိုင်၏စောက်စေ့ပြူးပြူးချွန်ချွန်လေးကို လက်ညှိုးနှင့်လက်မကြားညှစ်လိုက်သောအခါ စုလှိုင်မှာ စောစောကလိုမငြိမ်နိုင်တော့ပဲ တဟင်းဟင်း တအင်းအင်းဖြင့် ညည်းတွားကာရှိနေတော့သည်။ ဦးမျိုးလှိုင်ကစုလှိုင်ကိုအသားကုန်နှုးပြီးတော့ သူ့အလိုဆန္ဒပြည့်စေရန်အတွက် လုံးပန်းနေခြင်းဖြစ်သည်။နုဖြူ၏အကြည့်ကပေါင်ကြားထဲမှ လီးတန်ကြီးဆီရောက်သွားသည်။ ကြည့်စမ်းငါ့ကိုလိုးတဲ့လီးကြီး ခုတော့ မမစုလှိုင်ကိုလိုးချင်လွန်းလို့ တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေလိုက်တာ ဟင်း။လီးကြီးကိုကြည့်ရင်းနုဖြူတယောက်ဒေါသထွက်သွားသလို မကျေမနပ်လဲဖြစ်သွားရသည်။ ကိုယ်တွင်းမှရမက် စိတ်ကလဲဟုန်းခနဲ ထလာကာတဖြည်းဖြည်းချင်းအရှိန်တက်လာတော့သည်။ ဦးမျိုးလှိုင်ကစုလှိုင်၏ ဒူးနှစ်လုံးကိုဆွဲယူပြီးထောင်လိုက်ကာ ပေါင်ကိုကားထားလိုက်သည်။ ပြီးနောက်တော့ ဒူးနှစ်လုံးကြားထဲ ၀င်ထိုင်ကာ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသောဧရာမလီးကြီးကို ဖေါင်းတင်း၍စေ့ကပ်နေသော စောက်ဖုတ်ဆီသို့ တေ့လိုက်ကာ ဖင်ကြီးကိုကြွပြီးတော့ဖိချလိုက်သည်။“ဗြိ ဗြစ် ဗြိ ဖွတ်...”“အ အင့် အ အင့် ဟင်း ဟင်း.. ”နုဖြူ၏ရင်ထဲကြည့်နေရင်းဟာသွားကာ လီးကြီးကတော့စုလှိုင်ရဲ့စောက်ဖုတ်ထဲကို အငမ်းမရကြီးကို တိုးဝင်သွားတော့သည်။ တိုးဝင်တာမှ လီးတန်ကြီးတချောင်းလုံးစောက်ဖုတ်ထဲကိုနစ်ဝင်ခြင်းပါ။ ဒါတောင်မှစုလှိုင်တယောက် သာမန်မျှသာညည်းပြီးတော့ စင်းလုံးချောကိုယ်လုံးဖြူဖြူလေးကလဲ တွန့်ကနဲတွန့်ကနဲ နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်ပဲဖြစ်သွားသည်။ နုဖြူတယောက် ကြည့်နေရင်းနှင့်အံ့သြသွားသလို စုလှိုင်တယောက်ကတော့ဒီလီးကြီးကို အတော်ယဉ်ပါးနေပုံရလေသည်။ လီးကြီးကို စောက်ခေါင်းထဲ တွင်စိမ်ထားရင်း နို့တွေကိုခေါင်းငုံ့ပြီးတော့ တပြွတ်ပြွတ်နဲ့စို့နေလေသည်။ စုလှိုင်ကလဲကိုယ်လုံးကြီးကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့မက်မက်ရရဖက်ကာ ကျောပြင်ကြီးကိုလက်ဖ၀ါးနုနုလေးတွေနဲ့ ဖွဖွလေးပွတ်သတ်ပေး နေလေသည်။မြင်နေရသောနုဖြူစိတ်ထဲတွင်တော့ မနာလိုစိတ်များပြည့်သိပ်လာလေသည်။ ဦးမျိုးလှိုင်ကစုလှိုင်ရဲ့ ပါးနှစ်ဖက်ကို ကုန်းပြီးနမ်းလိုက်ကာကိုယ်လုံးကြီးကို ပြန်မတ်လိုက်လေသည်။ ပြီးတော့ပုခုံးနှစ်ဆက်ကိုဆွဲကာ တချက်ခြင်းဆောင့်၍ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ကြီးလိုးပေတော့သည်။စုလှိုင်ကလဲစောက်ဖုတ်ထဲဝင်လာသော အရှိန်နှင့်ဆောင့်ကာဝင်လာသောလီးကြီးကို ပေါင်နှစ်ဖက်နဲ့ ညှပ်ပြီးတော့ ဆောင့်ချက်နဲ့အညီစောက်ဖုတ်ကြီးကို အားရပါးရကော့ပြီးတော့ပေးနေလေသည်။ စောက်ခေါင်းထဲတွင်တော့ စောက်ရည်များကတစတစရွှဲနစ်လာပြီး အသံတွေကလဲပို ပိုထွက်လာတော့သည်။“ပြွတ် စွပ် ပလွတ် ပြွတ်..”“အ အင့် အင့် အ ..”လိုးနေရင်းကဦးမျိုးလှိုင်ကစုလှိုင့်နို့တွေပေါ်မျက်နှာအပ်ကာ အငမ်းမရနမ်းပြီးတော့ နို့သီးလေးတွေကို တပြတ်ပြတ်နဲ့စို့လိုက် လျှာထုတ်ပြီးတော့ယက်ပေးလိုက်လုပ်လေရာ စုလှိုင်ခမျာတုန်တုန်ယင်ယင်ဖြစ်လျှက် ဖက်ထားသောသူမလက်ကလေးတွေက ဦးမျိုးလှိုင်ကျောပြင်ကြီးကို မချိတင်ကဲဖြင့်ပွတ်သပ်ပေးနေရှာသည်။ နုဖြူသဘောပေါက်လိုက်ပါပြီစုလှိုင်တယောက်သူမကို ဦးမျိုးလှိုင်နှင့်ဆက်သွယ်ပေးခြင်းမပြုခဲ့သည်ကိုပါ။ နုဖြူသည်စုလှိုင်ကသူမအပေါ်ကောင်းခဲ့တာတွေကိုမေ့ပျောက်လိုက်ကာ မကျေမနပ်နဲ့ဒေါသထွက်လာတော့ သည်။ ကာမနဲ့ယှဉ်လာတော့အသိတရားများ ကွယ်ပျောက်ချေပြီတည်း။ဦးမျိုးလှိုင်ကအားရပါးရဆောင့်နေသောဆောင့်အားတွေကို တဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့ချလိုက်ကာ စောက်ခေါင်းထဲရှိနေသော လီးကြီးကိုလှုပ်ရုံပဲလှုပ်ပြီးတော့ စုလှိုင်မျက်နှာအနှံ့ကိုမက်မက်မောမောနမ်းကာ နှုတ်ခမ်းရွှန်းရွှန်းစိုစိုလေးတွေကို ခပ်မြှင်းမြှင်းလေးစုပ်နမ်းလိုက်သည်။ စုလှိုင်ကလဲမျက်နှာကို အလိုက်သင့်မော့ပေးပြီးတော့ မျက်လုံးလေးများစင်းကျသွားကာ ပါးဖေါင်းဖေါင်းလေးများချိုင့်သွားသည်အထိ တုံ့ပြန်အနမ်းအနေနဲ့ဦးမျိုးလှိုင်နှုတ်ခမ်းတွေကို အငမ်းမရပြန်စုပ်နေပေးနေသည်။မျက်နှာကလဲကျေနပ်နေပုံရလေသည်။မြင်နေရသောနုဖြူကတော့ဒေါသအိုးပေါက်ကွဲလုနီးပါးဖြစ်လာသလို ရမက်စိတ်များကြောင့်လဲကိုယ်လုံးလေးကတုန်လာလေသည်။ ထိုမျှမက စောက်ပတ်ဝတွင်လည်း တစစ်စစ်ဖြင့် စောက်ရည်လေးများက စိမ့်ထွက်လာတော့သည်။“ဆောင့် ဆောင့်တော့လေ ဟင့်..”နှုတ်ခမ်းတွေကိုဆွဲခွာလိုက်ပြီးတော့ မချိတင်ကဲပုံစံဖြင့်စုလှိုင်ကလှုပ်ခတ်စွာ ပြောလိုက်လေသည်။“ဒါနဲ့များ ဘာလို့စောစောက ငြင်းနေရသေးလဲစုလှိုင်ရယ်”“ငြင်းရတာပေါ့ရှင် ငြင်းရတာပေါ့ သည်လိုခဏခဏလံနေရလို့ ဆေးတွေကအမြဲပဲသောက်နေရတာလေ..”ကြားလိုက်ရသောနုဖြူတယောက် လှိုက်ကနဲဖြစ်သွားကာ အမြဲတမ်းခံနေသည့်သဘောကို သူမရင်ထဲမှ နင့်နေအောင်ကို မနာလိုစွာဖြင့်ခံစားလိုက်ရသည်။“သြော် စုလှိုင်ရယ် နင့်မိဘတွေမရှိတော့ ငါတို့ကကျွေးမွေးပြီးမွေးစားစောင့်ရှောက်လာရတဲ့ ကျေးဇူးတွေကိုလဲထောက်ဦးမှပေါ့ဟာ...”“နောက်ပြီးတော့အကို့မယားကြီးအကြောင်းလဲသိသားနဲ့ တခါတခါစုလှိုင်ကိုပြောလိုက်ရင် ရစရာကိုမရှိဘူး..”“အေး ဒါကလဲ နင့်အဒေါ်ပဲလေဟ...”“မသိဘူး မသိဘူး စုလှိုင်ကိုသပ်သပ်အိမ်တဆောင်မီးတပြောင်နဲ့ထားပါဆိုတာကို အကိုက မယားကြီးကိုကြောက်နေ ဒါကြောင့်စုလှိုင်ငြင်းတာပေါ့..”“ဟ နင်လဲသိသားနဲ့ နင့်အဒေါ်ကိုငါကပစ်ပယ်လို့မရဘူးလေ သူ့ပစ္စည်းတွေသူချမ်းသာတာတွေက နဲတာမှမဟုတ်တာ..”နုဖြူနားလည်လိုက်ပါပြီ။မိန်းမဘက်မှမိဘမဲ့တူမကိုမွေးစားထားပြီး အပျိုဖြစ်လာတော့မယားလုပ်ကာ လိုးနေခြင်းပင်တည်း။ သီးသန့်ထားရန်ကလဲ မယားကြီး၏ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်ချမ်းသာသူဖြစ်လေတော့ မယားကြီးကို လဲမဆန့်ကျင်ရဲပေ။“ကဲပါအကိုရယ် စုလှိုင်မနေနိုင်တော့ဘူး ပြီးချင်လှပြီ နာနာဆောင့်စမ်းပါ အကို့ဟာကြီးကိုစုလှိုင်ချစ်လွန်းလို့ ဒီကနေဘယ်ကိုမှ ထွက်မသွားတာပဲကြည့် ဟင့် ဟင့် လုပ်လေ ဆောင့်ကွာ အကို့လီးကြီးကို စုလှိုင်အဖုတ်လေးနဲ့ညှစ်ပေးမယ်..”“ပြွတ် ဖါတ် အ ဖွတ် အ စွပ် ပြွတ် အမလေးလေး ကောင်းလိုက်တာနော် ဟင်း ဟင်း...”“ချစ်လားဟင်စုလှိုင်..”“ချစ် ချစ်တယ် တအားချစ်တယ်ကွာ ပြွတ် စွပ် ဖွတ် အမလေးအကိုရယ် ဘယ်လိုကောင်းမှန်းကိုမသိဘူး စုလှိုင်ကို ဒီနေ့တနေ့လုံးလိုးပေးနော်..”နုဖြူ၏စောက်ပတ်အ၀မှထွက်လာလေသော စောက်ရည်ကြည်လေးများသည် ပေါင်ခြံဆီသို့ပင် စီးလာချေပြီတကား။ တကိုယ်လုံးမှာလဲမခံမရပ်နိုင်အောင် မရိုးမရွဖြစ်လာသည့်အပြင် ချွေးစေးတွေက ပါထွက်တော့မွန်းကျပ်လာပြီး သူမတထပ်တည်းဝတ်လာခဲ့တဲ့ ခပ်ပွပွစပို့ရှပ်လေးကိုခေါင်းမှဆွဲချွတ်ပြီးတော့ လက်တဖက်ကနို့သီးလေးများကိုကစား ကျန်လက်တဖက်ကတော့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုကားထားပြီး ဖောင်းကးစပြုနေတဲ့သူမရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုပွတ်ပေးနေကာ စုလှိုင်တို့ကိုဆက်ကြည့်နေလေသည်။“ပြွတ် စွပ် ပလွတ် စွပ် ဒုတ်.”“အား ဟင်း ဟင်း ချစ်တယ် သိပ်ချစ်တာပဲ ဟင်း ဟင်း ဆောင့်စမ်းပါအကိုရယ် စုလှိုင်တယောက်ထဲကိုပဲလိုးနော် အကို ဟင်း ဟင်း ပြွတ် ပြွတ် ဖွတ် ဖွတ် အမလေးအကိုရဲ့...”လီးကြီးကိုစုလှိုင်စောက်ဖုတ်ထဲကိုအားကုန်ဆောင့်လိုးထည်းနေသလို စုလှိုင်ကလည်းအားရပါးရကော့ကာ လူးလှိမ့်ခံနေရင်းနဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲရှိလီးကြီးကို စောက်ပတ်အတွင်းသားများနဲ့ ညှစ်ပေးနေလေသည်။ စုလှိုင်တယောက်လူးသထက်ကို လူးပျံလာပြီးတော့ခဏအကြာမှာတော့“အား အီး အမလေး လှိုင့် လင်ကြီးရယ် အမ ..လေး...” ဟူသောညည်းသံဖြင့်ဆတ်ဆတ်ခါသွားတော့သည်။စုလှိုင်ငြိမ်ကျသွားတော့မှပဲ တချက်ခြင်းကိုဆောင့်လိုးတော့သည်။ လီးကြီးကိုစောက်ခေါင်းထဲမှထုတ်လိုက်တော့ မပြီးသေးသည့်လီးကြီးကမာတင်းပြီးတော့ အရည်တများများနဲ့တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေလေသည်။ ကြည့်နေရင်း နဲ့နုဖြူမှာတော့ စိတ်တွေထိန်းမရအောင်ဖြစ်လာကာ စောက်ဖုတ်လေးကိုဖိပြီးတော့ပွတ်ပေးနေလေသည်။“စုလှိုင် ကိုယ်သိပ်ပြီးတော့ ချစ်ချင်နေပြီကွာ..”“ဟင့် စုလှိုင်မောသေးတယ် အထဲမှာလဲတအားကြီးကို ကျိန်းနေတာပဲ တော်ကြာမှဆက်လုပ်လေ..”“အာ ခဏလေးပါကွာ ကိုယ်တော်တော်ပြီးချင်နေပြီကွာ..”ကြည့်နေရင်းနဲ့ နုဖြူတယောက်ဦးမျိုးလှိုင်ကိုသနားလာကာ စုလှိုင်အပေါ်တွင်ပြည့်နှက်နေသော ဒေါသများကလဲ စုလှိုင်အထွတ်ထိပ်ရောက်ကာညည်းတွားမြည်တမ်းသံကြားပြီးထဲက အတော်ပင်ပေါက်ကွဲနေ ချေသည်။ ပြီးတော့သူမကိုယ်တိုင်လဲ အတော်ပင်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်နေကာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ပြီးတော့ပွတ်သပ်ချေမွနေရင်း ပြီးချင်စိတ်တွေတောင်ပေါက်နေသည်။နုဖြူသည်သူမကိုယ်ပေါ်ကတခုတည်းသောအ၀တ်စားအဖြစ်ကျန်နေသည့် ထဘီလေးကိုဆွဲချွတ်ချလိုက်ပြီး တော့ အ၀တ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးက ဦးမျိုးလှိုင်တို့ဆီသို့ရွေ့လျားသွားလေတော့သည်။“ဟင်..” “အို...” နှစ်ယောက်စလုံးကအလန့်တကြားဖြစ်သွားသည်ကို နုဖြူမြင်လိုက်ရလေသည်။“ဦးသိပ်ပြီးတော့ပြီးချင်နေတယ်မို့လား လာလေ သမီးနဲ့ပြီးလိုက်..” ဟုပြောပြီးတော့ ကုတင်ပေါ်ရှိဦးမျိုးလှိုင်ဘက်ကို နောက်ကျောခိုင်းပြီးကုန်းအပေးမှာတော့ ဦးမျိုးလှိုင်ကလဲကုတင်ပေါ်က ခုန်ဆင်းလာပြီး နုဖြူနောက်မှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ကာ နောက်ကိုပြူထွက်နေတဲ့ အရည်ရွှဲရွှဲနဲ့နုဖြူ စောက်ပတ်ထဲကို သူနှင့်စုလှိုင်တို့၏အရည်များနဲ့ရွှဲစိုနေတဲ့ လီးတန်ကြီးတေ့ပြီးတော့ တရှိန်ထိုးကြီး ထိုးသွင်းလိုက်တော့သည်။“ဗြိ ဗြီ ပြွတ် ဖွတ် အင့် အား အမလေးလေး ကျွတ် ကျွတ် ..”ဟူသောညည်းသံလေးနှင့်အတူ မျက်လုံးလေးများစုံမှိတ်ထားတဲ့ နုဖြူမျက်နှာလေးကရှုံ့မဲ့ပြီးတော့ ဦးခေါင်းလေးကလည်း နောက်ကို လန်သွားပါလေတော့သတည်း။
Keep Reading... Subscribe to:
Copyright © X24XX.COM | Contact: support@x24xx.com
စာအုပ် (၂၁နှစ်အောက် မဖတ်ရ)
"Download" "(၂၁)နှစ်အောက်များ မဖတ်ရ"